(No. 26, May 15, 2020)
၁။ တပ်မတော် အပစ်ရပ်ကြေညာချက်သည် မှန်ကန်သည့်သဘောထားမဟုတ်ဟု KNU Concerned Group ပြော
၂။ ပုဒ်မ ၁၇(၁) ကြောင့် ကိုဗစ်အရေး အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် အဆင်မပြေဟု KIA ပြော
၃။ KNU/KNLA (PC) ဥက္ကဋ္ဌ နေရာကို မေလကုန်ပိုင်းတွင် ရွေးချယ်မည်
၄။ ရခိုင်စစ်ပွဲမှာ တပ်မတော်ဘက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယိမ်းဟု တိုင်းရင်းသားအချို့ ဝေဖန်
၅။ တပ်မတော် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ထုတ်ပြန်ချက် မဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့ ဝေဖန်
၆။ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ အတွင်း လားရှိုးမြို့နယ်တွင် အစိုးရတပ်မှ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု များပြုနေ
၇။ စစ်ရေယာဉ်ပေါ် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သည့် တပ်မတော်သားများကို အရေးယူမည်
၈။ အွန်လိုင်းပညာရေးစနစ်အတွက် ကချင်ပြည်နယ်တွင် အင်တာနက်မရနိုင်သည့် မြို့နယ် ၇ ခုရှိ
၉။ ပြည်သူ့လိုအပ်ချက်များအတွက် လှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်သွားရန် ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ စီစဉ်
၁၀။ ပလက်ဝ စစ်ရှောင်များအတွက် မိုးမတိုင်မီ ရိက္ခာပေးပို့ရန် ပြည်နယ်အစိုးရ စီစဉ်
၁၁။ ဘူးသီးတောင်မှာ မိုင်းပေါက်ကွဲ၊ ကလေး နှစ်ဦးသေ၊ တစ်ဦးဒဏ်ရာရ
၁၂။ မြဝတီမြို့တွင် BGF တပ်ဖွဲ့ ဗိုလ်မှူးဟောင်းတစ်ဦး နေအိမ်အား သေနတ်သမားများက ချောင်းမြောင်း ပစ်ခတ်
၁၃။ RCSS/SSA အဖွဲ့ဝင် ၉ ဦး ထွက်ပြေး
၁၄။ AA အဖွဲ့အကြောင်း သတင်းရေးသူတွေကို ခြိမ်းခြောက်တာတွေ ရပ်တန့်ဖို့ CPJ အဖွဲ့တောင်းဆို
၁၅။ မြန်မာ့အရေး ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဆွေးနွေးဖို့ရှိ
၁၆။ ကျောက်တော်က မွတ်ဆလင်ရွာထဲ လက်နက်ကြီးကျကွဲ ၅ ဦး ဒဏ်ရာရ
၁၇။ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ဖျားပိုင်း ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်တွင် နယ်စပ်များ ပိတ်ထားခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း များကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်နေ
၁၈။ ကျိုက်မရောမြို့နယ်တွင် လူစုလူဝေးဖြင့် ဘုရားထီးတော်ပင့်ဆောင်ရန် ဦးဆောင်သူ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင် ထောင်ဒဏ် ၉ လ ချမှတ်ခံရ
၁၉။ တနိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ်ရေး ဖိအားပေးဖို့ အမေရိကန်ကို အရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေတိုက်တွန်း
၂၀။ ဖရူဆိုမြို့နယ်၌ လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်၊ စာသင်ကျောင်းဆောင် ပျက်စီး
၂၁။ လွိုင်ကော်မြို့နယ်တွင် အမျိုးသား ၁ ဦး မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီး သေဆုံး
၂၂။ အင်းထဲ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ယခုထိ အားနည်းနေဆဲ
၂၃။ ဒေါ်လာအင်း မကြုံစဖူးရေခန်းခြောက်မှုနှင့်ကြုံရပြီး ငါးအမြောက်အမြားသေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်
၂၄။ စစ်တပ်လမ်းပိတ်ဆို့မှု ရခိုင်စစ်ရှောင်စခန်း ရိက္ခာပြတ်
၂၅။ မူဆယ်မြို့ နှစ်ည ဆက်တိုက် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်
၂၆။ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရနှင့် ကုလအဖွဲ့များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သက်တမ်းတိုး
၂၇။ အင်းခရမ်းချဉ်သီး စိုက်တောင်သူ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အရှုံးများဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရ
၂၈။ စားသောက်ဆိုင်အမည်ခံပြီး လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သည့်အိမ်အား ရဲတပ်ဖွဲ့များ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီး
မေလ ၉ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ထားသည့် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ၃ လကျော်ကြာ အပစ်ရပ်ကြေညာချက်သည် အမှန်တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားခြင်းကြောင့် မဟုတ်ကြောင်း KNU Concerned Group က ယနေ့ (မေလ ၁၂ ရက်)တွင် သဘောထား ထုတ်ပြန်ကာ ပြောဆိုလိုက်သည်။ တပ်မတော်၏ အပစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ချက်သည် အမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားခြင်း မဟုတ်ဘဲ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်(NCA) အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းများအပေါ် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ရေးနှင့် လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေဆဲ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအပေါ် စစ်ဆင် ချေမှုန်းရေးအတွက် နည်းပရိယာယ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟု ၎င်းအဖွဲ့က ဆိုသည်။
အဖွဲ့၏ ပြောခွင့်ရ ယခင် KNU ဒု-ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ပဒိုနော်စီဖိုးရာစိန်က “အရင်က သူတို့(စစ်တပ်)ရဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပါပဲ။ တစ် ဖက်မှာ အပစ်ရပ်ထားပြီး ကျန်တစ်ဖက်ကို ထိုးစစ်ဆင်တာမျိုးပေါ့။ နေရာဒေသအသီးသီးကို အပစ်ရပ်ပေမဲ့ အထူးသဖြင့် ရခိုင် လိုဒေသမျိုးမှာ AA အပေါ် အပစ်မရပ်ဘူးဆိုတာက တစ်ဖက်ကအင်အားကိုပြန်ယူပြီး ကျန်တစ်ဖက်ကိုအပြီးသတ်ချေမှုန်း ဖို့ဆို တဲ့ ပုံစံမျိုး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လွင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်မျိုးက စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန် တကယ် သွားလိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုတာ ပေါ်လွင်နေပါတယ်” ဟု ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။ “တိုင်းရင်းသားတွေ လိုလားတဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုနဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာက အားလုံးပါဝင်ရေးပါပဲ။ အဓိကက နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းဖို့လို တယ်။ ဒါကြောင့် NCA အပစ်ရပ်ထိုးတဲ့ ဒေသတွေမှာပဲ အပစ်ရပ်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ ဒေသမှာလည်း အပစ်ရပ်ဖို့ အစိုးရက ညွှန်ကြားမှုပေးရမှာဖြစ်သလို စစ်တပ်ကလည်း အပစ်ရပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ အကုန်အပစ်ရပ်နိုင်မှပဲ နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ ပေါ်ထွက်လာ မှာဖြစ်တယ်” ဟု ပဒိုနော်စီဖိုးရာစိန်က ဆက်ပြောသည်။
“အဓိက ပြဿနာက ကျနော်တို့ ဒီက အပစ်မရပ်နိုင်သေးတဲ့ အဖွဲ့နဲ့ အပစ်ရပ်ဖို့လိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ တပ်မတော်က AA (ရက္ခိုင့် တပ်တော်)ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ သဘောမထားနိုင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်တဲ့ အခါကျတော့ ဒီပြဿနာက ဖြေရှင်းဖို့က အတော်ခက်နေတယ်။ အဲ့တော့ AA မပါဘူးဆိုတော့လည်း AA ရဲ့ မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေ KIA အစရှိသည်ပေါ့၊ ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရမလားဆိုတော့လည်း ရဖို့ကတော့ အခက်အခဲတွေရှိပါ တယ်။ တကယ်တမ်း အခုဖြစ်ဖို့ကတော့ တပြည်လုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် လက်နက်ကိုင် တိုက်နေတဲ့ အဖွဲ့အားလုံးပါ တဲ့ ဒီစားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု လိုအပ်တာပေါ့” ဟု ၎င်းက ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။
ထို့အပြင် လတ်တလော ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအပေါ် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် တိုင်း ရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ဂိတ်များကို တပ်မတော်မှ တားဆီးနှောင့်ယှက်မှုများ၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီး နေမှုများသည်လည်း လက်ရှိ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးထက် တိုင်းရင်းသား နယ်မြေဒေသများအပေါ် နယ်မြေစိုးမိုးရေး ဦးတည်ဆောင်ရွက်မှုများသာဖြစ်ကြောင်းလည်း KNU Concerned Group ၏ သဘောထားထုတ်ပြန် ချက်က ဆိုသည်။ KNU Concerned Group သည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လပိုင်းတွင် ယခင်ကေအဲန်ယူ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဟောင်း ပဒိုနော်စီဖိုး ရာစိန် ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်း၍ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ၎င်းတို့၏ စိုးရိမ်ချက်များ၊ ရပ်တည်ချက်များကို အလျင်းသင့်သလို သဘောထား ထုတ်ပြန်မှုများပြုလုပ်သည့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2020/05/%e1%80%90%e1%80 %95%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80
အစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) အကြား ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရန် ဆွေးနွေးသော်လည်း မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှု ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ (၁)ကြောင့် မြေပြင်တွင် လက်တွေ့လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ရန် အဆင်ပြေမည် မဟုတ်ဟု KIA ဘက်မှ ပြောသည်။ ဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘူက “လက်တေတွ့မှာတော့ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိမှာပါ။ ဥပမာ ကျနော်တို့ ဆက်သွယ်ရင် သွားသွားလာလာ ကိစ္စတွေက အခက်အခဲတွေ ရှိမှာ။ ပြောမယ်ဆိုရင် ၁၇ (၁) ကိစ္စက ရှိမှာပါ။ ကျနော်တို့ စိုးရိမ်တာပါ။ မူအားဖြင့်ကတော့ ပူးပေါင်းလို့ရတယ်။ လက်တွေ့ပိုင်း ကတော့ အခက်အခဲအများ ကြီးရှိမှာပါ”ဟု ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဘက်မှ ပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနေဝင်း ၊ ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးမှူး ဒေါက်တာ အေးသိန်းနှင့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များက KIA ၏ ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးကော်မတီမှ ဥက္ကဌ ဦးဆွတ်လွတ်ဂမ်၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂွန်မော်တို့သည် မေလ ၁၃ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဆွေးနွေးပွဲ၌ ကချင် နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC)၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆွန် ၊ ကက်သလစ်အသင်းတော်မှ ဆရာတော်ကြီး ဖရန်စစ် ဒေါ့တန်နှင့် ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့မှလည်း ပါဝင်ကြသော်လည်း တပ်မတော်၏ ကချင်ပြည်နယ် အခြေ စိုက် မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ခြင်း မရှိပါ။
မေ ၁၃ ရက် တွေ့ဆုံပွဲတွင် KIA နယ်မြေတွင်း ရောဂါခြေချုပ်နေသူများအတွက် စားသောက်ရေးပိုင်းတွင် အဆင်ပြေစေရန် ကျပ် ၅၇ သိန်းကို NRPC ၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ မိုင်ဆပ်ပါ ကျေးရွာသို့ လိုက်ပါလာသည့် ကချင်ပြည်နယ်၊ ကျန်းမာရေးဌာနမှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများက ဆေးစစ်ပေးခြင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ပတ်သက် ၍ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ ပြောပြပြီး လက်ကမ်းစာစောင်များ၊ နှာခေါင်းစည်းများလည်း ပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဇော်က “သူတို့နယ်မြေထဲမှာ Quarantine လုပ်ထားတဲ့ ၇၈ ယောက် အတွက် ၂၁ ရက်စာ သွားပြီး ထောက်ပံ့ပေးတယ်။ တဦးကို ၃၅၀ဝ ကျပ်နှုန်းနဲ့ ၂၁ ရက်စာပါ။ ငွေသားနဲ့ ပေးခဲ့တာပါ” ဟု ပြောသည်။ KIA နယ်မြေ အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံထားရသည်ဟု သံသယလူနာ ရှိလာပါက အစိုးရဘက်မှ ဆေးစစ်ပေးရန် စီစဉ်ခြင်းများ ရှိ၊ မရှိ မှာလည်း အသေးစိတ် မသိရှိသေးကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကလည်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ရေး ကုသရေး ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ရန် အကြမ်းဖက်အုပ်စုဟု သတ်မှတ်ထားသည့် အဖွဲ့များ လှုပ်ရှားရာဒေသများမှလွဲ၍ ကျန်နယ်မြေများကို မေ ၁၀ ရက်မှ သြဂုတ် ၃၁ ရက်အထိ အပစ်ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ကြေညာထားသည်။ KIO ဗဟိုကော်မတီကလည်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသည့် ကာလတွင် စစ်ရေးကို အဓိက မထားဘဲ ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည်ဟုလည်းကောင်း၊ ကာကွယ်ရေး ကုသရေးများတွင်လည်း အစိုးရနှင့် အတူတကွ လက်တွဲဆောင်ရွက်မည်ဟု လည်းကောင်း မေ ၁၄ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/14/222631.html
ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ -KNU/KNLA (PC) ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဌေးမောင် မေလ ၃ ရက်နေ့က ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး နောက်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌနေရာကို ယခုမေလကုန်ပိုင်းတွင် ဗဟိုအစည်းအဝေး၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အရ ရွေးချယ်သွားမည် ဟု တာဝန်ရှိသူထံမှ သိရသည်။
ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောထော့လေးအား အဖွဲ့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ယာယီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားပြီး ယခု မေလ နောက်ဆုံးပိုင်းတွင် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးခေါ်ကာ အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးနေရာကို အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ် ချက်အရ ရွေးချယ်သွားမည်ဟု KNU/KNLA(PC) တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး စောကျော်ညွန့်က ယနေ့(မေလ ၁၂ ရက်)တွင် ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။ ၎င်းက “ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြောက်ဖို့ဆိုတာက မိခင် KNU (ကရင်အမျိုးသား အစည်း အရုံး)ရဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံမူဝါဒ အတိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မူဝါဒအားလုံးတော့ မလုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့လေ။ ကိုယ့် အဖွဲ့ရဲ့အခြေအနေ ပကတိ အနေအထား ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအပေါ်မှာ လုပ်ဆောင်သွားမယ်။ မေလကုန် ခါနီးမှ ဥက္ကဋ္ဌ ပြန်ရွေးဖြစ်မယ်။ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးခေါ်ပြီး အားလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လုပ်သွားမယ်” ဟု ပြောသည်။
ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအဖွဲ့သည် ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA)ကို အခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များနှင့်အတူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး ဖက်ဒရယ်တည်ဆောက်ရေး မူဝါဒ လမ်းစဉ်များတွင် KNU အဖွဲ့၏ ဦးဆောင်မှုအနေဖြင့် ၎င်းတို့ ပူးပေါင်းဆောက်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟု တာဝန်ရှိသူများထံမှ သိရ သည်။ ကရင်ပြည်နယ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ JMC-S အရပ်သားကိုယ်စားလှယ် နန်းမြင့်တင် က “ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာရော၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စမှာရော၊ ကရင်အမျိုးသားအရေးဆိုင်ရာမှာရော နားလည် ထားတဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိုးဆို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။ NCA က ဆိုးစေ၊ ကောင်းစေ ပြောဆို လို့ရတဲ့နေရာ တစ်ခုရှိတဲ့အပေါ်မှာ အရေးအရာတစ်ခုကို ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ ကရင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြ တဲ့ အစဉ် အလာ ကောင်းတွေ ရှိစေချင်တယ်” ဟု ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။
KNU/KNLA(PC) အဖွဲ့သည် ကွယ်လွန်သူ အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဌေးမောင်ဦးဆောင်ကာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် KNU အဖွဲ့အ စည်းမှ ခွဲထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်ခရိုင်၊ နော်တယာမြို့ ထို့ကော်ကိုးတွင် အဖွဲ့၏ ဌာနချုပ်အဖြစ် ထားရှိသည်။ http://kicnews.org/2020/05/knu-knla-pc-%e1%80%a5%e1%80%80%e1%81%a0%e1%82%92
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းက လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခကြားတွင် ထိခိုက်သေဆုံးနေသည့် အရပ်သားများဘက်မှ ရပ်တည်မှုမရှိဘဲ တပ်မတော်ဘက်သို့ ဘက်လိုက်နေသဖြင့် တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် ယုံကြည်မှု ကျဆင်းသွားပြီ ဟု KNU Concerned Group က ပြောသည်။ KNU Concerned Group မှာ အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးထားသော ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မဟုတ်ပါ။
KNU Concerned Group ၏ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ပဒိုနော်စီဖိုးရာစိန်က ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင်စစ်တပ် (AA) တို့ကြား ဖြစ်ပွားနေသည့် ပဋိပက္ခတွင် တပ်မတော်ဘက်မှ အရပ်သားများကို မသင်္ကာမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခြင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းနှင့် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် အရပ်သား အစုလိုက်အပြုံလိုက် သေဆုံးခြင်းများအပေါ် နှုတ်ဆိတ်နေ ခြင်းကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝေဖန်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။ ပဒိုနော်စီဖိုးရာစိန်က “သူ အာဏာရ အစိုးရ ဖြစ်လာတော့ ကျမတို့ ပိုပြီးတော့ သူ့ကို ယုံကြည်မှုကျဆင်းလာတယ်။ သူက တပ်မတော်ကို ပိုပြီး ကာကွယ်နေတယ်။ ကျမတို့ မြင်တယ်။ သိတယ်။ လူထုတွေ ခံစားနေရတာတွေ ပြောသင့်ပြောထိုက်တာတွေကို သူမပြောဘူး” ဟု ဆိုသည်။
AA ၏ မဟာမိတ်ဖြစ်သည့် တအန်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA) ၏ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူး မိုင်းအိုက်ကျော်ကလည်း ရခိုင်ပဋိပက္ခတွင် အရပ်သားများ အထိနာနေသည့်အပေါ် အစိုးရဘက်မှ တာဝန်ယူပေးရန် လိုအပ်သည်ဟု ပြောသည်။ “အစိုးရက တစုံတရာ ဝင်ပြီး ဟန့်တားတာ ညှိနိငင်းပေးတာ ဘာမှမရှိဘူး။ လူထု ဒုက္ခ ရောက် နေတာ အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုမပြေလည်လို့ တိုက်ပွဲဖြစ်တာက တကဏ္ဍပါ။ လူထု ဒုက္ခရောက်နေ တာကတော့ အစိုးရက ဖြေရှင်းပေးဖို့လိုပါတယ်” ဟု ဗိုလ်မှူးမိုင်းအိုက်ကျော်က ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန (NRPC)မှ AA အပါအဝင် မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် ၄ ဖွဲ့နှင့် ပဏာမ အပစ်ရပ် စာချုပ် (Bilateral) ချုပ်ဆိုနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းနေမှုသည်လည်း ပြေလည်ခြင်း မရှိ သေးပါ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/14/222615.html
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး၏ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ထုတ်ပြန်ချက်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်ခုံရုံး (ICJ) တွင် ရင်ဆိုင်နေရသည့် နိုင်ငံတကာ ဖိအားများကိုလျှော့ချရန် ဟန်ပြထုတ်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု ညီနောင် မဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့က ဝေဖန် ပြောဆိုသည်။ ညီနောင် မဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင် တအန်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (TNLA) မှ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး မိုင်းအိုက်ကျော်က “သူတို့က နိုင်ငံတကာ ဖိအားလျှော့အောင်လုပ်တာလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ ဟန်ပြ ထုတ်တယ် လို့မြင်တယ်။ ကုလသမဂ္ဂက တိုက်တွန်းထားတာလည်းရှိတယ်။ ပြီးရင် ရခိုင်ဘက်မှာ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု တော်တော် များများကို လုပ်တယ်။ ဖိအားတွေ လျော့နည်းအောင် အခုလို ထုတ်တာလို့ပဲ မြင်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
တပ်မတော် အနေဖြင့် COVID-19 အတွက် ကူညီရန် အပစ်ရပ်ဆိုင်းပေးပါသည်ဟု ပြောဆိုသော်လည် ၎င်းတို့လှုပ ရှားသည့် နယ်မြေအတွင်းမှ ဒေသခံများထံသို့ လာရောက်ကူညီပေးခြင်းများ တစုံတရာမရှိသေးပါဟု ဗိုလ်မှူး မိုင်းအိုက်ကျော်က ပြော သည်။ ထို့ပြင် အပစ်ရပ်ဆိုင်းသည့်ထဲတွင် တိုက်ပွဲများ အပြင်းထန်ဆုံး ဖြစ်ပွားနေသည့် ၎င်းတို့၏ မဟာမိတ် ရက္ခုင်စစ်တပ် (AA) လှုပ်ရှားရာ ဒေသများကို ချန်လှပ်ထားခဲ့ခြင်းကလည်း အမှန်တကယ် အပစ်ရပ်ဆိုင်းလိုခြင်းမရှိကြောင်းကို ပြသနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ညီနောင် မဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့ဖြစ်သည့် TNLA ၊ မြန်မာ အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ် မတော် (MNDAA) နှင့် ရက္ခိုင်စစ်တပ် (AA) တို့က မေ ၁၀ ရက်ကလည်း တပ်မတော်၏ အပစ်ရပ်စဲကြောင်း ကြေညာချက် အပေါ် ဝေဖန်သည့် ထုတ်ပြန်ချက်တစောင် ထုတ်ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း တပ်မတော်က လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်နေသည်ဟုသည့် စွပ်စွဲ ချက်များဖြင့် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ၏ တရားစွဲဆိုထားမှုကြောင့် ICJ တွင် တရားရင်ဆိုင်နေရဆဲ ဖြစ်သည်။ ထိုထဲတွင် တပ်မတော် ဘက်မှ အပစ်ရပ်သည်ဟု ကြေညာသော်လည်း MNDAA လှုပ်ရှားရာ ကိုးကန့်ဒေသတွင် စစ်ရေးတင်း မာမှုများနှင့် တိုက်ပွဲများ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း၊ AA လှုပ်ရှားရာ ဒေသများကို ချန်လှပ်ထားခဲ့သည့်အပေါ်တွင် ထောက်ပြ ဝေဖန်ချက်များလည်း ထည့် သွင်း ရေးသားထားသည်။
ဗိုလ်မှူး မိုင်းအိုက်ကျော်က “ကျနော်တို့ ရှောင်နေလို့ တိုက်ပွဲက မဖြစ်တာ။ မဟုတ်ရင် နေရာတကာမှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အနေအထား ရှိတယ်။ သူတို့နဲ့က မိုင်အားဖြင့် ၄ မိုင်၊ ၅ မိုင်ကနေ ၁၀ မိုင် ဝန်းကျင်ကို ပတ်ပတ်လည် လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိနေတာ။ ရွာ တွေမှာ လည်း ဝင်နေတာ ရှိတယ်။ နည်းနည်း ထပ်လှုပ်ရှားလိုက်တာနဲ့ တိုက်ပွဲ အမြဲတမ်း ဖြစ်မယ့် နေရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြော သည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/12/222470.html
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့နယ်အတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ကိုဗစ်-၁၉ ထိန်းချုပ် ကာကွယ်သည့် ကာလအတွင်း စစ်အင်းအားတိုးချဲ့မှုများပြုလုပ်ကာ ရွားသားများကိုအတင်းအဓမ္မခိုင်းစေမှုများပြုလုပ်နေကြောင်း သျှမ်းလူ့အခွင့်အရေး မဏ္ဍိုင် က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မေ ၁၁ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သော SHRF ၏ အဆိုပါကြေငြာချက်သည် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း အစိုးရ တပ်များ လားရှိုးမြို့နယ်အတွင်း စစ်ရေး အရှိန်မြင့်ခြင်း၊ လယ်သမားများအား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ခြင်း နှင့် ရွာသားများ အား အတင်းအဓမ္မ ခိုင်းစေခြင်းတို့ပြုလုပ်နေသည်ဟု ရေးသားထားသည်။ ဧပြီ ၂၄ ရက် က အစိုးရတပ်မ ၉၉ မှ တပ်သား များ သည် လားရှိုးမြို့နယ် ဝမ်ဟိုဆေ ကျေးရွာသား တဦးသည် နွားကျောင်းပြန်လာသည်ကို ဖမ်းဆီး ရိုက်နှက်ကာ ပစ်သတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ တပ်မတော် မှ သေနတ်ပစ်သတ်ခံရသည့် အသက် ၂၇ နှစ် အရွယ် အဆိုပါ အမျိုးသားကို ဧပြီ ၂၆ ရက် မှ မိသားစုဝင်များက ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းလည်း SHRF ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ပြင် လားရှိုးမြို့ နယ် မိုင်းကျက် ကျေးရွာအုပ်စုနေ ရွာသားများကိုလည်း မြန်မာ့တပ်မတော်က ဧပြီလက လုပ်အား စေခိုင်းခြင်း တို့ကို ပြုလုပ် သေးကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ရေးသားထားသည်။
“ ကျနော်တို့ အနေနဲ့က ဒီလို ကာလမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်အနေနဲ့ ဒေသခံ ပြည်သူတွေကို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာ၊ အတင်းအဓမ္မစေခိုင်းတာ၊ သတ်ဖြတ်တာတွေကို ရှုံ့ချပါတယ်။ ဒါက မဖြစ်သင့်တဲ့အရာပါ” ဟု SHRF ၏ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ စိုင်းဟော်ရှဲန် က သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ပြောသည်။ သျှမ်းလူ့အခွင့်အရေး မဏ္ဍိုင် အနေဖြင့် အစိုးရစစ်တပ်၏ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ များအား ဆက်တိုက် နှိပ်စက် ညှင်းပန်းခြင်း၊ တရားမဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အတင်းအဓမ္မစေခိုင်းမှုကို ရှုတ်ချကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် လက်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ အချိန် စစ်တပ်မှ ကပ်ရောဂါအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ထောက်ပံ့ကူညီပေးသင့်ကြောင်းလည်း ဝေဖန်ထောက် ပြလိုက်သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16520
လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများတွင် ပျံ့နှံ့နေသော လူငါးဦးကို ရိုက်နှက်စစ်ဆေးနေသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ တပ်မတော်သားများကို စစ်စည်းကမ်းဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူသွားမည်ဟု တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ ” ပုဏ္ဏကျွန်း ကျောက်ဆိပ်ကျေးရွာမှာ အေအေ နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ လူငါးဦးဖမ်းဆီးခဲ့တယ်။ သူတို့ကို စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့တယ်။ စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတော့ ဒီလူတွေကို တရားစွဲတင်နိုင်ရေးအတွက် စစ်တွေ ရဲစခန်းကို ပို့ဖို့ ဆောင်ရွက်တယ်။ စစ်တွေကို ပို့တဲ့အခါမှာ စစ်ရေယာဉ်နဲ့ပို့ခဲ့တယ်။ အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာ တွေ့ရတာကတော့ စစ်ရေယာဉ်မှာ အစောင့်လိုက်ပါသွားတဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက သူတို့ကို တရားဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါ တယ်။ တရားဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို စစ်စည်းကမ်းအရ အရေးယူသွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ အရေးယူနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။
အရေးယူခံရမည့် တပ်မတော်သားအရေအတွက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲ ဖြစ်စဉ်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ကျောက်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် တပ်မတော်မှ ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှင့် ဆက်နွယ်သည်ဟုဆိုကာ ဒေသခံ များကို ဖမ်းဆီးပြီး စစ်တွေမြို့မ ရဲစခန်းသို့ တပ်မတော်စစ်ရေယာဥနှင့် ပို့ဆောင်စဉ် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရိုက်နှက် စစ်မေးနေသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်တခု မေလဆန်းတွင် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဘယ်နှစ်ဦးရှိလဲဆိုတာတော့ မပြောနိုင်သေးဘူး။ အဲ့ဒီမှာ ပါသွားတဲ့ လုံခြုံရေးတပ်မတော်သားတွေ အကုန်ကိုတော့ ထိန်းသိမ်း ထားပြီးဖြစ်တယ်။ အကုန်လုံးကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး အရေးယူရမယ့် သူကို ထပ်မံစစ်ဆေးနေတယ်။ စစ်စည်းကမ်းအရ အရေး ယူသွားမယ်။” ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝတို့တွင် ရခိုင်တပ် အေအေ နှင့် တပ်မတော်တို့ကြား တိုက်ပွဲ ခပ်စိပ်စိပ်ဖြစ်နေပြီး နှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုများရှိကာ အရပ်သားသေဆုံးမှုများလည်း ရှိသည်။ http://www.mizzimaburmese.com/article/69780
ကချင်ပြည်နယ်ရှိ အခြေခံပညာ စာသင်ကျောင်းများတွင် စနစ်သစ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် သင်ကြားမည် ဆိုပါ က အင်တာနက်မရနိုင်သည့် မြို့နယ် ၇ ခု ရှိသည်ဟု သိရသည်။
အွန်လိုင်းစနစ်သင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် အခြေခံပညာရေးဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်)မှ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ ဆရာ/မ များအား မေလ ၁၁ ရက်နေ့မှစတင်ကာ စမ်းသပ်သင်ကြားနေပြီးဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် ပညာရေးမှူးရုံးမှ ပြည်နယ် ဒု ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ခင်နှင်းဦး ပြောသည်။ “ခုလောလောဆယ်တော့ ဆရာမခြောက်ယောက်ကို အရင်ဆက်သွယ်ပြီးမှ လုပ်ကြည့်မှာပေါ့။ ဒီ ဆရာမ ခြောက်ယောက် အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာမတွေအားလုံးက မှတ်ပုံတင်ရမယ်။ ခုလော လောဆယ်တော့ ၂ ရက်ဆက်တိုက် စမ်းသပ်နေပြီဖြစ်တယ်။ မနေ့ကထက်ဆိုရင် ဒီနေ့တော့ အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကချင်ပြည်နယ်မှာ တစ်ကမ်းတမ်း ဒီစနစ်သစ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို သင်ကြားမယ်ဆိုရင် အင်တာနက်မရတဲ့နေရာတွေက ဆရာ/မတွေအတွက် ခက်ခဲတွေရှိမယ်” ဟု ဒုညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ခင်နှင်းဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိ ကချင်ပြည်နယ်တွင် အင်တာနက်မရသေးသော မြို့နယ် ၇ ခုမှာ တနိုင်း၊ ချီဖွေ၊ ဆော့လော်၊အင်ဂျန်ယာန်၊ ခေါင်လန်ဖူး၊ နောင်မွန် နှင့် ဆွမ်ပရာဘွမ် စသည့်တို့ဖြစ်သည်။
စနစ်သစ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသစ်ပို့ချရန်နှင့် ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်ရမည့် အစီအစဉ်များအား တိတိကျကျ ညွှန်ကြားချက်မရှိသေးသည့်အပြင် အခြေခံစာသင်ကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်မည့်ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ညွှန်ကြားချက်တစ်စုံ တစ်ရာမရှိသေးကြောင်း ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/05/13/%e1%80%a1%e 1%80%bd%e1%80%94 %e1%80%ba%e1
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ပြည်သူများ၏ လတ်တလောတွေ့ကြုံနေရသည့် အခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များကို တဖက် တလမ်းမှ ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ-KNDPက ကူညီလှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်ပေးသွားရန် စီစဉ် နေကြောင်း ပါတီတာဝန်ရှိသူများထံမှ သိရသည်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲရှောင် ပြည်သူများ၊ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး စီမံ ချက်များအပြင် လက်ရှိပြည်နယ်အတွင်း နေရာတော်တော်များများတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် ရေပြတ်လပ်မှု အခြေအနေများအတွက် ကူညီနိုင် ရန် ပါတီအနေဖြင့် ယခုလို ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KNDP ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ မန်းအောင်ပြည်စိုးက ပြောသည်။ “မေလ ၉ ရက်နေ့ မှာ (ပါတီတွင်း)သီးသန့် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ ပါတီအတွက် ဇောင်းပေးတာ မျိုးမဟုတ်ဘဲ တကယ့်စေတနာနဲ့ နိုင်သလောက် စုကြဆောင်းကြတာပေါ့။ ဒီတစ်ခေါက်က တစ်သောင်းကစ ၅ သိန်းအထိ လှူကြတာ ရှိတယ်လေ။ ဆက်လက် ပြီး လှူဒါန်းသွားဖို့လည်း ရှိပါတယ်။” ဟု ကေအိုင်စီသို့ ယနေ့ (မေလ ၁၂ ရက်)တွင် ပြောသည်။ လိုအပ်သည့် နေရာများတွင် လှူဒါန်းရန်အတွက် ကောက်ခံရရှိသည့် ရံပုံငွေ ကျပ်သိန်း(၃၀) ကျော်အား မေလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကမမောင်းမြို့နယ်ခွဲ၊ ဝါသိုခို ရွာရှိ တိုက်ပွဲရှောင်များအတွက် ဆန်အိတ်များ၊ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးမှူးမှတဆင့် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်း ချုပ်ရေးစီမံချက်၊ ၁၂ ရက်နေ့တွင် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ မြိုင်ကြီးငူရှိ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက် ဆန်နှင့်အဝတ်အထည်များ လှူဒါန်းခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဟု မန်းအောင်ပြည်စိုးက ဆက်ပြောသည်။
ထို့အပြင် ရေရှားပါးနေသည့် ဖားအံမြို့နယ်ရှိ အနောက်ဖက်ကမ်း၌ ရသေ့ပျံ၊ ဘားကပ် ကျေးရွာအုပ်စုများနှင့် အရှေ့ဖက်ခြမ်း၌ သာမညဒေသများသို့ လာမည့်ရက်ပိုင်းအတွင်း ရေများသွားရောက်လှူဒါန်းသွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်းလည်း KNDP တာဝန်ရှိ သူများထံမှ သိရသည်။ ဖားအံမြို့နယ်ရှိ အင်းအိုင်၊ ရေတွင်းများမှ ရေများမည်းနက်သည့် အရောင်ပြောင်းလဲသည့် ကိစ္စဖြစ်ပေါ် ပြီးနောက်ပိုင်း ရေပြဿနာပူပန်ခဲ့ရသည့် ဒေသခံများအတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက် တစ်ပါတီ-KNDP မှ ဦးဆောင်၍ သောက်ရေနှင့်သုံးရေများကို သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့ဖူးသည်။ http://kicnews.org/2020/05 /%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80
တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင်စစ်တပ် (AA) တို့၏ တိုက်ပွဲများကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာလာရသည့် ပလက်ဝ စစ်ရှောင်များအတွက် မိုးတွင်း ကာလမတိုင်မီ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရက ဆန်အိတ် ၃၅၀ဝ ပို့ပေးရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၊ စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက် က “ဆန်အိတ် ၃၅၀ဝ နဲ့ စားစရာတွေ အကုန် ပို့ဖို့ တော့လုပ်နေတယ်။ ဆန်အိတ်က ၃၅၀ဝ ဆိုတော့တလစာလောက်တော့ရမှာပေါ့။ ပို့ဖို့ကလမ်းမှာတိုက်ပွဲကလည်း ဆက်တိုက် ဖြစ်နေတော့ လုံခြုံရေးကောင်းမှ ပို့လို့ရမယ့် အခြေအနေပါ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ထို ရိက္ခာဆန်များကို ဆမီးမြို့အပြင် ပလက်ဝမြို့ပေါ်နှင့် ရှင်းလက်ဝ၊ မီးဇာအထက်ပိုင်းရှိ စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် ပို့ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့်ရက်၊မည်သည့်လမ်းက ပို့ဆောင်မည်ကိုမူ လုံခြုံရေးအရမပြောလိုကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ စစ်ရှောင် များအတွက် ပို့ဆောင်မည့် ဆန်အိတ် ၃၅၀ဝ အနက် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်ဖြင့် ဝယ်ယူထားသော ဆန်အိတ် ၃၂၀ဝ ပါဝင်ပြီး ပြည်သူလူထုက ဝယ်ထားသည့် ဆန်အိတ်၂ ထောင်ကျော် ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ချင်းပြည်နယ်တွင် နှစ်စဉ် ဖြစ်နေကျ မိုးများသည့်အခါ ကားလမ်းချော်ခြင်း၊ တောင်ပြို မြေပြိုခြင်းများရှိနိုင်ပြီး တိုက်ပွဲများ ကလည်း ပြင်းထန်နေဆဲ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မိုးမကျမီ ဆန်အိတ်များကိုအမှီ တင်ပို့သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က ဆိုသည်။ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိုင်နန်းဝေက “ကျမတို့အနေနဲ့ စစ်တပ်ကို မေတ္တာရပ်ခံချင်တာက ဆန်အိတ် ပို့တဲ့ကာလမှာ ကျမတို့ကို အကူအညီပေးဖို့၊ နောက်မို့ဆိုရင် စစ်ဘေးနဲ့တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်တဲ့ လူထုကအခြေခံ စားသောက် ကုန် ရှားပါးတာကြောင့် တော်တော်လေး အဆင်မပြေကြဘူး” ဟု ပြောသည်။
ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ၃၉၃ ရွာ ရှိသည့်အနက် ကျေးရွာတဝက်ကျော်က စစ်ဘေးသင့်နေရသလို ဆမီးနှင့် ပလက်ဝ မြို့ပေါ်တွင် ရောက်ရှိနေသည့် စစ်ရှောင်ကျေးရွာပေါင်း ၇၀ ခန့်ရှိနေပြီး အဆက်အသွယ်မရသည့် ကျေးရွာများစွာရှိနေသေးကြောင်း စည်ပင် ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က ဆိုသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/13/222561.html
ခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင်းက သရက်ပြင်ရွာမှာ မိုင်းနင်းမိပြီး ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင် ကလေး နှစ်ဦး သေဆုံးကာ တစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုင်းဟာ ဘယ်သူ့လက်ချက်ဆိုတာတော့ မသိရသေးပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင် ကလေး ငယ် သုံးဦးဟာ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ ချာကေရွာကနေ သရက်ပြင်ရွာကို အသီးသွားခူးရင်း မိုင်းနင်းမိခဲ့တာဖြစ် တယ်လို့ လုံခြုံရေးအရ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ဒေသခံတစ်ဦးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
သေဆုံးသွားတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို ဆက်သွယ်ချိန်မှာ သေဆုံးတာမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့ ဘာသာစကား အခက် အခဲကြောင့် အသေးစိတ်ကို RFA က မေးလို့မရခဲ့ပါဘူး။ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP က ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းအောင်သိန်းကတော့ သေဆုံးသွားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာကလေး နှစ်ဦးမှာ ချာကေရွာက အသက် ၁၅ နှစ် အရွယ် အတူလာမီနဲ့ အသက် ၁ဝ နှစ်အရွယ် ရာဟတ်နာဟာတူတို့ ဖြစ်ကြပြီး၊ ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ အသက် ၁ဝ နှစ်အရွယ် ကလေး ကတော့ ဖုန်ညိုလိပ်ရွာ ၁ဝ ရပ်ကွက်က ဟာဒေကာဘေဘီ တို့ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။ “နှစ်ယောက်သေတယ်၊ နောက်တစ်ယောက်က ဟာဒေကာဘေဘီ အဖေနာမည်က အဘူဘိုရှော ၁၀ နှစ်၊ သူက ဖုန်ညိုလိပ် ၁၀ ရပ်ကွက်လို့ ပြော တယ်။ သူကတော့ ဒဏ်ရာရတယ်။ အခုအချိန်က သူ ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ ပြောတယ်။” ကလေး တစ်ဦးဟာ မိုင်းနင်း မိတဲ့နေရာမှာတင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ နောက်တစ်ဦးကတော့ ဆေးရုံကိုအသွားလမ်းမှာတင် သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်မသေဘဲ ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ် ကလေးကတော့ ဘူးသီးတောင်ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေတယ် လို့ ဖုန်ညိုလိပ်ရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောပါတယ်။
တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ဒီနေရာမှာ မိုင်းဘယ်သူ ထောင်သလဲ ဆိုတာ သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို မေးရင် သိနိုင်ကြောင်း၊ ရခိုင်ရွာမှာ တပ်မတော်က မိုင်းထောင်ရင် မိုင်းထောင် နေပါတယ်လို့ ဝိုင်းဝန်းပြောကြမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အဲဒီအနားက မွတ်စလင်ရွာမှာ အရင်ကလည်း ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ဖူးကြောင်း၊ AA မိုင်းလာထောင်ရင်း ရွာသားတွေနဲ့ ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ဖူးကြောင်း RFA ကို ပြောကြားပါတယ်။ ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ခိုင်သုခ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ – ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိကြောင်း၊ သရက်ပြင်ရွာဟာ ရွာဟောင်း ဖြစ်ပြီး အရင်ကတပ်မတော်ကနေ ထောင်ခဲ့တဲ့ မိုင်းတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့ မရှင်းလင်းရသေးတဲ့အတွက် လက်ကျန်မိုင်းတွေဖြစ် တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/buthedaung-explosion-05132020061644.html
၁၂။ မြဝတီမြို့တွင် BGF တပ်ဖွဲ့ ဗိုလ်မှူးဟောင်းတစ်ဦး နေအိမ်အား ကားစီးလာသည့် သေနတ်သမားများက ချောင်းမြောင်း ပစ်ခတ်
ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်၊ အာရှလမ်းနှင့် အနန္တဂုဏ်ရည်လမ်းထောင့်၊ မင်းပဒုမ္မာဝင်းရှိ BGF တပ်ဖွဲ့ ဗိုလ်မှူးဟောင်းတစ်ဦး၏ နေအိမ်အား ကားစီးလာသည့် သေနတ်သမားများ ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်သည့်ဖြစ်ရပ် မေလ ၁၂ ရက် ည ၉ နာရီ ၂၀ ခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြဝတီမြို့ အမှတ် (၄)ရပ်ကွက်၊ အာရှလမ်းနှင့် အနန္တဂုဏ်ရည်လမ်းထောင့်၊ မင်းပဒုမ္မာဝင်း ဦးစောတင်မြင့် (၆၂) နှစ် (ဘ) ဦးမွန်ရှင်း၏ နေအိမ်ခြံဘေးသို့ Double Cap ယာဉ်တစ်စီး (စိစစ်ဆဲ) ရောက်ရှိလာပြီး ကားပေါ်မှ ဆင်းလာသည့် လူတစ်ဦးက ၉.မမ ပစ္စတိုသေနတ်ဖြင့် ၂ ချက်ပစ်ပြီး မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။“ပစ်ပြီးတော့ ကားပေါ်တက် ထွက် သွားတာ၊ မြို့ပြင်ဘက်ခေါင်းလှည့်ပြီး ကျွန်တော် ထွက်လာမလား စောင့်နေတယ်၊ အရှည်ပါရင်လည်း ပါမှာပေါ့၊ ကျွန်တော် အပြင်ဘယ်ထွက်မလဲ၊ အရူးမှ မဟုတ်တာ၊ ကျွန်တော့် အိမ်ထဲဝင်လာ၊ တံခါးချက်ချင်းဖွင့်ပေးတယ်၊ ကျွန်တော့်မှာ ဓားပဲရှိတယ် ဆိုတော့ လိုက်လို့မှမရတာ၊ ကျွန်တော်မီးပါ ပြန်ဖွင့်ပေးတယ်။ လူအားလုံး ၈ ယောက်လောက်ရှိတယ်၊ ပြဿနာ ဖြစ်လာရင် တော့ ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့” ဟု ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရသူ စောတင်မြင့်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ နေအိမ်တွင် ဦးစောတင်မြင့်နှင့် အတူရှိနေသည့် ယောက်ဖဖြစ်သူ ကိုဘတိုက “သူတို့က မြို့ထဲဘက်ကလာတာ။ ကား ကနောက်ဖွင့်ကား၊ တစ်ချက်ပစ်သံကြားတော့ ထကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်က အိမ်ထဲမှာ၊ နောက်တစ်ခေါက်ပစ်တော့ ခေါင်းငုံ့ နေလိုက်တယ်။ ကားပေါ်မှာတော့ လူဆယ်ဦးခန့် ရှိမယ်ထင်တယ်။ အရပ်ဝတ်နဲ့ပါပဲ။ မြို့ထဲဘက်ကလာပြီး မြို့ထဲဘက်ကို ပြန်မောင်းသွားတာ တွေ့ရပါတယ်”ဟုဆိုသည်။ BGF ဗိုလ်ှမှူးဟောင်းတစ်ဦး၏ နေအိမ်တွင် ယခုဖြစ်စဉ်မှာ ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ကြံခြင်း ခံရခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ယခင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့ နံနက် ၇ နာရီခွဲ ခန့်ကလည်း မိုင်းနှစ်လုံး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာ လူနှစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အာရှလမ်းမကြီးဘေးရှိ မင်းပဒုံမာဝင်း နေအိမ်တွင် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းအရ မြဝတီခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲမှူး ဒုတိယရဲမှူး ကြီး သက်လင်းဦးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ တပ်မတော် ရှေ့တန်ရုံးမှ တပ်မ တော်သားများ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ https: //news-eleven.com/article/173359
RCSS/SSA ၏ တပ်ပြေး ၉ ဦး သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းတုံမြို့နယ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာရာ အစိုးရတပ်မှ ထိန်းသိမ်းထားပြီး စစ်ဆေးမှုပြုနေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရသည်။
သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ/သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA တပ်ဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးသည် မေ ၉ ရက်တွင် မိုင်းတုံ မြို့နယ်သို့ လက်နက်မဲ့ဖြင့် ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်း RCSS/SSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး စိုင်းခမ်းစံ က သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။“ထွက်ပြေးသွားတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ၉ ယောက်စလုံးက တပြိုင်တည်း တခါတည်းထွက်ပြေးသွားတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ အကြောင်းရင်းတွေ စစ်ဆေးနေတုန်းပဲ”ဟု RCSS/SSA ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး စိုင်းခမ်းစံ ကပြောသည်။ ထွက်ပြေးခဲ့သည့် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးသည် တပ်စုမှူး အဆင့်ရှိသော သူ တစ်ဦး ပါဝင်နေကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရသည်။
“ထွက်ပြေးရတဲ့ အကြောင်းကို အသေးစိတ် စုံစမ်းနေဆဲ”ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး စိုင်းခမ်းစံ ကပြောသည်။ ထွက် ပြေးလာသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၉ ဦးကို မိုင်းတုံမြို့နယ်ရှိ နယ်မြေခံ စစ်ဗျူဟာမှ စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း ကမ္ဘောဇတိုင်း သတင်းဌာန မှာဖော်ပြထားသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16507
မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ နိရဉ္စရာ သတင်း Website အယ်ဒီတာ ခိုင်မြတ်ကျော်ကို တရားစွဲဆိုထားတာကို ရုပ်သိမ်းပေး ဖို့နဲ့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA သတင်းတွေကို ရေးသားတင်ပြနေတဲ့ သတင်းထောက်တွေကို ခြိမ်းခြောက်နေ တာတွေကို ရပ်ဆိုင်းဖို့ သတင်းသမားများ အကာအကွယ်ပေးရေးကော်မတီ( Committee to protect Journalists-CPJ) က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ မတ်လကုန် ၃၁ ရက်နေ့က အယ်ဒီတာခိုင်မြတ်ကျော်ကို AA အဖွဲ့ပြောခွင့်ရတဲ့ ဆက်သွယ် အင်တာဗျူး လုပ်ခဲ့တာကြောင့် အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေနဲ့ စစ်တွေမြို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က တရားစွဲဆိုခဲ့သလို သူ့ရဲ့ သတင်းဌာနကိုလည်း ရဲတပ်ဖွဲ့က စီးနင်း ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်း ၃ ဦးကို စစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ ခေတ္တ ထိန်းသိမ်းခဲ့တာကို CJP က သတင်းရရှိကြောင်းနဲ့ အဲဒီနောက် အယ်ဒီတာ ခိုင်မြတ်ကျော် ရှောင်ပုန်း နေခဲ့ ရကြောင်း သတင်းသမားတစ်ဦးကို ကိုးကားပြီး CJP က ပြောပါတယ်။
အကြမ်းဖက်ဥပဒေတွေနဲ့ သူ့ပေါ်တရားစွဲဆိုထားတာကို ချက်ချင်း ရုပ်သိမ်းသင့်ကြောင်းနဲ့ သတင်းသမားတွေကို အကြမ်းဖက် သမားအဖြစ် မသတ်မှတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံက ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားရာနေရာတွေမှာ သတင်းယူဖို့ ခွင့်ပြုရမှာ ဖြစ်ကြောင်း CPJ ရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသ ကိုယ်စားလှယ် Shawn Crispin က ပြောပါတယ်။မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တစ်နေ့တည်းမှာပဲ မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေက အလားတူ စွဲချက်နဲ့ VOICE OF MYANMAR အယ်ဒီတာ ကိုနေလင်းကို AA ပြောခွင့်ရ ခိုင်သုခနဲ့ အင်တာဗျုးကို ထုတ်ဝေမှုအတွက် တရားစွဲဆိုခဲ့ပေမယ့် ဧပြီ ၁၀ ရက်နေ့မှာတော့ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ ရိုက်တာ သတင်း တရပ်မှာ ပါရှိပါတယ်။ https://burmese.voanews.com/a/myanmar-media-cpj-/5418719.html
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ကြာသပတေးနေ့ကျရင် ဗွီဒီယိုကတဆင့် ဆွေးနွေးရာမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဆက်လက် ဖြစ် ပွားနေတဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေနဲ့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေတွေကို အဓိက အာရုံစိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ သံတမန်အသိုင်း အ၀န်းက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်းကလည်း လတ်တလောကြုံနေရတဲ့ကပ်ရောဂါအပြင်၊ လုံခြုံရေး ကိစ္စတွေ ပါဝင်နိုင်ကြောင်း ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းကို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ သိသလောက်ကတော့ အစည်းအဝေးကတော့ Public မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ သူတို့အချင်းချင်းပဲ တံခါးပိတ်ပေါ့။ ဒီ အစည်းအဝေးမှာ ကုသသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener ကနေ အခြေ အနေကို Briefing လုပ်ဖို့ပါ အဓိကကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COVID-19 နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့နိုင်ငံတွေကသိချင်လို့ Video Conferencing ခေါ်ပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီက လုပ်မှာပါ။ လုပ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်က Brief လုပ် မယ်၊ သူတို့က မေးချင်တာတွေမေးမယ်ပေါ့။ အဓိကကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက COVID-19 ကိစ္စ ဘာတွေလုပ်ထားလဲ။ နောက်စစ်ရှောင်စခန်းတွေအကြောင်း အရပ်သားတွေအခြေအနေ နောက် လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေလည်း ပါမှာပေါ့ဗျာ။” အခု လို အထူးကိုယ်စားလှယ်ကို ခန့်ပြီးချိန်မှာ အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ခြောက်လတခါလောက် အသိပေးဖို့ ဆိုတဲ့ဟာ ရှိတယ် မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေ တိုးတက်မှုဆိုတာကလည်း အခုလာမယ့် ဇွန်လလောက်ဆို ပြည့်ပြီဆိုတော့ အဲ့ဒီ့တပိုင်း လည်း ဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။ အထွေထွေညီလာခံက အခုမလုပ်ဖြစ်သေးတော့ အခု Brief လုပ်ရတာပေါ့ အခု ကိုဗစ် အခြေ အနေကလည်းဖြစ်နေတော့ ပေါင်းပြီးလုပ်လိုက်တယ်ထင်တယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဧပြီလနှောင်းပိုင်းတုန်းက COVID-19 ဓါတ်ခွဲနမူနာတွေ သယ်ဆောင်လာတဲ့ ကုသသမဂ္ဂ အမှတ်တံဆိပ်ပါကားတစ်စီး တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရလို့ မြန်မာနိုင်ငံသား ယာဉ်မောင်းသေဆုံးပြီး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း တစ်ဦးလည်း တိုက်ခိုက်မှုကို ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် Antonio Guterres က အပြင်းအထန် ရှုတ်ချခဲ့ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လည်း တောင်းဆိုထားတာပါ။ ဒီကိစ္စဟာလည်း လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးမှာ ပါဝင်နိုင်ကြောင်း ဦးဟောက်ဒိုဆွမ်းက ပြောပါ တယ်။ https://burmese.voanews.com/a/rakhine-conflicts-unsc/5416270.html
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းက မွတ်ဆလင်ရွာများဖြစ်သည့် ပိုက်သည်နှင့် လက်ဆောင်ကောက် ကျေးရွာများ အတွင်း မေ ၁၁ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက လက်နက်ကြီးကျည် ကျမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့သဖြင့် ရွာခံ ၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဒဏ်ရာရရှိသူများမှာ ပိုက်သည် မွတ်ဆလင်ရွာမှ အမျိုးသမီးငယ် ၂ ဦးနှင့် အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် ယောင်္ကျားလေး ၁ ဦး၊ လက်ဆောင်ကောက်ကျေးရွာမှ အမျိုးသား ၂ ဦးတို့ ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာသားများက ပြောသည်။ လက်ဆောင်ကောက် ကျေးရွာမှ ရာအိမ်မှူး ဦးမောင်ဖြူက “မနေ့က ညနေပိုင်း ၅ နာရီလောက်မှာ လက်နက်ကြီးကျလို့ ကျနော်တို့ရွာက မော်လဝီ ဆရာကြီး ၁ ဦးနဲ့ ကျောင်းဆရာ ၁ ဦး ဒဏ်ရာရပါတယ်။ နောက်ထပ် ပိုက်သည်ရွာက အမျိုးသမီး ၂ ဦးနဲ့ ကလေး ၁ ဦး ဒဏ်ရာ ရပါတယ်။ ပစ်တာကိုတော့ ကျနော် မမြင်ဘူး။ ရွာသားတွေ ပြောတာက ကစ္စပနဒီတံတားပေါ်ကနေ အစိုးရတပ်မတော်က လှမ်းပစ်တာလို့ ပြောပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကစ္စပနဒီ တံတားအနီးရှိ မြို့ခံများက ယမန်နေ့က ညနေပိုင်းက တပ်မတော် ယာဉ် ၁ စီး တံတားပေါ်ဖြတ်သွားစဉ် ပေါက်ကွဲ သံကို ကြားရပြီးနောက် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းက ထိုသို့လှမ်းပစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ တပ်မတော်သတင်းပြန်ကြားရေး အဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ယမန်နေ့က အဆိုပါ ကစ္စပနဒီတံတား အနီးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ် တားဆီး ရေးအတွက် ဆေးပစ္စည်းသွားရောက် ထောက်ပံ့သော တပ်မတော် တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို AA အဖွဲ့က မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှု တချို့ရှိ ကြောင်း ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သော ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ နေ့ကလည်း ကျောက်တော်မြို့အဝင်၌ တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့် စစ်တပ် ( AA ) တို့ ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မြို့ခံ ၄ ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်များတွင် တပ်မတော်နှင့် AA တို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်ကတည်းက နှစ်ဘက်တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေသည်မှာ ၂ နှစ်နီးပါး ကြာမြင့် လာပြီဖြစ်ရာ စစ်ဘေးရှောင် အရေအတွက်မှာ သိန်းချီရှိကာ ဒေသခံပြည်သူများမှာလည်း အသက်လု ထွက်ပြေးနေကြရသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/12/222468.html
၁၇။ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ဖျားပိုင်း ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်တွင် နယ်စပ်များ ပိတ်ထားခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းများ ကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်နေ
မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ဖျားပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်၊ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်တွင် နယ်စပ်များ ပိတ်ထားခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းများကြောင်း စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်တောက်နေကြောင်း ဒေသခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက The Daily Eleven သတင်းစာသို့ ပြောကြားသည်။ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်သည် ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုခရိုင်အတွင်းပါဝင်ပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေး ခက်ခဲမှုကြောင့် ပူတာအိုမှ လေးရက်၊ ငါးရက်ခရီးလမ်းလျှောက်ရပြီး တရုတ်နိုင်ငံနှင့် တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်ခရီးဝေးကွာသည့် မြို့နယ်တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၁ မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေလေးက “အဓိက ဖြစ်သွားတာက တရုတ် ဘက်က COVID-19 ရောဂါကြောင့် နယ်စပ် မှတ်တိုင် ၃၀၊၃၁၊၃၅ ဝင်ပေါက်တွေကို နေ့ည ပိတ်လိုက်တယ်။ ပူတာအိုဘက်ကို ခြေကျင်ခရီးကလည်း လမ်းမှာ လေးငါးရက်လောက် သယ်ယူရတော့ ဒေသတွင်း ရိက္ခာပြတ်တာပေါ့။ တစ်လလောက် ကြာ သွားပြီ။ ဒီထက်ကြာရင်တော့ အခြေအနေဆိုးပြီး အရင်ကာလတွေက ကြုံရသလို တောထွက်ပြီး ရှာစားရမှာပေါ့။ အခုဒေသခံ တွေက အူလိုင်၊ အထေး၊ ဒိုင်ဂလယ်ပင်တွေကို အရည်စစ်၊ အပုပ်ခံပြီး စားနေကြတယ်။ အပင်ကိုထုချေပြီး အနှစ်ကို စားတာ ပေါ့။ ရိက္ခာပြတ်တာကြာရင် ဒေသခံတွေ ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က ဝါးတွေသီးတော့ ကြွက်တွေ ထပြီး ဒေသတွင်းက ရိက္ခာစိုက်ပျိုးရေးကို ထိခိုက်သွားတာလည်းပါတယ်။ ဒါတွေ အားလုံး ပြေလည်ဖို့ကတော့ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပါပဲ။ အစိုးရက နှစ်တိုင်းဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး”ဟု ပြောကြားသည်။
ယင်းဒေသသို့ ရိက္ခာများ ပို့ဆောင်မည်ဆိုပါက ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ် တောင်ခြမ်းဒေသအတွက် မြစ်ကြီးနား-ချီဖွေ-ဆော့လော် လမ်းပိုင်းနှင့် မြစ်ကြီးနား-ပူတာအို-ရီဒမ်း စသည့် လမ်းပိုင်းကို အသုံးပြုရမှာဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ဆိုပါသည်။ ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်သည် ကျေးရွာအုပ်စု ၂၆ အုပ်စု၊ လူဦးရေ ၁၇၀ဝ၀ ဝန်းကျင်ရှိပြီး ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများမှာ လီဆူနှင့် ရဝမ်တိုင်းရင်းသား နှစ်မျိုးသာရှိသည်။ https://news-eleven.com/article/173544
၁၈။ ကျိုက်မရောမြို့နယ်တွင် လူစုလူဝေးဖြင့် ဘုရားထီးတော်ပင့်ဆောင်ရန် ဦးဆောင်သူ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင် ထောင်ဒဏ် ၉ လ ချမှတ် ခံရ
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ်၌ လူစုလူဝေးဖြင့် ဘုရားထီးတော်ပင့်ဆောင်ရန် ဦးဆောင်သူ ကော့ခလိန်ကျေးရွာအုပ်စု ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင် ဦးဇော်မင်းကို မေလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၉ လ ကျခံစေရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကျိုက်မရောမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး မင်းအောင်က “ထောင်ဒဏ် ၉ လ ချလိုက်ပါတယ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀(က) နဲ့ပဲ သူ့ကို အကျဉ်းထောင်ပို့ရတော့မှာပါ သူက ဒီလိုဗျ ရှေ့နေတွေပါ ငှားပြီးတော့ ကွန်ပလိန်းတက်တာ အဲဒါကြောင့် ကြာသွားတာ သက်သေတွေလည်းများတယ်”ဟု ဆိုသည်။ ကြာအင်းချောင်းကျေးရွာနေ ဦးဇော်မင်းသည် ပြီးခဲ့သည့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက်၌ ကော့ခလိန်ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်ခဲ့သလို ၎င်း၏ပြိုင်ဘက် လက်ရှိ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်လည်း NLD ပါတီဝင်အမာခံဖြစ်နေပြီး အုပ်စုတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အတိမ်းအစောင်း မခံ ဖြစ်နေကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ ရွာသားတစ်ဦးက ပြောသည်။ “ဘုရားထီးတင်ပွဲအတွက် ရွာလှည့်တဲ့ကိစ္စကို အခုအုပ်ချုပ် ရေးမှူးခွင့်မပြုဘူး တားထားတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဦးဇော်မင်းက မြို့နယ်နဲ့ အထက်ကို သူပြောလို့ပြီးတယ်ဆိုပြီး လုပ်ချပလိုက်တာ ခုလိုအရေးယူခံရတာပေါ့”ဟု ၎င်းရွာသွားက ဆိုသည်။
COVID 19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်သည့်ကာလအတွင်း ဆောင်းဘောက်စ်တင်ကားနှစ်စီး၊ ကျေးရွာသူ/သား ၁၅၀ ဦးကို မော်တော်ယာဉ် ၁၈ စီးဖြင့်တင်ဆောင်၍ ဘုရားထီးတော်ပင့်ဆောင်ရန် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့က လူစုလူဝေးလှည့်လည်ခဲ့သည့် အတွက် ကျိုက်မရောမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ၃၀ (က) ဖြင့် ဦးဆောင်သူ ဦးဇော်မင်းကို တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Covid 19 နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူစုလူဝေးနှင့် ပွဲလမ်းသဘင်များကို မေ ၁၅ ရက်နေ့အထိ မပြုလုပ်ရန် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ထားပြီး လိုက်နာမှုမရှိပါက ရာဇာသတ်ကြီးဥပဒေ၊ ကူးစက်ရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေဖြင့် အရေးယူသွားမည်ဖြစ်သည်။ http://burmese.monnews.org/2020/05/14/%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%
ကမ္ဘာတဝှမ်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါကို ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အချိန်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ချင်းပြည် နယ်မှာတော့ စစ်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေပြီး လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာတွေ ပိုများနေတဲ့အတွက် မြန်မာအစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကို သံတမန်နည်းတွေ သုံးပြီး ဖိအားပေးတိုက်တွန်းပေးပါဆိုပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် ဂျူးအဖွဲ့တွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းတွေရဲ့အဖွဲ့ တွေက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုက်ပွန်ပေးယိုကို မေလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ စာရေးသားတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
တကမ္ဘာလုံး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ ရပ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေး မှူးချုပ်ရဲ့ တိုက်တွန်းချက်အတိုင်း မြန်မာအစိုးရကလဲ တနိုင်ငံလုံးမှာ အပစ်ရပ်ကြောင်းကြေညာဖို့နဲ့ တပ်မတော်ကလဲ သဘော တူဖို့၊ ရခိုင်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်မှာ ဖြတ်ထားတဲ့ အင်တာနက်လိုင်းတွေကို ချက်ချင်းပြန်ဖွင့်ပေးဖို့၊ သတင်းမီဒီယာတချို့ရဲ့ အင်တာ နက်ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ပိတ်လိုက်တာတွေ ပြန်ဖွင့်ပေးပြီး၊ သတင်းထောက်တွေကို တရားစွဲတာရပ်ဖို့နဲ့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခွင့်ကို လူတိုင်းတန်းတူရပြီး၊ လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေ အချိန်မှီရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုတောင်းဆိုရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်တဲ့ American Jewish World Service အဖွဲ့က အစီအစဉ် ရေးရာ မှူး Jeffery Stein က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာ ရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးအတွက် အထူးရိမ်ပါတယ်။ စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေက လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ သတင်းရယူခွင့်နဲ့ အရပ်ဖက်ဖွဲ့ တွေရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်သူတွေကို အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန်ကူညီပေးဖို့ တိုက်တွန်းတာပါ။ ကိုဗစ်-၁၉ ဟာ လူ့လောကကြီးတခုလုံးကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့အတွက် ဒီကာလမှာ အပစ်အခတ်မရပ်စဲရင်၊ သတင်းတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်မရရင်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်မရရင်၊ အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးမရရင်၊ လူသားချင်း ကူညီမှုအထောက်အပံ့တွေမရရင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါက မြန်မာနိုင်ငံ သားတွေကို အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်စေပါလိမ့်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တိုက်တွန်းတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာ Kachin Alliance ဆိုတဲ့ ကချင်မဟာမိတ်အဖွဲ့၊ Karen Organization of America ဆိုတဲ့ အမေရိ ကန်ရောက် ကရင်အဖွဲ့၊ Nationalities Alliance of Burma ဆိုတဲ့ မြန်မာအမျိုးသားများမဟာမိတ်အဖွဲ့တို့လဲ ပါဝင်ပါတယ်။ Kachin Alliance အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဂမ်ဆမ်က – တကမ္ဘာလုံးမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးက ပြည်သူလူထု ကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေချင်တာ တကြောင်းပေါ့။ နောက်တခုက ဒီလို ပိတ်ဆို့မှုဆိုတာ ကျနော်တို့ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အရမ်းကြာလာပြီ။ ဒီလိုတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ညီညွတ်မှုကို အင်မတန်ထိခိုက်နစ်နာစေတယ်။ နောက် စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကို မုန်းတီးမှုကို ပိုပွားစေတာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို တောင်းဆိုနေတာပါလို့ပြောပါတယ်။
ကျနော်တို့အဖွဲ့က ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေတာပါ။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေ၊ သတင်းမီဒီယာတွေအပါအဝင် မြန်မာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေး ပွဲပါ။ အဲဒီထဲမှာ ရခိုင်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်က လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတွေ ပါဝင်သင့်ပါတယ်လို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ https://www. rfa.org/burmese/news/national-reconciliation-army-armed-ethnic-group-05132020191938.html
ကယားပြည်နယ်၊ ဖရူဆိုမြို့နယ်မှာ ဒီကနေ့ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီကျော်က လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် မူလတန်း ကျောင်းဆောင်ဟောင်းတလုံး အမိုးလန် ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဖရူဆိုမြို့နယ် ညောင်ဇင်ရပ်ကွက် လွိုင်ကော် – ဘောလခဲ ကားလမ်းပေါ် ရွှေပြည်သာ အ.မ.က ကျောင်းဝင်းအတွင်းက ကျောင်းဆောင်ဟောင်းတခု အမိုးလန်ပျက်စီးသွားခဲ့တာလို့ ညောင်ဇင်ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဒေါ်ကြူကြူအောင်က ပြောပါ တယ်။“ဒီရွေပြည်သာကျောင်း အနောက်က စာသင်ကျောင်းဆောင် အမိုးလန်သွားတာပဲသိတယ်။ ရွာတွေဘက်မှာတော့ အတိအကျတော့ မသိသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်တော့ မဖြစ်ပါဘူးလို့တော့ ပြောတယ်။
လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်လို့ မြိုကအဝင်ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ ထားရှိတဲ့ COVID – 19 ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတဲ့ တဲ အမိုးနဲ့ အကာ ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး လူတွေ ထိခိုက်သေဆုံးမှု မရှိပါဘူး။ http://burmese.dvb.no/archives/388017
ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ လောပိတကျေးရွာအုပ်စု၊ လောကထုကျေးရွာအနီး မိုးကြိုးပစ်မှုကြောင့် အသက် ၄၅ နှစ် အရွယ် အမျိုးသား တစ်ဦး သေဆုံးသွားပါတယ်။
လောကထုကျေးရွာနေ ဦးပါရယ်ဟာ ဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်း ၂ နာရီခွဲလောက်က ဝက်စာခူးဖို့ နေအိမ်ကနေ ထွက်ခွာစဉ် ရွာအရှေ့ ဘက် ၅ ဖာလုံခန့်အကွာအရောက်မှာ မိုးထစ်ချုန်းရွာတဲ့အတွက် သစ်ပင်တပင်အောက်မှာ မိုးခိုနေစဉ် မိုးကြိုးလျှပ်စီးထိမှန် သေဆုံးခဲ့တာလို့ မျက်မြင်သက်သေတွေက ပြောပါတယ်။
သေဆုံးသူဦးပါးရယ်မှာ ယာဘက်တင်ပါးအောက် အရေပြားအပူလောင် စုတ်ပြဲဒဏ်ရာတစ်ချက် ခါးမှာညိုမဲဒဏ်ရာနဲ့ မိုးကြိုး လျှပ်စီး စီးဝင်ပြီးသေဆုံခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က စစ်ဆေးတွေ့ရတဲ့အတွက် သေမှုသေခင်းဖွင့်လှစ်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ မေလ ၁၁ ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကလည်း ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်မှာ မိုးသက်လေပြင်းကျ မိုးကြိုးပစ်လို့ အသက် ၇ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင် သုံးဦး မိုးကြိုးထိမှန်သ သေဆုံးသွားပါတယ်။ http://burmes e.dvb.no/archives/387821
သျှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း ညောင်ရွှေမြို့နယ် အင်းလေးကန်ထဲရှိ အင်းခြံကေလာကျေးရွာအုပ်စုတွင်း ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အားနည်းနေဆဲဟု ဒေသခံများပြောပြချက်အရ သိရသည်။
အင်းလေးကန်ထဲရှိ အင်းခြံကလောကျေးရွာအုပ်စုတွင်း ရွာ ၆ ရွာပေါင်းမှ မိခင်နှင့် ကလေးဌာနခွဲတစ်ခုတည်းသာရှိပြီး၊ သားဖွား ဆရာမ နှင့် အကူတဦးသာရှိကြောင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်ဆွေဦး က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။ အဆိုပါက သားဖွားဆရာမ နှင့် အကူ တဦး ကို အင်းခြံကလော ကျေးရွာအုပ်စု အိမ်ခြေ ၉၀ဝ ခန့၊ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၄၀ဝ ကျော်က အားကိုးနေရပြီး ကျေးရွာဆေးပေးခန်းမရှိသေးကြောင်းလည်း ဦးတင်ဆွေဦး က ပြောသည်။“ကျနော်တို့ ရွာမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် မိခင်ကလေးဌာနခွဲ တစ်ခုပဲရှိတယ်။ အဲ့ဒီမှာလည်း သားဖွား ဆရာမတစ်ယောက် နဲ့ အကူ တစ်ယောက်ပဲ ရှိ တယ်။ ဆရာဝန် တောင် မရှိဘူး”ဟု ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်ဆွေဦး ကပြောသည်။
ထို အင်းခြံကျေးရွာအုပ်စုထဲတွင် အရေးပေါ်နေမကောင်းလာပါက ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းမရှိ၊ ဆရာဝန်မရှိသဖြင့် အရေးပေါ် ဖြစ်လာပါက အခက်အခဲများစွာရင်ဆိုင်နေရကြောင်း၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်ရှိ တိုက်နယ်ဆေးရုံကို သွားရသည်မှာလည်း ခက်ခဲ ကြောင်း အင်းဒေသခံများပြောပြချက်အရသိရသည်။ အင်းခြံကေလာကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျေးရွာပေါင်း ၆ ရွာရှိသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16533
ကရင်ပြည်နယ် ဖားအံမြို့နယ်အတွင်း ငါးမျိုးစိတ်များစွာကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းထားသည့် မိရင်ရွာရှိ ဒေါ်လာအင်းတွင် ယခုနှစ် မကြုံစဖူး ရေခန်းခြောက်မှုများနှင့်ကြုံတွေ့နေရသည့်အပြင် ငါးအမြောက်အမြား သေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ဒေါ်လာအင်း ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီထံမှ သိရသည်။
ယခုလမှစတင်ကာ နေ့အပူချိန်နှင့် ညအပူချိန် အလွန်မြင့်မားလာနေမှုနှင့်အတူ အင်းရေများ အဆမတန်ခန်း ခြောက်လာမှု များကြောင့် ၎င်းအင်းအတွင်းထိန်းသိမ်းထားသည့် ငါးများ ပိဿာချိန်ထောင်နှင့် ချီသေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ဒေါ်လာအင်း ထိန်းသိမ်းရေးတာဝန်ရှိသူများက ပြောသည်။ “ ဒေါ်လာအင်းမှာ ဒီလိုရေခန်းခြောက်သွားတာ တစ်ခါမှမရှိဘူး။ ရေခန်းတော့ အင်းထဲကငါးတွေက တချို့သေ သွားတယ် ။ ကျန်တဲ့တချို့ကလည်း ရေကနည်းပြီး ငါးကများတော့ ငါးတစ်ချို့ကိုလည်း ဖမ်းပြီး အင်းထိန်းသိမ်း ရေးရံပုံငွေအဖြစ် ရောင်းလိုက်တယ်။ ငါးဦးစီးဌာနက ရေလာတိုင်းကြည့်တော့ ရေအောက်စီဂျင်က ၁ ပဲရှိတော့ ငါးတွေအသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးပြောတယ်။ အဲဒါကြောင့် ငါးတွေကို တစ်ဝက်ရောင်းလိုက်ရတယ်” ဟု အင်း ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် နော်မြဝင်းက ပြောသည်။
အင်းရေများ အဆမတန်ခန်းခြောက်လာမှုကြောင့် သေဆုံးသွားသည့် ငါးအမျိုးအစားများထဲမှ ငါးဘတ်ငါးမျိုး အစားမှာ အများ ဆုံးဖြစ်ပြီး ထိုအထဲတွင် အကြီးဆုံး ၁၀ ပိဿာ အလေးချိန်ရှိသည့် ငါးများလည်းပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။ ဒေါ်လာအင်းသည် ဧကပေါင်း ၆,၅၀၀ ကျော်အကျယ်ရှိပြီး မိကရင်၊ မုက္ကဒိ၊ ခဲတောက်၊ ကမ်းကြီး၊ ကမ်းကလေး စသည့် ကျေးရွာ ၅ရွာ၏ ဧရိယာထဲတွင် နယ်နိမိတ် ထိစပ်နေကာ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပြည်နယ်အစိုးရမှ အင်းအား လေလံတင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့မှုများရှိသည့်အတွက် ဒေသခံများမှ မလိုလားဘဲ သဘာဝအတိုင်းသာ ထားရှိစေချင်သောကြောင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အင်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီဖွဲ့ပြီး ပြန်လည် ထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2020/05/%e1%80 %b1%e1%80%92%e1%81%9a%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80
အစိုးရတပ်နဲ့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင် AA အဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ မြေပုံမြို့နယ် ဖက်မှာ ရှိတဲ့ စစ်ရှောင် စခန်းတချို့မှာ ရိက္ခာသယ်ယူခွင့်တွေ ပိတ်ပင်ထားတာကြောင့် စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လပ်မှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေက ပြောဆိုကြပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ မြေပုံမြို့နယ်က ကိုင်းကြီးစစ်ရှောင်စခန်းမှာတော့ စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လပ်နေသလို တခြားဒေသတွေက နေ ရိက္ခာသယ်ယူခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာ ၃ လလောက်ရှိနေပြီလို့ ကိုင်းကြီးစစ်ရှောင်စခန်းတာဝန်ခံ ကိုရွှေစိုးက ပြောပါတယ်။ “စားနပ်ရိက္ခာကတော့ ပြတ်လပ်မယ့် အနေအထား ရှိနေပြီခင်ဗျာ။ နောက်ပြီးတော့ စားနပ်ရိက္ခာတွေ သယ်ယူခွင့်မရဘူးခင်ဗျ။ ကိုယ်တိုင်သွားယူမယ်ဆိုရင်လည်း မရဘူး။ လမ်းတွေမှာကျတော့ မြို့နယ်တွေ မကျော်ရတာရှိတယ်။တပ်မတော်က တားတာ COVID-19 ကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။ တပ်မတော်က တားတာကတော့ နောက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ် ထင်လို့ တားတာဖြစ်မယ်။ ရိက္ခာမသယ်ရတာတော့ သုံးလလောက်တော့ ရှိနေပြီ။” အဲဒီကိုင်းကြီးစစ်ရှောင်စခန်းမှာ လူဦးရေ ၃၀၀ ခန့်နေထိုင်ကြပြီး စားနပ်ရိက္ခာတွေ အပြင် မိုးရာသီရောက်တော့မှာ ဖြစ်တာကြောင့် နေထိုင်ဖို့အတွက် နေအိမ်တွေ လို အပ်နေတယ်လို့လည်း ကိုရွှေစိုးက ပြောပါတယ်။
စညင်းစစ်ရှောင်စခန်းဟာ အစိုးရက တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ စခန်းမဟုတ်သလို စညင်းစစ်ရှောင်စခန်းကို လာရောက် ကူညီကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေက တားမြစ်ထားတယ်လို့ ကိုယ်တော်သဘာဝနဒီက မိန့်ပါတယ်။ မြေပုံမြို့နယ်မှာ ရိက္ခာသယ်ယူခွင့်တွေကို တပ်မတော်ဘက်ကတားမြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပေမယ့် တပ်မတော်ဘက်ကတော့ တားမြစ်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ လုံခြုံရေးအရ ဆောင်ရွက်ရတာလို့ တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့ပြောခွင့်ရ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းညီက ပြောပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့လည်း တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ စစ်ရှောင်စခန်းတွေကို စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့တာတွေရှိနေပြီး ကိုယ်သဘောနဲ့ ကိုယ်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ စစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုတော့ စားနပ်ရိက္ခာ တစုံ တရာထောက်ပံ့ပေးတာမျိုး မရှိပါဘူး။
ရခိုင်လက်နက်ကိုင် AA အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အစိုးရကသတ်မှတ်ကြေငြာထားပြီးနောက်မှာ ရခိုင်မြောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲတွေလည်း ပိုမိုပြင်းထန်လာသလို တိုက်ပွဲတွေကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာသူတွေလည်း နေ့စဉ်နဲ့အမျှနဲ့ ရှိနေတာပါ။ https: //burmese.voanews.com/a/rakhine-conflicts-idp-camp-military/5419455.html
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့ စွမ်စော်ရပ်ကွက်တွင် ယနေ့ ( မေ ၁၂) ည ၁၀နာရီ ဝန်းကျင်၌ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား ကြောင်း မူဆယ်ဒေသခံများပြောပြချက် အရသိရသည်။
အဆိုပါ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု နှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်မသိရှိရသေးသော်လည်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုအသံသည် စွမ်စော်ရပ်ကွက် ပန်းဆေး ပြည်သူ့စစ်များနေထိုင်သည့် နေရာဘက်မှ လာကြောင်းလည်း မူဆယ် ဒေသခံများ ကပြောသည်။“ဗုံးပေါက်ကွဲတဲ့ အသံ ၂ ချက် ကြားတယ်။ ၁၀ စက္ကန့်လောက်ပဲခြားတယ်။ သေနတ်သံလည်း ကြားတယ်။ သေချာတော့ မသိသေးဘူး” ဟု စိုင်းမောဝ် က ဆိုသည်။ ဆက်လက်ပြီး စွမ်စော်ဒေသခံ တဦး ပြောပြချက်အရ“ ပန်းဆေး ပြည်သူ့စစ်တွေရှိတဲ့နေရာဘက်က အသံပဲ။ ကျနော်တို့လည်း နေရာကို လိုက်ရှာနေတယ်။ ပန်းဆေး ဘက်ကလည်း တခါဖြစ်ပြီးဘူးတော့ အဲ့ဘက်လည်း လို့ ထင်တယ်” ဟု သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ပြောသည်။
ယနေ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုသည် အလွန်ကျယ်လောင်သော်လည်း မည်သည့်နေရာတွင် ပေါက်သည်ကို တိကျစွာမသိရှိရပေ။ ထို ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မူဆယ်မြို့ ရဲစခန်းကို သျှမ်းသံတော်ဆင့်က ကြိုးစားဆက်သွယ်မေးမြန်းသော်လည်း ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်းမရှိပေ။ ယမန်နေ့ည ၈ နာရီခွဲတွင်လည်း မူဆယ်မြို့အဝင် တိုးဂိတ်တွင်ပြင်းထန်သည့် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16527
နေရပ်စွန့်ခွာသွားသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးနှင့်ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အစိုးရနှင့်ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (UNDP) နှင့် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ အေဂျင်စီ (UNHCR) တို့အကြား တနှစ်သက်တမ်းတိုး နားလည်မှုစာချွန်လွှာအား မေလ ၁၁ ရက်နေ့က နေပြည်တော်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ နားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ ပြန် လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းများ အထောက်အကူပြုရေးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ မောင်တော၊ဘူးသီးတောင်၊ ရသေ့တောင် မြို့နယ်များတွင်မြေပြင်ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့အထိ တနှစ်တာ ဆက်လက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အထိ နှစ်နှစ်တာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင်လည်း မြေပြင်ကွင်းဆင်းလေ့လာမှု ၇ ကြိမ်နှင့် လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်စေမည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်း ၄၅ ခုအား အစိုးရကခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး ပြောင်းလဲလာသည့် အခြေ အနေများအပေါ်မူတည်ကာ ပိုမိုအကျိုးရှိမည့် လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ က အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ပြောကြားထားသည်။ လက်ရှိ တွင် နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတို့အကြား ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့တွင် စတင်လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော်လည်း ယနေ့အထိ နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီ ချက်ဖြင့် ပြန်လည်ဝင်ရောက်သူမရှိသေးကြောင်း မောင်တောခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစိုးအောင်က ပြောသည်။
UNDP နှင့် UNHCR တို့က “ဒုက္ခသည်များ မိမိဆန္ဒအလျောက် လုံခြုံစွာနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ နေရပ်ပြန်ခြင်းအတွက် သေချာ သော အခြေအနေတရပ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖန်တီးပေးခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နေထိုင်ဆဲလူများ၏ လူ့အခွင့်အရေးခံစားခွင့်များ တိုးတက်လာစေရန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တာဝန်ဖြစ်ပြီး၊ ဤလုပ်ငန်းအတွက်ဆက်လက် ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားမည်”ဟု ဆိုသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အာရကန် ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်ရေးတပ်မတော်(ARSA) က ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ မြန်မာ လုံခြုံရေးစခန်းများအား အလုံးအရင်းနှင့် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် တပ်မတော်က နယ်မြေရှင်းလင်းမှုများ ပြန်လည် ပြုလုပ်ရာတွင် ဒုက္ခသည် ၇ သိန်းကျော် နေရပ်စွန့်ခွာခဲ့ရပြီး ယင်ဖြစ်စဉ်များအတွင်း ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည့် လုံခြုံးရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း ဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်ရန် အစိုးရက ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ https://burma.irrawaddy.com /news/2020/05/13/222553.html
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ညောင်ရွှေမြို့နယ်အတွင်းရှိ ခရမ်းချဉ်သီး စိုက်တောင်သူများသည် ယခုနှစ် ကိုဗစ် ကာလကြောင့် အရှုံး များဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း တောင်သူများ ပြောချက်အရသိရသည်။ ခရမ်းချဉ်သီးစိုက်တောင်သူ အများစုသည် ယခုနှစ်တွင် ခရမ်းချဉ်သီး ဈေးအဆမတန်ကျသောကြောင့် ခြံသမားများ အရင်းမရကြကြောင်း သိရသည်။
“လက်ရှိ အခြေနေက ဒီနှစ်ဈေးဆိုရင် တအားပေါလာတယ်။ ခြံသမားတွေအရင်းမရကြဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဈေးကောင်းတယ်။ ဒီနှစ်က လူတစ်ရာမှာဆို ၉၀ လောက်က အရှုံးပြတယ်”ဟု ကေလောကျေးရွာနေ ခရမ်းချဉ်သီးခြံပိုင်ရှင် ဦးဝင်းနိုင် က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။ ယခုနှစ် ခရမ်းချဉ်သီး ဈေးနှုန်းများမှာ အစောပိုင်း ကာလတွင် တတင်း ( ပိဿာ ၃၀ ) လျှင် ၃၀ဝ၀ ကျပ်နှင့် ၃၅၀ဝ ကျပ် ကြားသာရရှိပြီး၊ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသည့် အလုပ်သမားခသာ ရရှိကြောင်း၊ ဆေးဖိုး၊ ဓာတ်မြေသြဇာ ဖိုး မရကြောင်းလည်း ဦးဝင်းနိုင်က ပြောသည်။ သို့သော် ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း ခရမ်းချဉ်သီးဈေး ၁ တင်း ကျပ် ၉၅၀ဝ တက်လာသဖြင့် အမြတ်မရသော်လည်း အရင်း ပြန်ရရန် မျှော်လင့်နေရကြောင်း ဦးဝင်းနိုင် ကပြောသည်။
“အသီး တအားထွက်တဲ့ချိန်က ဈေးကမရှိဘူး ကျနော်တို့ တပန်းရှုံးတာပေါ့။ ခရမ်းချဉ်သီး ထွက်ကြိမ်များလေ အသီးလျှော့ လေ။ ဈေးကောင်းလာရင်လည်း အတင်းသိပ်မထွက်တော့ဘူး။ အဲ့မှာပဲ ကျနော်တို့က စရှုံးနေပြီ”ဟု ခြံပိုင်ရှင် တဦးကလည်း ထပ်လောင်းပြောသည်။ အင်းလေးကန်မှထွက်သည့် ခရမ်းချဉ်သီးသည် မြန်မာပြည်အနှံ့ကို တင်ပို့ရောင်းချသည့် ကုန်စိမ်းဖြစ် ပြီး ယခုနှစ် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှု၊ ကုန်စည်ကားများ ပြေးဆွဲမှု ရှားပါးလာသဖြင့် အရှုံးပေါ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16537
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့ အမှတ် ၄ ရပ်ကွက် ကြခတ်တောကုန်းဆင်း ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးနံဘေးတွင် စားသောက်ဆိုင် အမည်ခံပြီး လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေသည့်နေအိမ်အား ယမန်နေ့ (မေလ ၁၃ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီခန့်က ပြည် သူမှ အသွင်ယူ သတင်းပေးတိုင်ကြားမှုကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Covid-19 အရေးပေါ်ကာလတွင် အခြားသော သာမန်စားသောက်ဆိုင်များ ပိတ်ထားသော်လည်း လူသွား လူလာ များသော လမ်းမကြီးနံဘေးရှိ အဆိုပါ ပြည့်တန်ဆာရုံ မပိတ်ဘဲ ဖွင့်ထားကြောင်းသိရှိရ၍ တာဝန်သိပြည်သူများ အနေဖြင့် ယခုလို အသွင် ယူပြီး သက်ဆိုင်ရာသို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက် တိုင်ကြားရခြင်းဖြစ်သည်ဟု မြဝတီမြို့ အမှတ် ၄ ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူ ကိုထွန်းထွန်းက ပြောသည်။ “ဒီပြည့်တန်ဆာရုံ ဖွင့်ထားတဲ့သတင်း ရရှိတဲ့အတွက် မေလ ၁၃ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီခွဲအချိန် လောက်မှာ ကိုရဲမင်း (AACအဖွဲ့ဝင်) အပါအဝင် ကျနော်တို့ ၅ ယောက်အဖွဲ့ထဲမှ ၂ ယောက်က အဲ့ဒီရုံထဲဝင်သွားပြီး အသွင်ယူ ကာ ဆက်ရှင်ကြေး တစ်ဦးကို ၁၅,၀၀၀ စီ ပေးချေပြီး အခြေအနေအား စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ အတွင်းဘက်က ပြည့်တန် ဆာဖမ်းဆီး ရေး ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ သက်သေအခိုင်အမာယူပြီး ည ၉ နာရီအချိန်ခန့်မှာ အမှတ် ၄ ရပ်ကွက်ရုံးသို့ သွား ရောက်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ သတင်းပေးတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။”ဟု ကိုထွန်းထွန်းက ပြောသည်။
မြဝတီမြို့မရဲစခန်းမှ နယ်ထိန်းအရာရှိ ဒုရဲအုပ် မင်းမင်းထွန်း၊ အပိုင်နယ်ထိန်း ရဲတပ်ကြပ်ထွန်းမင်းလတ်အပါအဝင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များနှင့်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများက အဆိုပါ အမှတ် ၄ ရပ်ကွက် ဘုရင်နောင်လမ်းမကြီးတွင် ဇာနည်စားသောက် ဆိုင် အမည်ခံပြီး လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသော နေအိမ်အား ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာ ဆိုင်အတွင်း၌ လိင်ဖျော် ဖြေရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်အလို့ငှာ အခန်းငယ်များဖွဲ့ပြီး ခေါင်းအုံးနှင့် အိပ်ယာခင်းများထားရှိခြင်းတို့ကို တွေ့ရှိရသည့်အတွက် အမျိုးသား ၁ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၃ ဦးအား မြဝတီမြို့မရဲစခန်းသို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးနံဘေး အမှတ် ၄ ရပ်ကွက် မြဝတီမြို့တွင် လိင်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းကို နေအိမ်၌ဖွင့်၍ လုပ်ငန်းအား စီမံခန့်ခွဲလုပ်ကိုင်သူ အမျိုးသားအား (ပ) ၃၇၉/၂၀၂၀ ပြည့်တန်ဆာအက် ၅ (၁)ဖြင့် လည်းကောင်း၊ လိင်ဖျော်ဖြေ ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်ရောက်ရှိနေသော အမျိုးသမီး ၃ ဦးအား (ပ)၃၈၀/ ၂၀၂၀ ပြည့်တန်ဆာအက် ၇(၁)ဖြင့်လည်းကောင်း မြဝတီမြို့မရဲစခန်းက အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/05/%e1%80%85%e1%80 %ac%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80
၁။ တပျမတျော အပဈရပျကွညောခကျြသညျ မှနျကနျသညျ့သဘောထားမဟုတျဟု KNU Concerned Group ပွော
၂။ ပုဒျမ ၁၇(၁) ကွောငျ့ ကိုဗဈအရေး အစိုးရနှငျ့ ပူးပေါငျးလုပျဆောငျရနျ အဆငျမပွဟေု KIA ပွော
၃။ KNU/KNLA (PC) ဥက်ကဋ်ဌ နရောကို မလေကုနျပိုငျးတှငျ ရှေးခယျြမညျ
၄။ ရခိုငျစဈပှဲမှာ တပျမတျောဘကျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ယိမျးဟု တိုငျးရငျးသားအခြို့ ဝဖေနျ
၅။ တပျမတျော အပဈအခတျ ရပျစဲရေး ထုတျပွနျခကျြ မဟာမိတျ ၃ ဖှဲ့ ဝဖေနျ
၆။ ကိုဗဈ-၁၉ ကာလ အတှငျး လားရှိုးမွို့နယျတှငျ အစိုးရတပျမှ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှု မြားပွုနေ
၇။ စဈရယောဉျပျေါ ညှဉျးပနျးနှိပျစကျသညျ့ တပျမတျောသားမြားကို အရေးယူမညျ
၈။ အှနျလိုငျးပညာရေးစနဈအတှကျ ကခငျြပွညျနယျတှငျ အငျတာနကျမရနိုငျသညျ့ မွို့နယျ ၇ ခုရှိ
၉။ ပွညျသူ့လိုအပျခကျြမြားအတှကျ လှူဒါနျးမှုမြားပွုလုပျသှားရနျ ကရငျအမြိုးသားဒီမိုကရကျတဈပါတီ စီစဉျ
၁၀။ ပလကျဝ စဈရှောငျမြားအတှကျ မိုးမတိုငျမီ ရိက်ခာပေးပို့ရနျ ပွညျနယျအစိုးရ စီစဉျ
၁၁။ ဘူးသီးတောငျမှာ မိုငျးပေါကျကှဲ၊ ကလေး နှဈဦးသေ၊ တဈဦးဒဏျရာရ
၁၂။ မွဝတီမွို့တှငျ BGF တပျဖှဲ့ ဗိုလျမှူးဟောငျးတဈဦး နအေိမျအား သနေတျသမားမြားက ခြောငျးမွောငျး ပဈခတျ
၁၃။ RCSS/SSA အဖှဲ့ဝငျ ၉ ဦး ထှကျပွေး
၁၄။ AA အဖှဲ့အကွောငျး သတငျးရေးသူတှကေို ခွိမျးခွောကျတာတှေ ရပျတနျ့ဖို့ CPJ အဖှဲ့တောငျးဆို
၁၅။ မွနျမာ့အရေး ကုလသမဂ်ဂ လုံခွုံရေးကောငျစီမှာ ဆှေးနှေးဖို့ရှိ
၁၆။ ကြောကျတျောက မှတျဆလငျရှာထဲ လကျနကျကွီးကကြှဲ ၅ ဦး ဒဏျရာရ
၁၇။ မွနျမာနိုငျငံ မွောကျဖြားပိုငျး ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျတှငျ နယျစပျမြား ပိတျထားခွငျး၊ လမျးပနျးဆကျသှယျရေး ခကျခဲခွငျး မြား ကွောငျ့ စားနပျရိက်ခာ ပွတျလပျနေ
၁၈။ ကြိုကျမရောမွို့နယျတှငျ လူစုလူဝေးဖွငျ့ ဘုရားထီးတျောပငျ့ဆောငျရနျ ဦးဆောငျသူ ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီဝငျ ထောငျဒဏျ ၉ လ ခမြှတျခံရ
၁၉။ တနိုငျငံလုံးအပဈရပျရေး ဖိအားပေးဖို့ အမရေိကနျကို အရပျဘကျအဖှဲ့တှတေိုကျတှနျး
၂၀။ ဖရူဆိုမွို့နယျ၌ လဆေငျနှာမောငျးတိုကျခတျ၊ စာသငျကြောငျးဆောငျ ပကျြစီး
၂၁။ လှိုငျကျောမွို့နယျတှငျ အမြိုးသား ၁ ဦး မိုးကွိုးပဈခံရပွီး သဆေုံး
၂၂။ အငျးထဲ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှု ယခုထိ အားနညျးနဆေဲ
၂၃။ ဒျေါလာအငျး မကွုံစဖူးရခေနျးခွောကျမှုနှငျ့ကွုံရပွီး ငါးအမွောကျအမွားသဆေုံးမှုဖွဈပျေါ
၂၄။ စဈတပျလမျးပိတျဆို့မှု ရခိုငျစဈရှောငျစခနျး ရိက်ခာပွတျ
၂၅။ မူဆယျမွို့ နှဈည ဆကျတိုကျ ပေါကျကှဲမှု ဖွဈ
၂၆။ ရခိုငျမွောကျပိုငျးတှငျ အစိုးရနှငျ့ ကုလအဖှဲ့မြား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး သကျတမျးတိုး
၂၇။ အငျးခရမျးခဉျြသီး စိုကျတောငျသူ ကိုဗဈ-၁၉ ကွောငျ့ အရှုံးမြားဖွငျ့ ရငျဆိုငျနရေ
၂၈။ စားသောကျဆိုငျအမညျခံပွီး လိငျဖြျောဖွရေေးလုပျငနျးလုပျဆောငျသညျ့အိမျအား ရဲတပျဖှဲ့မြား ဝငျရောကျဖမျးဆီး
မလေ ၉ ရကျနကေ့ ထုတျပွနျထားသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျော၏ ၃ လကြျောကွာ အပဈရပျကွညောခကျြသညျ အမှနျတကယျ ငွိမျးခမျြးရေး လိုလားခွငျးကွောငျ့ မဟုတျကွောငျး KNU Concerned Group က ယနေ့ (မလေ ၁၂ ရကျ)တှငျ သဘောထား ထုတျပွနျကာ ပွောဆိုလိုကျသညျ။ တပျမတျော၏ အပဈရပျ ထုတျပွနျခကျြသညျ အမှနျတကယျငွိမျးခမျြးရေးကို လိုလားခွငျး မဟုတျဘဲ တဈနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေးသဘောတူစာခြုပျ(NCA) အပဈရပျတိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့ အစညျးမြားအပျေါ ထိနျးခြုပျထားနိုငျရေးနှငျ့ လကျရှိတိုကျပှဲဖွဈနဆေဲ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးအပျေါ စဈဆငျ ခမြှေုနျးရေးအတှကျ နညျးပရိယာယျတဈခုသာဖွဈသညျဟု ၎င်းငျးအဖှဲ့က ဆိုသညျ။
အဖှဲ့၏ ပွောခှငျ့ရ ယခငျ KNU ဒု-ဥက်ကဋ်ဌဟောငျး ပဒိုနျောစီဖိုးရာစိနျက “အရငျက သူတို့(စဈတပျ)ရဲ့ လုပျရိုးလုပျစဉျပါပဲ။ တဈ ဖကျမှာ အပဈရပျထားပွီး ကနျြတဈဖကျကို ထိုးစဈဆငျတာမြိုးပေါ့။ နရောဒသေအသီးသီးကို အပဈရပျပမေဲ့ အထူးသဖွငျ့ ရခိုငျ လိုဒသေမြိုးမှာ AA အပျေါ အပဈမရပျဘူးဆိုတာက တဈဖကျကအငျအားကိုပွနျယူပွီး ကနျြတဈဖကျကိုအပွီးသတျခမြှေုနျး ဖို့ဆို တဲ့ ပုံစံမြိုး ရှငျးရှငျးလငျးလငျးပျေါလှငျနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီလိုထုတျပွနျခကျြမြိုးက စဈမှနျတဲ့ငွိမျးခမျြးရေးကို အမှနျ တကယျ သှားလိုတဲ့ ဆန်ဒမရှိဘူးဆိုတာ ပျေါလှငျနပေါတယျ” ဟု ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။ “တိုငျးရငျးသားတှေ လိုလားတဲ့ ဖကျဒရယျ ပွညျထောငျစုနဲ့ ဒီမိုကရစေီဆိုတာက အားလုံးပါဝငျရေးပါပဲ။ အဓိကက နိုငျငံရေးပွဿနာကို နိုငျငံရေးနညျးနဲ့ပဲ ဖွရှေငျးဖို့လို တယျ။ ဒါကွောငျ့ NCA အပဈရပျထိုးတဲ့ ဒသေတှမှောပဲ အပဈရပျတာမြိုး မဟုတျဘဲ လကျရှိတိုကျပှဲဖွဈတဲ့ ဒသေမှာလညျး အပဈရပျဖို့ အစိုးရက ညှနျကွားမှုပေးရမှာဖွဈသလို စဈတပျကလညျး အပဈရပျရမှာဖွဈတယျ။ အကုနျအပဈရပျနိုငျမှပဲ နိုငျငံရေး ပွဿနာကို ဖွရှေငျးနိုငျမယျ့ နညျးလမျးတှေ ပျေါထှကျလာ မှာဖွဈတယျ” ဟု ပဒိုနျောစီဖိုးရာစိနျက ဆကျပွောသညျ။
“အဓိက ပွဿနာက ကနြျောတို့ ဒီက အပဈမရပျနိုငျသေးတဲ့ အဖှဲ့နဲ့ အပဈရပျဖို့လိုတယျ။ ဒါပမေဲ့ တပျမတျောက AA (ရက်ခိုငျ့ တပျတျော)ကို အကွမျးဖကျအဖှဲ့ဖွဈတယျ။ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အနနေဲ့ သဘောမထားနျိုငျတဲ့ အခွအေနဖွေဈတဲ့ အခါကတြော့ ဒီပွဿနာက ဖွရှေငျးဖို့က အတျောခကျနတေယျ။ အဲ့တော့ AA မပါဘူးဆိုတော့လညျး AA ရဲ့ မွောကျပိုငျး မဟာမိတျအဖှဲ့တှေ KIA အစရှိသညျပေါ့၊ ဒီအဖှဲ့တှနေဲ့ ငွိမျးခမျြးရေး ရမလားဆိုတော့လညျး ရဖို့ကတော့ အခကျအခဲတှရှေိပါ တယျ။ တကယျတမျး အခုဖွဈဖို့ကတော့ တပွညျလုံး အပဈအခတျရပျစဲရေးအတှကျ လကျနကျကိုငျ တိုကျနတေဲ့ အဖှဲ့အားလုံးပါ တဲ့ ဒီစားပှဲဝိုငျးဆှေးနှေးပှဲတဈခု လိုအပျတာပေါ့” ဟု ၎င်းငျးက ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။
ထို့အပွငျ လတျတလော ကပျရောဂါ ဖွဈပှားမှုအပျေါ ကာကှယျထိနျးခြုပျရေးလုပျငနျးမြား လုပျဆောငျနသေညျ့ တိုငျး ရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြား၏ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှု ဂိတျမြားကို တပျမတျောမှ တားဆီးနှောငျ့ယှကျမှုမြား၊ မီးရှို့ဖကျြဆီး နမှေုမြားသညျလညျး လကျရှိ ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေးထကျ တိုငျးရငျးသား နယျမွဒေသေမြားအပျေါ နယျမွစေိုးမိုးရေး ဦးတညျဆောငျရှကျမှုမြားသာဖွဈကွောငျးလညျး KNU Concerned Group ၏ သဘောထားထုတျပွနျ ခကျြက ဆိုသညျ။ KNU Concerned Group သညျ ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ ဇှနျလပိုငျးတှငျ ယခငျကအေဲနျယူ ဒု-ဥက်ကဋ်ဌ ဟောငျး ပဒိုနျောစီဖိုး ရာစိနျ ဦးဆောငျဖှဲ့စညျး၍ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျပွီး ၎င်းငျးတို့၏ စိုးရိမျခကျြမြား၊ ရပျတညျခကျြမြားကို အလငျြးသငျ့သလို သဘောထား ထုတျပွနျမှုမြားပွုလုပျသညျ့ အဖှဲ့တဈဖှဲ့ဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/2020/05/%e1%80%90%e1%80 %95%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80
အစိုးရနှငျ့ ကခငျြလှတျလပျရေးတပျမတျော (KIA) အကွား ကိုဗဈ-၁၉ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါအရေးအတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျ ရနျ ဆှေးနှေးသျောလညျး မတရားအသငျး ဆကျသှယျမှု ဥပဒပေုဒျမ ၁၇ (၁)ကွောငျ့ မွပွေငျတှငျ လကျတှလေ့ကျတှဲ လုပျဆောငျရနျ အဆငျပွမေညျ မဟုတျဟု KIA ဘကျမှ ပွောသညျ။ ဗိုလျမှူးကွီး နျောဘူက “လကျတတှေ့မှာတော့ အခကျအခဲတှေ အမြားကွီးရှိမှာပါ။ ဥပမာ ကနြျောတို့ ဆကျသှယျရငျ သှားသှားလာလာ ကိစ်စတှကေ အခကျအခဲတှေ ရှိမှာ။ ပွောမယျဆိုရငျ ၁၇ (၁) ကိစ်စက ရှိမှာပါ။ ကနြျောတို့ စိုးရိမျတာပါ။ မူအားဖွငျ့ကတော့ ပူးပေါငျးလို့ရတယျ။ လကျတှပေို့ငျး ကတော့ အခကျအခဲအမြား ကွီးရှိမှာပါ”ဟု ပွောသညျ။
ကခငျြပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ဘကျမှ ပွညျနယျ လူမှုရေးဝနျကွီး ဦးနဝေငျး ၊ ပွညျနယျကနျြးမာရေးမှူး ဒေါကျတာ အေးသိနျးနှငျ့ အစိုးရဌာနဆိုငျရာ ကိုယျစားလှယျမြားက KIA ၏ ကိုဗဈ- ၁၉ ရောဂါ ကာကှယျနှိမျနငျးရေးကျောမတီမှ ဥက်ကဌ ဦးဆှတျလှတျဂမျ၊ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး ဂှနျမျောတို့သညျ မလေ ၁၃ ရကျနကေ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲတရပျ ပွုလုပျခဲ့ကွသညျ။ ဆှေးနှေးပှဲ၌ ကခငျြ နှဈခွငျးခရဈယာနျအဖှဲ့ခြုပျ (KBC)၊ ဥက်ကဋ်ဌ ဒေါကျတာခလမျဆမျဆှနျ ၊ ကကျသလဈအသငျးတျောမှ ဆရာတျောကွီး ဖရနျစဈ ဒေါ့တနျနှငျ့ ကခငျြငွိမျးခမျြးရေး အကြိုးတျောဆောငျအဖှဲ့မှလညျး ပါဝငျကွသျောလညျး တပျမတျော၏ ကခငျြပွညျနယျ အခွေ စိုကျ မွောကျပိုငျးတိုငျးစဈဌာနခြုပျဘကျမှ ကိုယျစားလှယျမြား ပါဝငျခွငျး မရှိပါ။
မေ ၁၃ ရကျ တှဆေုံ့ပှဲတှငျ KIA နယျမွတှေငျး ရောဂါခွခြေုပျနသေူမြားအတှကျ စားသောကျရေးပိုငျးတှငျ အဆငျပွစေရေနျ ကပျြ ၅၇ သိနျးကို NRPC ၏ လမျးညှနျခကျြအရ ကခငျြပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့က ထောကျပံ့ပေးခွငျး၊ မိုငျဆပျပါ ကြေးရှာသို့ လိုကျပါလာသညျ့ ကခငျြပွညျနယျ၊ ကနျြးမာရေးဌာနမှ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြားက ဆေးစဈပေးခွငျး၊ ကိုဗဈ-၁၉ နှငျ့ ပတျသကျ ၍ ဆောငျရနျ၊ ရှောငျရနျမြား ပွောပွပွီး လကျကမျးစာစောငျမြား၊ နှာခေါငျးစညျးမြားလညျး ပေးခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။ ပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ ညှနျကွားရေးမှူး ဦးဇျောဇျောက “သူတို့နယျမွထေဲမှာ Quarantine လုပျထားတဲ့ ၇၈ ယောကျ အတှကျ ၂၁ ရကျစာ သှားပွီး ထောကျပံ့ပေးတယျ။ တဦးကို ၃၅၀ဝ ကပျြနှုနျးနဲ့ ၂၁ ရကျစာပါ။ ငှသေားနဲ့ ပေးခဲ့တာပါ” ဟု ပွောသညျ။ KIA နယျမွေ အတှငျး ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါပိုး ကူးစကျခံထားရသညျဟု သံသယလူနာ ရှိလာပါက အစိုးရဘကျမှ ဆေးစဈပေးရနျ စီစဉျခွငျးမြား ရှိ၊ မရှိ မှာလညျး အသေးစိတျ မသိရှိသေးကွောငျး ၎င်းငျးက ရှငျးပွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးကလညျး ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ကာကှယျရေး ကုသရေး ထိနျးခြုပျရေး လုပျငနျးမြား လုပျရနျ အကွမျးဖကျအုပျစုဟု သတျမှတျထားသညျ့ အဖှဲ့မြား လှုပျရှားရာဒသေမြားမှလှဲ၍ ကနျြနယျမွမြေားကို မေ ၁၀ ရကျမှ သွဂုတျ ၃၁ ရကျအထိ အပဈရပျဆိုငျးကွောငျး ကွညောထားသညျ။ KIO ဗဟိုကျောမတီကလညျး ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ဖွဈပှားနသေညျ့ ကာလတှငျ စဈရေးကို အဓိက မထားဘဲ ကပျရောဂါ ကာကှယျနှိမျနငျးရေးကို ဦးစားပေးဆောငျရှကျမညျဟုလညျးကောငျး၊ ကာကှယျရေး ကုသရေးမြားတှငျလညျး အစိုးရနှငျ့ အတူတကှ လကျတှဲဆောငျရှကျမညျဟု လညျးကောငျး မေ ၁၄ ရကျနကေ့ ထုတျပွနျထားသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/14/222631.html
ကရငျငွိမျးခမျြးရေးကောငျစီ -KNU/KNLA (PC) ဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျကွီးစောဌေးမောငျ မလေ ၃ ရကျနကေ့ ကှယျလှနျသှားခဲ့ပွီး နောကျအဖှဲ့၏ ဥက်ကဋ်ဌနရောကို ယခုမလေကုနျပိုငျးတှငျ ဗဟိုအစညျးအဝေး၏ သဘောတူဆုံးဖွတျခကျြအရ ရှေးခယျြသှားမညျ ဟု တာဝနျရှိသူထံမှ သိရသညျ။
ဒုတိယစဈဦးစီးခြုပျ ဒုဗိုလျခြုပျကွီးစောထော့လေးအား အဖှဲ့၏လုပျထုံးလုပျနညျးအရ ယာယီဥက်ကဋ်ဌအဖွဈ တာဝနျယူထားပွီး ယခု မလေ နောကျဆုံးပိုငျးတှငျ ဗဟိုကျောမတီအစညျးအဝေးချေါကာ အဖှဲ့၏ ဥက်ကဋ်ဌ ရာထူးနရောကို အမြားသဘောတူ ဆုံးဖွတျ ခကျြအရ ရှေးခယျြသှားမညျဟု KNU/KNLA(PC) တှဲဘကျအတှငျးရေးမှူး ဗိုလျမှူးကွီး စောကြျောညှနျ့က ယနေ့(မလေ ၁၂ ရကျ)တှငျ ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက “ပွနျလညျရှေးကောကျတငျမွောကျဖို့ဆိုတာက မိခငျ KNU (ကရငျအမြိုးသား အစညျး အရုံး)ရဲ့ ဖှဲ့စညျးအုပျခြုပျပုံ အခွခေံမူဝါဒ အတိုငျးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ မူဝါဒအားလုံးတော့ မလုပျနိုငျသေးဘူးပေါ့လေ။ ကိုယျ့ အဖှဲ့ရဲ့အခွအေနေ ပကတိ အနအေထား ခမြှတျထားတဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးအပျေါမှာ လုပျဆောငျသှားမယျ။ မလေကုနျ ခါနီးမှ ဥက်ကဋ်ဌ ပွနျရှေးဖွဈမယျ။ ဗဟိုကျောမတီအစညျးအဝေးချေါပွီး အားလုံးသဘောတူဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ လုပျသှားမယျ” ဟု ပွောသညျ။
ကရငျငွိမျးခမျြးရေးကောငျစီအဖှဲ့သညျ ပွီးခဲ့သညျ့ ၂ဝ၁၅ ခုနှဈတှငျ တဈနိုငျငံလုံးပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ (NCA)ကို အခွားတိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့ မြားနှငျ့အတူ လကျမှတျရေးထိုးထားပွီး ဖကျဒရယျတညျဆောကျရေး မူဝါဒ လမျးစဉျမြားတှငျ KNU အဖှဲ့၏ ဦးဆောငျမှုအနဖွေငျ့ ၎င်းငျးတို့ ပူးပေါငျးဆောကျရှကျလကျြရှိသညျဟု တာဝနျရှိသူမြားထံမှ သိရ သညျ။ ကရငျပွညျနယျ ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုရပျစဲရေးဆိုငျရာ စောငျ့ကွညျ့ရေးကျောမတီ JMC-S အရပျသားကိုယျစားလှယျ နနျးမွငျ့တငျ က “ စဈဘကျဆိုငျရာရော၊ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးကိစ်စမှာရော၊ ကရငျအမြိုးသားအရေးဆိုငျရာမှာရော နားလညျ ထားတဲ့ ခေါငျးဆောငျမြိုးဆို ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရတာ အဆငျပွတေယျ။ NCA က ဆိုးစေ၊ ကောငျးစေ ပွောဆို လို့ရတဲ့နရော တဈခုရှိတဲ့အပျေါမှာ အရေးအရာတဈခုကို ဆှေးနှေးကွတဲ့အခါ ကရငျအဖှဲ့တှအေခငျြးခငျြး တိုငျပငျဆှေးနှေးကွ တဲ့ အစဉျ အလာ ကောငျးတှေ ရှိစခေငျြတယျ” ဟု ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။
KNU/KNLA(PC) အဖှဲ့သညျ ကှယျလှနျသူ အဖှဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျကွီး စောဌေးမောငျဦးဆောငျကာ ၂၀ဝ၇ ခုနှဈတှငျ KNU အဖှဲ့အ စညျးမှ ခှဲထှကျခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး လကျရှိ ကရငျပွညျနယျ ကော့ကရိတျခရိုငျ၊ နျောတယာမွို့ ထို့ကျောကိုးတှငျ အဖှဲ့၏ ဌာနခြုပျအဖွဈ ထားရှိသညျ။ http://kicnews.org/2020/05/knu-knla-pc-%e1%80%a5%e1%80%80%e1%81%a0%e1%82%92
ရခိုငျပွညျနယျတှငျးက လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခကွားတှငျ ထိခိုကျသဆေုံးနသေညျ့ အရပျသားမြားဘကျမှ ရပျတညျမှုမရှိဘဲ တပျမတျောဘကျသို့ ဘကျလိုကျနသေဖွငျ့ တိုငျးရငျးသားအရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ အပျေါ ယုံကွညျမှု ကဆြငျးသှားပွီ ဟု KNU Concerned Group က ပွောသညျ။ KNU Concerned Group မှာ အစိုးရနှငျ့ အပဈရပျစာခြုပျ လကျမှတျထိုးထားသော ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး KNU မဟုတျပါ။
KNU Concerned Group ၏ အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျ ပဒိုနျောစီဖိုးရာစိနျက ရခိုငျပွညျနယျတှငျး တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျစဈတပျ (AA) တို့ကွား ဖွဈပှားနသေညျ့ ပဋိပက်ခတှငျ တပျမတျောဘကျမှ အရပျသားမြားကို မသင်ျကာမှုဖွငျ့ ဖမျးဆီးစဈဆေးခွငျး၊ နှိပျစကျခွငျး၊ သဆေုံးခွငျးနှငျ့ လကွေောငျးတိုကျခိုကျမှုမြားကွောငျ့ အရပျသား အစုလိုကျအပွုံလိုကျ သဆေုံးခွငျးမြားအပျေါ နှုတျဆိတျနေ ခွငျးကွောငျ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကို ဝဖေနျရခွငျးဖွဈသညျဟု ပွောသညျ။ ပဒိုနျောစီဖိုးရာစိနျက “သူ အာဏာရ အစိုးရ ဖွဈလာတော့ ကမြတို့ ပိုပွီးတော့ သူ့ကို ယုံကွညျမှုကဆြငျးလာတယျ။ သူက တပျမတျောကို ပိုပွီး ကာကှယျနတေယျ။ ကမြတို့ မွငျတယျ။ သိတယျ။ လူထုတှေ ခံစားနရေတာတှေ ပွောသငျ့ပွောထိုကျတာတှကေို သူမပွောဘူး” ဟု ဆိုသညျ။
AA ၏ မဟာမိတျဖွဈသညျ့ တအနျးအမြိုးသား လှတျမွောကျရေး တပျမတျော (TNLA) ၏ သတငျးနှငျ့ ပွနျကွားရေး တာဝနျခံ ဗိုလျမှူး မိုငျးအိုကျကြျောကလညျး ရခိုငျပဋိပက်ခတှငျ အရပျသားမြား အထိနာနသေညျ့အပျေါ အစိုးရဘကျမှ တာဝနျယူပေးရနျ လိုအပျသညျဟု ပွောသညျ။ “အစိုးရက တစုံတရာ ဝငျပွီး ဟနျ့တားတာ ညှိနိငငျးပေးတာ ဘာမှမရှိဘူး။ လူထု ဒုက်ခ ရောကျ နတော အစိုးရမှာ တာဝနျရှိတယျ။ ငွိမျးခမျြးရေး ဆှေးနှေးမှုမပွလေညျလို့ တိုကျပှဲဖွဈတာက တကဏ်ဍပါ။ လူထု ဒုက်ခရောကျနေ တာကတော့ အစိုးရက ဖွရှေငျးပေးဖို့လိုပါတယျ” ဟု ဗိုလျမှူးမိုငျးအိုကျကြျောက ဆိုသညျ။
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဦးဆောငျသညျ့ အမြိုးသားပွနျလညျသငျ့မွတျရေးနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးဗဟိုဌာန (NRPC)မှ AA အပါအဝငျ မွောကျပိုငျး မဟာမိတျ ၄ ဖှဲ့နှငျ့ ပဏာမ အပဈရပျ စာခြုပျ (Bilateral) ခြုပျဆိုနိုငျရေး ညှိနှိုငျးနမှေုသညျလညျး ပွလေညျခွငျး မရှိ သေးပါ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/14/222615.html
တပျမတျော ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး၏ အပဈအခတျရပျစဲရေး ထုတျပွနျခကျြမှာ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ရာဇဝတျခုံရုံး (ICJ) တှငျ ရငျဆိုငျနရေသညျ့ နိုငျငံတကာ ဖိအားမြားကိုလြှော့ခရြနျ ဟနျပွထုတျခွငျးသာဖွဈသညျဟု ညီနောငျ မဟာမိတျ ၃ ဖှဲ့က ဝဖေနျ ပွောဆိုသညျ။ ညီနောငျ မဟာမိတျ ၃ ဖှဲ့၏ အဖှဲ့ဝငျ တအနျးအမြိုးသား လှတျမွောကျရေး တပျမတျော (TNLA) မှ ပွောရေး ဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူး မိုငျးအိုကျကြျောက “သူတို့က နိုငျငံတကာ ဖိအားလြှော့အောငျလုပျတာလို့ပဲ မွငျပါတယျ။ ဟနျပွ ထုတျတယျ လို့မွငျတယျ။ ကုလသမဂ်ဂက တိုကျတှနျးထားတာလညျးရှိတယျ။ ပွီးရငျ ရခိုငျဘကျမှာ လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှု တျောတျော မြားမြားကို လုပျတယျ။ ဖိအားတှေ လြော့နညျးအောငျ အခုလို ထုတျတာလို့ပဲ မွငျပါတယျ”ဟု ပွောသညျ။
တပျမတျော အနဖွေငျ့ COVID-19 အတှကျ ကူညီရနျ အပဈရပျဆိုငျးပေးပါသညျဟု ပွောဆိုသျောလညျ ၎င်းငျးတို့လှုပ ရှားသညျ့ နယျမွအေတှငျးမှ ဒသေခံမြားထံသို့ လာရောကျကူညီပေးခွငျးမြား တစုံတရာမရှိသေးပါဟု ဗိုလျမှူး မိုငျးအိုကျကြျောက ပွော သညျ။ ထို့ပွငျ အပဈရပျဆိုငျးသညျ့ထဲတှငျ တိုကျပှဲမြား အပွငျးထနျဆုံး ဖွဈပှားနသေညျ့ ၎င်းငျးတို့၏ မဟာမိတျ ရက်ခုငျစဈတပျ (AA) လှုပျရှားရာ ဒသေမြားကို ခနျြလှပျထားခဲ့ခွငျးကလညျး အမှနျတကယျ အပဈရပျဆိုငျးလိုခွငျးမရှိကွောငျးကို ပွသနခွေငျး ဖွဈသညျဟု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။ ညီနောငျ မဟာမိတျ ၃ ဖှဲ့ဖွဈသညျ့ TNLA ၊ မွနျမာ အမြိုးသား ဒီမိုကရကျတဈ မဟာမိတျတပျ မတျော (MNDAA) နှငျ့ ရက်ခိုငျစဈတပျ (AA) တို့က မေ ၁၀ ရကျကလညျး တပျမတျော၏ အပဈရပျစဲကွောငျး ကွညောခကျြ အပျေါ ဝဖေနျသညျ့ ထုတျပွနျခကျြတစောငျ ထုတျထားသညျ။
မွနျမာနိုငျငံသညျ ရခိုငျပွညျနယျတှငျး တပျမတျောက လူမြိုးတုံး သတျဖွတျမှု၊ စဈရာဇဝတျမှု ကြူးလှနျနသေညျဟုသညျ့ စှပျစှဲ ခကျြမြားဖွငျ့ ဂမျဘီယာနိုငျငံ၏ တရားစှဲဆိုထားမှုကွောငျ့ ICJ တှငျ တရားရငျဆိုငျနရေဆဲ ဖွဈသညျ။ ထိုထဲတှငျ တပျမတျော ဘကျမှ အပဈရပျသညျဟု ကွညောသျောလညျး MNDAA လှုပျရှားရာ ကိုးကနျ့ဒသေတှငျ စဈရေးတငျး မာမှုမြားနှငျ့ တိုကျပှဲမြား ရှိနဆေဲ ဖွဈကွောငျး၊ AA လှုပျရှားရာ ဒသေမြားကို ခနျြလှပျထားခဲ့သညျ့အပျေါတှငျ ထောကျပွ ဝဖေနျခကျြမြားလညျး ထညျ့ သှငျး ရေးသားထားသညျ။
ဗိုလျမှူး မိုငျးအိုကျကြျောက “ကနြျောတို့ ရှောငျနလေို့ တိုကျပှဲက မဖွဈတာ။ မဟုတျရငျ နရောတကာမှာ ဖွဈနိုငျတဲ့ အနအေထား ရှိတယျ။ သူတို့နဲ့က မိုငျအားဖွငျ့ ၄ မိုငျ၊ ၅ မိုငျကနေ ၁၀ မိုငျ ဝနျးကငျြကို ပတျပတျလညျ လှုပျရှားမှုတှေ ရှိနတော။ ရှာ တှမှော လညျး ဝငျနတော ရှိတယျ။ နညျးနညျး ထပျလှုပျရှားလိုကျတာနဲ့ တိုကျပှဲ အမွဲတမျး ဖွဈမယျ့ နရောတှပေဲ ဖွဈပါတယျ”ဟု ပွော သညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/12/222470.html
သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး လားရှိုးမွို့နယျအတှငျး မွနျမာ့တပျမတျောသညျ ကိုဗဈ-၁၉ ထိနျးခြုပျ ကာကှယျသညျ့ ကာလအတှငျး စဈအငျးအားတိုးခြဲ့မှုမြားပွုလုပျကာ ရှားသားမြားကိုအတငျးအဓမ်မခိုငျးစမှေုမြားပွုလုပျနကွေောငျး သြှမျးလူ့အခှငျ့အရေး မဏ်ဍိုငျ က ထုတျပွနျထားသညျ။
မေ ၁၁ ရကျစှဲဖွငျ့ ထုတျပွနျသော SHRF ၏ အဆိုပါကွငွောခကျြသညျ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ ကိုဗဈ-၁၉ ကာလအတှငျး အစိုးရ တပျမြား လားရှိုးမွို့နယျအတှငျး စဈရေး အရှိနျမွငျ့ခွငျး၊ လယျသမားမြားအား ညှငျးပနျးနှိပျစကျသတျဖွတျခွငျး နှငျ့ ရှာသားမြား အား အတငျးအဓမ်မ ခိုငျးစခွေငျးတို့ပွုလုပျနသေညျဟု ရေးသားထားသညျ။ ဧပွီ ၂၄ ရကျ က အစိုးရတပျမ ၉၉ မှ တပျသား မြား သညျ လားရှိုးမွို့နယျ ဝမျဟိုဆေ ကြေးရှာသား တဦးသညျ နှားကြောငျးပွနျလာသညျကို ဖမျးဆီး ရိုကျနှကျကာ ပဈသတျလိုကျကွောငျး သိရသညျ။ တပျမတျော မှ သနေတျပဈသတျခံရသညျ့ အသကျ ၂၇ နှဈ အရှယျ အဆိုပါ အမြိုးသားကို ဧပွီ ၂၆ ရကျ မှ မိသားစုဝငျမြားက ပွနျလညျရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ကွောငျးလညျး SHRF ၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျဖျောပွထားသညျ။ ထို့ပွငျ လားရှိုးမွို့ နယျ မိုငျးကကျြ ကြေးရှာအုပျစုနေ ရှာသားမြားကိုလညျး မွနျမာ့တပျမတျောက ဧပွီလက လုပျအား စခေိုငျးခွငျး တို့ကို ပွုလုပျ သေးကွောငျး ထုတျပွနျခကျြတှငျရေးသားထားသညျ။
“ ကနြျောတို့ အနနေဲ့က ဒီလို ကာလမှာ မွနျမာ့တပျမတျောအနနေဲ့ ဒသေခံ ပွညျသူတှကေို လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျတာ၊ အတငျးအဓမ်မစခေိုငျးတာ၊ သတျဖွတျတာတှကေို ရှုံ့ခပြါတယျ။ ဒါက မဖွဈသငျ့တဲ့အရာပါ” ဟု SHRF ၏ ပွောရေး ဆိုခှငျ့ရှိသူ စိုငျးဟျောရှဲနျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ သို့ပွောသညျ။ သြှမျးလူ့အခှငျ့အရေး မဏ်ဍိုငျ အနဖွေငျ့ အစိုးရစဈတပျ၏ အပွဈမဲ့ ပွညျသူ မြားအား ဆကျတိုကျ နှိပျစကျ ညှငျးပနျးခွငျး၊ တရားမဲ့ သတျဖွတျခွငျး၊ အတငျးအဓမ်မစခေိုငျးမှုကို ရှုတျခကြွောငျး၊ အထူးသဖွငျ့ လကျရှိ ကိုဗဈ-၁၉ အခြိနျ စဈတပျမှ ကပျရောဂါအန်တရာယျကို ကာကှယျထောကျပံ့ကူညီပေးသငျ့ကွောငျးလညျး ဝဖေနျထောကျ ပွလိုကျသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16520
လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမြားတှငျ ပြံ့နှံ့နသေော လူငါးဦးကို ရိုကျနှကျစဈဆေးနသေညျ့ ဗီဒီယိုဖိုငျပါ တပျမတျောသားမြားကို စဈစညျးကမျးဥပဒနှေငျ့အညီ အရေးယူသှားမညျဟု တပျမတျော သတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့အတှငျးရေးမှူး ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက မဇ်ဈိမကို ပွောသညျ။ ” ပုဏ်ဏကြှနျး ကြောကျဆိပျကြေးရှာမှာ အအေေ နဲ့ ပါတျသကျတဲ့ လူငါးဦးဖမျးဆီးခဲ့တယျ။ သူတို့ကို စဈဆေးမေးမွနျးခဲ့တယျ။ စဈဆေးမေးမွနျးပွီးတော့ ဒီလူတှကေို တရားစှဲတငျနိုငျရေးအတှကျ စဈတှေ ရဲစခနျးကို ပို့ဖို့ ဆောငျရှကျတယျ။ စဈတှကေို ပို့တဲ့အခါမှာ စဈရယောဉျနဲ့ပို့ခဲ့တယျ။ အဲ့ဗီဒီယိုဖိုငျမှာ တှရေ့တာကတော့ စဈရယောဉျမှာ အစောငျ့လိုကျပါသှားတဲ့ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျတှကေ သူတို့ကို တရားဥပဒနေဲ့မညီတဲ့ စဈဆေးမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး တှရှေိ့ရပါ တယျ။ တရားဥပဒနေဲ့မညီတဲ့ စဈဆေးမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျတှကေို စဈစညျးကမျးအရ အရေးယူသှားမှာ ဖွဈပါ တယျ။ အရေးယူနိုငျဖို့ ဆောငျရှကျထားပွီးလညျးဖွဈပါတယျ။”ဟု ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွောသညျ။
အရေးယူခံရမညျ့ တပျမတျောသားအရအေတှကျကို ထုတျဖျောပွောဆိုခွငျးမရှိဘဲ ဖွဈစဉျမှာ ရခိုငျပွညျနယျ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ ကြောကျဆိပျကြေးရှာတှငျ တပျမတျောမှ ဧပွီလ ၂၁ ရကျနတှေ့ငျ AA လကျနကျကိုငျအဖှဲ့နှငျ့ ဆကျနှယျသညျဟုဆိုကာ ဒသေခံ မြားကို ဖမျးဆီးပွီး စဈတှမွေို့မ ရဲစခနျးသို့ တပျမတျောစဈရယောဥနှငျ့ ပို့ဆောငျစဉျ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြားက ရိုကျနှကျ စဈမေးနသေညျ့ ဗီဒီယိုဖိုငျတခု မလေဆနျးတှငျ လူမှုကှနျယကျပျေါရောကျရှိလာခွငျး ဖွဈသညျ။
“ဘယျနှဈဦးရှိလဲဆိုတာတော့ မပွောနိုငျသေးဘူး။ အဲ့ဒီမှာ ပါသှားတဲ့ လုံခွုံရေးတပျမတျောသားတှေ အကုနျကိုတော့ ထိနျးသိမျး ထားပွီးဖွဈတယျ။ အကုနျလုံးကို ထိနျးသိမျးထားပွီး အရေးယူရမယျ့ သူကို ထပျမံစဈဆေးနတေယျ။ စဈစညျးကမျးအရ အရေး ယူသှားမယျ။” ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွောသညျ။ ရခိုငျပွညျနယျနှငျ့ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝတို့တှငျ ရခိုငျတပျ အအေေ နှငျ့ တပျမတျောတို့ကွား တိုကျပှဲ ခပျစိပျစိပျဖွဈနပွေီး နှဈဖကျထိခိုကျမှုမြားရှိကာ အရပျသားသဆေုံးမှုမြားလညျး ရှိသညျ။ http:/ /www.mizzimaburmese.com/article/69780
ကခငျြပွညျနယျရှိ အခွခေံပညာ စာသငျကြောငျးမြားတှငျ စနဈသဈသငျရိုးညှနျးတမျးကို အှနျလိုငျးစနဈဖွငျ့ သငျကွားမညျ ဆိုပါ က အငျတာနကျမရနိုငျသညျ့ မွို့နယျ ၇ ခု ရှိသညျဟု သိရသညျ။
အှနျလိုငျးစနဈသငျကွားနိုငျရနျအတှကျ အခွခေံပညာရေးဦးစီးဌာန(နပွေညျတျော)မှ တိုငျးနှငျ့ ပွညျနယျအသီးသီးရှိ ဆရာ/မ မြားအား မလေ ၁၁ ရကျနမှေ့စတငျကာ စမျးသပျသငျကွားနပွေီးဖွဈကွောငျး ကခငျြပွညျနယျ ပညာရေးမှူးရုံးမှ ပွညျနယျ ဒု ညှနျကွားရေးမှူး ဒျေါခငျနှငျးဦး ပွောသညျ။ “ခုလောလောဆယျတော့ ဆရာမခွောကျယောကျကို အရငျဆကျသှယျပွီးမှ လုပျကွညျ့မှာပေါ့။ ဒီ ဆရာမ ခွောကျယောကျ အဆငျပွတေယျဆိုရငျတော့ ဆရာမတှအေားလုံးက မှတျပုံတငျရမယျ။ ခုလော လောဆယျတော့ ၂ ရကျဆကျတိုကျ စမျးသပျနပွေီဖွဈတယျ။ မနကေ့ထကျဆိုရငျ ဒီနတေ့ော့ အဆငျပွတေယျ။ ဒါပမေယျ့ ကခငျြပွညျနယျမှာ တဈကမျးတမျး ဒီစနဈသဈ သငျရိုးညှနျးတမျးကို သငျကွားမယျဆိုရငျ အငျတာနကျမရတဲ့နရောတှကေ ဆရာ/မတှအေတှကျ ခကျခဲတှရှေိမယျ” ဟု ဒုညှနျကွားရေးမှူး ဒျေါခငျနှငျးဦးက ပွောသညျ။
လကျရှိ ကခငျြပွညျနယျတှငျ အငျတာနကျမရသေးသော မွို့နယျ ၇ ခုမှာ တနိုငျး၊ ခြီဖှေ၊ ဆော့လျော၊အငျဂနျြယာနျ၊ ခေါငျလနျဖူး၊ နောငျမှနျ နှငျ့ ဆှမျပရာဘှမျ စသညျ့တို့ဖွဈသညျ။
စနဈသဈ သငျရိုးညှနျးတမျးသဈပို့ခရြနျနှငျ့ ပတျသကျပွီး နောကျဆကျတှဲလုပျဆောငျရမညျ့ အစီအစဉျမြားအား တိတိကကြ ညှနျကွားခကျြမရှိသေးသညျ့အပွငျ အခွခေံစာသငျကြောငျးမြား ဖှငျ့လှဈမညျ့ကိစ်စမြားနှငျ့ ပတျသကျပွီး ညှနျကွားခကျြတဈစုံ တဈရာမရှိသေးကွောငျး ဆကျလကျပွောဆိုသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/05/13/%e1%80%a1%e 1%80%bd%e1%80%94%e1%80%ba%e1
ကရငျပွညျနယျရှိ ပွညျသူမြား၏ လတျတလောတှကွေုံ့နရေသညျ့ အခကျအခဲမြား၊ လိုအပျခကျြမြားကို တဖကျ တလမျးမှ ကူညီဖွရှေငျးပေးနိုငျရနျအတှကျ ကရငျအမြိုးသားဒီမိုကရကျတဈပါတီ-KNDPက ကူညီလှူဒါနျးမှုမြား ပွုလုပျပေးသှားရနျ စီစဉျ နကွေောငျး ပါတီတာဝနျရှိသူမြားထံမှ သိရသညျ။
ထိုသို့လုပျဆောငျရာတှငျ ပွညျနယျအတှငျး တိုကျပှဲရှောငျ ပွညျသူမြား၊ COVID-19 ကာကှယျထိနျးခြုပျရေး စီမံ ခကျြမြားအပွငျ လကျရှိပွညျနယျအတှငျး နရောတျောတျောမြားမြားတှငျ ကွုံတှနေ့ရေသညျ့ ရပွေတျလပျမှု အခွအေနမြေားအတှကျ ကူညီနိုငျ ရနျ ပါတီအနဖွေငျ့ ယခုလို ဆုံးဖွတျခွငျးဖွဈကွောငျး KNDP ပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ မနျးအောငျပွညျစိုးက ပွောသညျ။ “မလေ ၉ ရကျနေ့ မှာ (ပါတီတှငျး)သီးသနျ့ အရေးပျေါအစညျးအဝေးချေါပွီးတော့ ပါတီအတှကျ ဇောငျးပေးတာ မြိုးမဟုတျဘဲ တကယျ့စတေနာနဲ့ နိုငျသလောကျ စုကွဆောငျးကွတာပေါ့။ ဒီတဈခေါကျက တဈသောငျးကစ ၅ သိနျးအထိ လှူကွတာ ရှိတယျလေ။ ဆကျလကျ ပွီး လှူဒါနျးသှားဖို့လညျး ရှိပါတယျ။” ဟု ကအေိုငျစီသို့ ယနေ့ (မလေ ၁၂ ရကျ)တှငျ ပွောသညျ။ လိုအပျသညျ့ နရောမြားတှငျ လှူဒါနျးရနျအတှကျ ကောကျခံရရှိသညျ့ ရံပုံငှေ ကပျြသိနျး(၃၀) ကြျောအား မလေ ၁၀ ရကျနတှေ့ငျ ကမမောငျးမွို့နယျခှဲ၊ ဝါသိုခို ရှာရှိ တိုကျပှဲရှောငျမြားအတှကျ ဆနျအိတျမြား၊ ၁၁ ရကျနတှေ့ငျ ပွညျနယျကနျြးမာရေးမှူးမှတဆငျ့ COVID-19 ကာကှယျထိနျး ခြုပျရေးစီမံခကျြ၊ ၁၂ ရကျနတှေ့ငျ လှိုငျးဘှဲမွို့နယျ၊ မွိုငျကွီးငူရှိ စဈဘေးရှောငျပွညျသူမြားအတှကျ ဆနျနှငျ့အဝတျအထညျမြား လှူဒါနျးခဲ့ပွီဖွဈသညျဟု မနျးအောငျပွညျစိုးက ဆကျပွောသညျ။
ထို့အပွငျ ရရှေားပါးနသေညျ့ ဖားအံမွို့နယျရှိ အနောကျဖကျကမျး၌ ရသပြေံ့၊ ဘားကပျ ကြေးရှာအုပျစုမြားနှငျ့ အရှဖေ့ကျခွမျး၌ သာမညဒသေမြားသို့ လာမညျ့ရကျပိုငျးအတှငျး ရမြေားသှားရောကျလှူဒါနျးသှားရနျ စီစဉျထားကွောငျးလညျး KNDP တာဝနျရှိ သူမြားထံမှ သိရသညျ။ ဖားအံမွို့နယျရှိ အငျးအိုငျ၊ ရတှေငျးမြားမှ ရမြေားမညျးနကျသညျ့ အရောငျပွောငျးလဲသညျ့ ကိစ်စဖွဈပျေါ ပွီးနောကျပိုငျး ရပွေဿနာပူပနျခဲ့ရသညျ့ ဒသေခံမြားအတှကျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာ ၁၈ ရကျတှငျ ကရငျအမြိုးသားဒီမိုကရကျ တဈပါတီ-KNDP မှ ဦးဆောငျ၍ သောကျရနှေငျ့သုံးရမြေားကို သှားရောကျ လှူဒါနျးခဲ့ဖူးသညျ။ http://kicnews.org/2020/05 /%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80
တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျစဈတပျ (AA) တို့၏ တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ နရေပျစှနျ့ခှာလာရသညျ့ ပလကျဝ စဈရှောငျမြားအတှကျ မိုးတှငျး ကာလမတိုငျမီ ခငျြးပွညျနယျအစိုးရက ဆနျအိတျ ၃၅၀ဝ ပို့ပေးရနျ စီစဉျနသေညျဟု ခငျြးပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ထံမှ သိရသညျ။ ခငျြးပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့၏ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ၊ စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျ က “ဆနျအိတျ ၃၅၀ဝ နဲ့ စားစရာတှေ အကုနျ ပို့ဖို့ တော့လုပျနတေယျ။ ဆနျအိတျက ၃၅၀ဝ ဆိုတော့တလစာလောကျတော့ရမှာပေါ့။ ပို့ဖို့ကလမျးမှာတိုကျပှဲကလညျး ဆကျတိုကျ ဖွဈနတေော့ လုံခွုံရေးကောငျးမှ ပို့လို့ရမယျ့ အခွအေနပေါ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
ထို ရိက်ခာဆနျမြားကို ဆမီးမွို့အပွငျ ပလကျဝမွို့ပျေါနှငျ့ ရှငျးလကျဝ၊ မီးဇာအထကျပိုငျးရှိ စဈဘေးရှောငျမြားအတှကျ ပို့ဆောငျ သှားမညျဖွဈပွီး မညျသညျ့ရကျ၊မညျသညျ့လမျးက ပို့ဆောငျမညျကိုမူ လုံခွုံရေးအရမပွောလိုကွောငျး ၎င်းငျးကဆိုသညျ။ စဈရှောငျ မြားအတှကျ ပို့ဆောငျမညျ့ ဆနျအိတျ ၃၅၀ဝ အနကျ အစိုးရ ဘတျဂကျြဖွငျ့ ဝယျယူထားသော ဆနျအိတျ ၃၂၀ဝ ပါဝငျပွီး ပွညျသူလူထုက ဝယျထားသညျ့ ဆနျအိတျ၂ ထောငျကြျော ပါဝငျကွောငျး သိရသညျ။
ခငျြးပွညျနယျတှငျ နှဈစဉျ ဖွဈနကြေ မိုးမြားသညျ့အခါ ကားလမျးခြျောခွငျး၊ တောငျပွို မွပွေိုခွငျးမြားရှိနိုငျပွီး တိုကျပှဲမြား ကလညျး ပွငျးထနျနဆေဲ ဖွဈခွငျးကွောငျ့ မိုးမကမြီ ဆနျအိတျမြားကိုအမှီ တငျပို့သှားရနျ စီစဉျထားကွောငျး စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက ဆိုသညျ။ ထိုကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျပွီး မိုငျနနျးဝကေ “ကမြတို့အနနေဲ့ စဈတပျကို မတ်ေတာရပျခံခငျြတာက ဆနျအိတျ ပို့တဲ့ကာလမှာ ကမြတို့ကို အကူအညီပေးဖို့၊ နောကျမို့ဆိုရငျ စဈဘေးနဲ့တိုကျရိုကျမသကျဆိုငျတဲ့ လူထုကအခွခေံ စားသောကျ ကုနျ ရှားပါးတာကွောငျ့ တျောတျောလေး အဆငျမပွကွေဘူး” ဟု ပွောသညျ။
ပလကျဝမွို့နယျတှငျ ၃၉၃ ရှာ ရှိသညျ့အနကျ ကြေးရှာတဝကျကြျောက စဈဘေးသငျ့နရေသလို ဆမီးနှငျ့ ပလကျဝ မွို့ပျေါတှငျ ရောကျရှိနသေညျ့ စဈရှောငျကြေးရှာပေါငျး ၇၀ ခနျ့ရှိနပွေီး အဆကျအသှယျမရသညျ့ ကြေးရှာမြားစှာရှိနသေေးကွောငျး စညျပငျ ဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက ဆိုသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/13/222561.html
ခိုငျပွညျနယျ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျတှငျးက သရကျပွငျရှာမှာ မိုငျးနငျးမိပွီး ရိုဟငျဂြာ မှတျစလငျ ကလေး နှဈဦး သဆေုံးကာ တဈဦး ထိခိုကျဒဏျရာရခဲ့ပါတယျ။ ဒီမိုငျးဟာ ဘယျသူ့လကျခကျြဆိုတာတော့ မသိရသေးပါဘူး။ ရိုဟငျဂြာ မှတျစလငျ ကလေး ငယျ သုံးဦးဟာ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျတှငျးမှာရှိတဲ့ ခြာကရှောကနေ သရကျပွငျရှာကို အသီးသှားခူးရငျး မိုငျးနငျးမိခဲ့တာဖွဈ တယျလို့ လုံခွုံရေးအရ အမညျမဖျောလိုတဲ့ ဒသေခံတဈဦးက RFA ကို ပွောပါတယျ။
သဆေုံးသှားတဲ့ ကလေးတှရေဲ့ မိသားစုဝငျတှကေို ဆကျသှယျခြိနျမှာ သဆေုံးတာမှနျကနျကွောငျးနဲ့ ဘာသာစကား အခကျ အခဲကွောငျ့ အသေးစိတျကို RFA က မေးလို့မရခဲ့ပါဘူး။ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ ANP က ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ ပွညျနယျလှတျ တျောကိုယျစားလှယျ ဦးထှနျးအောငျသိနျးကတော့ သဆေုံးသှားတဲ့ ရိုဟငျဂြာကလေး နှဈဦးမှာ ခြာကရှောက အသကျ ၁၅ နှဈ အရှယျ အတူလာမီနဲ့ အသကျ ၁ဝ နှဈအရှယျ ရာဟတျနာဟာတူတို့ ဖွဈကွပွီး၊ ဒဏျရာရခဲ့တဲ့ အသကျ ၁ဝ နှဈအရှယျ ကလေး ကတော့ ဖုနျညိုလိပျရှာ ၁ဝ ရပျကှကျက ဟာဒကောဘဘေီ တို့ ဖွဈတဲ့အကွောငျး ပွောပါတယျ။ “နှဈယောကျသတေယျ၊ နောကျတဈယောကျက ဟာဒကောဘဘေီ အဖနောမညျက အဘူဘိုရှော ၁၀ နှဈ၊ သူက ဖုနျညိုလိပျ ၁၀ ရပျကှကျလို့ ပွော တယျ။ သူကတော့ ဒဏျရာရတယျ။ အခုအခြိနျက သူ ဆေးရုံတငျထားရတယျလို့ ပွောတယျ။” ကလေး တဈဦးဟာ မိုငျးနငျး မိတဲ့နရောမှာတငျ ပှဲခငျြးပွီး သဆေုံးခဲ့ပွီးတော့ နောကျတဈဦးကတော့ ဆေးရုံကိုအသှားလမျးမှာတငျ သဆေုံးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အသကျမသဘေဲ ဒဏျရာရခဲ့တဲ့ အသကျ ၁၀ နှဈအရှယျ ကလေးကတော့ ဘူးသီးတောငျဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနတေယျ လို့ ဖုနျညိုလိပျရှာ အုပျခြုပျရေးမှူးက ပွောပါတယျ။
တပျမတျော သတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့ အတှငျးရေးမှူး ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ဒီနရောမှာ မိုငျးဘယျသူ ထောငျသလဲ ဆိုတာ သဆေုံးသှားတဲ့သူတှရေဲ့ ဆှမြေိုးတှကေို မေးရငျ သိနိုငျကွောငျး၊ ရခိုငျရှာမှာ တပျမတျောက မိုငျးထောငျရငျ မိုငျးထောငျ နပေါတယျလို့ ဝိုငျးဝနျးပွောကွမှာဖွဈကွောငျး၊ အဲဒီအနားက မှတျစလငျရှာမှာ အရငျကလညျး ဖွဈစဉျတှရှေိခဲ့ဖူးကွောငျး၊ AA မိုငျးလာထောငျရငျး ရှာသားတှနေဲ့ ပွဿနာဖွဈခဲ့ဖူးကွောငျး RFA ကို ပွောကွားပါတယျ။ ရက်ခိုငျ့တပျတျော AA ပွောခှငျ့ရပုဂ်ဂိုလျ ခိုငျသုခ ကို ဆကျသှယျမေးမွနျးရာမှာ – ဘူးသီးတောငျမွို့နယျမှာ တိုကျပှဲဖွဈတာမရှိကွောငျး၊ သရကျပွငျရှာဟာ ရှာဟောငျး ဖွဈပွီး အရငျကတပျမတျောကနေ ထောငျခဲ့တဲ့ မိုငျးတှဖွေဈကွောငျးနဲ့ မရှငျးလငျးရသေးတဲ့အတှကျ လကျကနျြမိုငျးတှဖွေဈ တယျလို့ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ https://www.rfa.org/burmese/news/buthedaung-explosion-05132020061644.html
၁၂။ မွဝတီမွို့တှငျ BGF တပျဖှဲ့ ဗိုလျမှူးဟောငျးတဈဦး နအေိမျအား ကားစီးလာသညျ့ သနေတျသမားမြားက ခြောငျးမွောငျး ပဈခတျ
ကရငျပွညျနယျ၊ မွဝတီမွို့ အမှတျ (၄) ရပျကှကျ၊ အာရှလမျးနှငျ့ အနန်တဂုဏျရညျလမျးထောငျ့၊ မငျးပဒုမ်မာဝငျးရှိ BGF တပျဖှဲ့ ဗိုလျမှူးဟောငျးတဈဦး၏ နအေိမျအား ကားစီးလာသညျ့ သနေတျသမားမြား ခြောငျးမွောငျးပဈခတျသညျ့ဖွဈရပျ မလေ ၁၂ ရကျ ည ၉ နာရီ ၂၀ ခနျ့က ဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
မွဝတီမွို့ အမှတျ (၄)ရပျကှကျ၊ အာရှလမျးနှငျ့ အနန်တဂုဏျရညျလမျးထောငျ့၊ မငျးပဒုမ်မာဝငျး ဦးစောတငျမွငျ့ (၆၂) နှဈ (ဘ) ဦးမှနျရှငျး၏ နအေိမျခွံဘေးသို့ Double Cap ယာဉျတဈစီး (စိစဈဆဲ) ရောကျရှိလာပွီး ကားပျေါမှ ဆငျးလာသညျ့ လူတဈဦးက ၉.မမ ပစ်စတိုသနေတျဖွငျ့ ၂ ခကျြပဈပွီး မောငျးနှငျထှကျပွေးသှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။“ပဈပွီးတော့ ကားပျေါတကျ ထှကျ သှားတာ၊ မွို့ပွငျဘကျခေါငျးလှညျ့ပွီး ကြှနျတျော ထှကျလာမလား စောငျ့နတေယျ၊ အရှညျပါရငျလညျး ပါမှာပေါ့၊ ကြှနျတျော အပွငျဘယျထှကျမလဲ၊ အရူးမှ မဟုတျတာ၊ ကြှနျတျော့ အိမျထဲဝငျလာ၊ တံခါးခကျြခငျြးဖှငျ့ပေးတယျ၊ ကြှနျတျော့မှာ ဓားပဲရှိတယျ ဆိုတော့ လိုကျလို့မှမရတာ၊ ကြှနျတျောမီးပါ ပွနျဖှငျ့ပေးတယျ။ လူအားလုံး ၈ ယောကျလောကျရှိတယျ၊ ပွဿနာ ဖွဈလာရငျ တော့ ရငျဆိုငျရမှာပေါ့” ဟု ပဈခတျခံခဲ့ရသူ စောတငျမွငျ့က ပွောကွားသညျ။
အဆိုပါ နအေိမျတှငျ ဦးစောတငျမွငျ့နှငျ့ အတူရှိနသေညျ့ ယောကျဖဖွဈသူ ကိုဘတိုက “သူတို့က မွို့ထဲဘကျကလာတာ။ ကား ကနောကျဖှငျ့ကား၊ တဈခကျြပဈသံကွားတော့ ထကွညျ့တယျ။ ကြှနျတျောက အိမျထဲမှာ၊ နောကျတဈခေါကျပဈတော့ ခေါငျးငုံ့ နလေိုကျတယျ။ ကားပျေါမှာတော့ လူဆယျဦးခနျ့ ရှိမယျထငျတယျ။ အရပျဝတျနဲ့ပါပဲ။ မွို့ထဲဘကျကလာပွီး မွို့ထဲဘကျကို ပွနျမောငျးသှားတာ တှရေ့ပါတယျ”ဟုဆိုသညျ။ BGF ဗိုလျှမှူးဟောငျးတဈဦး၏ နအေိမျတှငျ ယခုဖွဈစဉျမှာ ဒုတိယအကွိမျ လုပျကွံခွငျး ခံရခွငျးဖွဈပွီး၊ ယခငျ ဖဖေျောဝါရီလ ၃ ရကျနေ့ နံနကျ ၇ နာရီခှဲ ခနျ့ကလညျး မိုငျးနှဈလုံး ပေါကျကှဲမှုဖွဈပှားရာ လူနှဈဦး ထိခိုကျဒဏျရာ ရရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
အာရှလမျးမကွီးဘေးရှိ မငျးပဒုံမာဝငျး နအေိမျတှငျ ပဈခတျမှု ဖွဈပှားကွောငျး သတငျးအရ မွဝတီခရိုငျ ရဲတပျဖှဲမှူး ဒုတိယရဲမှူး ကွီး သကျလငျးဦးနှငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူး၊ နယျခွားစောငျ့ တပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ တပျမတျော ရှတေ့နျရုံးမှ တပျမ တျောသားမြား၊ မီးသတျတပျဖှဲ့ဝငျမြား ရပျကှကျအုပျခြုပျရေး အဖှဲ့ဝငျမြား သှားရောကျ စဈဆေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ https: //news-eleven.com/article/173359
RCSS/SSA ၏ တပျပွေး ၉ ဦး သြှမျးပွညျအရှပေို့ငျး မိုငျးတုံမွို့နယျအတှငျးသို့ ရောကျရှိလာရာ အစိုးရတပျမှ ထိနျးသိမျးထားပွီး စဈဆေးမှုပွုနကွေောငျးစုံစမျးသိရှိရသညျ။
သြှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ/သြှမျးပွညျတပျမတျော RCSS/SSA တပျဖှဲ့ဝငျ ၉ ဦးသညျ မေ ၉ ရကျတှငျ မိုငျးတုံ မွို့နယျသို့ လကျနကျမဲ့ဖွငျ့ ထှကျပွေးခဲ့ကွောငျး RCSS/SSA ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူး စိုငျးခမျးစံ က သြှမျးသံတျောဆငျ့သို့ ပွောသညျ။“ထှကျပွေးသှားတာ ဟုတျပါတယျ။ ၉ ယောကျစလုံးက တပွိုငျတညျး တခါတညျးထှကျပွေးသှားတာ မဟုတျဘူး။ ကနြျောတို့ အကွောငျးရငျးတှေ စဈဆေးနတေုနျးပဲ”ဟု RCSS/SSA ပွောရေး ဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူး စိုငျးခမျးစံ ကပွောသညျ။ ထှကျပွေးခဲ့သညျ့ တပျဖှဲ့ဝငျ ၉ ဦးသညျ တပျစုမှူး အဆငျ့ရှိသော သူ တဈဦး ပါဝငျနကွေောငျး စုံစမျး သိရှိရသညျ။
“ထှကျပွေးရတဲ့ အကွောငျးကို အသေးစိတျ စုံစမျးနဆေဲ”ဟု ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူး စိုငျးခမျးစံ ကပွောသညျ။ ထှကျ ပွေးလာသညျ့ တပျဖှဲ့ဝငျ ၉ ဦးကို မိုငျးတုံမွို့နယျရှိ နယျမွခေံ စဈဗြူဟာမှ စဈဆေးလကျြရှိကွောငျး ကမ်ဘောဇတိုငျး သတငျးဌာန မှာဖျောပွထားသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16507
မွနျမာ အာဏာပိုငျတှအေနနေဲ့ နိရဉ်စရာ သတငျး Website အယျဒီတာ ခိုငျမွတျကြျောကို တရားစှဲဆိုထားတာကို ရုပျသိမျးပေး ဖို့နဲ့ ရခိုငျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့ AA သတငျးတှကေို ရေးသားတငျပွနတေဲ့ သတငျးထောကျတှကေို ခွိမျးခွောကျနေ တာတှကေို ရပျဆိုငျးဖို့ သတငျးသမားမြား အကာအကှယျပေးရေးကျောမတီ( Committee to protect Journalists-CPJ) က ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ က တောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။ မတျလကုနျ ၃၁ ရကျနကေ့ အယျဒီတာခိုငျမွတျကြျောကို AA အဖှဲ့ပွောခှငျ့ရတဲ့ ဆကျသှယျ အငျတာဗြူး လုပျခဲ့တာကွောငျ့ အကွမျးဖကျမှု တိုကျဖကျြရေး ဥပဒနေဲ့ စဈတှမွေို့ ရဲတပျဖှဲ့က တရားစှဲဆိုခဲ့သလို သူ့ရဲ့ သတငျးဌာနကိုလညျး ရဲတပျဖှဲ့က စီးနငျး ဝငျရောကျခဲ့ပွီး ဝနျထမျး ၃ ဦးကို စဈဆေးမေးမွနျးဖို့ ခတ်ေတ ထိနျးသိမျးခဲ့တာကို CJP က သတငျးရရှိကွောငျးနဲ့ အဲဒီနောကျ အယျဒီတာ ခိုငျမွတျကြျော ရှောငျပုနျး နခေဲ့ ရကွောငျး သတငျးသမားတဈဦးကို ကိုးကားပွီး CJP က ပွောပါတယျ။
အကွမျးဖကျဥပဒတှေနေဲ့ သူ့ပျေါတရားစှဲဆိုထားတာကို ခကျြခငျြး ရုပျသိမျးသငျ့ကွောငျးနဲ့ သတငျးသမားတှကေို အကွမျးဖကျ သမားအဖွဈ မသတျမှတျဘဲ မွနျမာနိုငျငံက ပဋိပက်ခ ဖွဈပှားရာနရောတှမှော သတငျးယူဖို့ ခှငျ့ပွုရမှာ ဖွဈကွောငျး CPJ ရဲ့ အရှတေ့ောငျအာရှ ဒသေ ကိုယျစားလှယျ Shawn Crispin က ပွောပါတယျ။မတျလ ၃၁ ရကျနတေ့ဈနတေ့ညျးမှာပဲ မွနျမာ အာဏာပိုငျတှကေ အလားတူ စှဲခကျြနဲ့ VOICE OF MYANMAR အယျဒီတာ ကိုနလေငျးကို AA ပွောခှငျ့ရ ခိုငျသုခနဲ့ အငျတာဗြုးကို ထုတျဝမှေုအတှကျ တရားစှဲဆိုခဲ့ပမေယျ့ ဧပွီ ၁၀ ရကျနမှေ့ာတော့ ပွနျလှတျပေးခဲ့တယျလို့ ရိုကျတာ သတငျး တရပျမှာ ပါရှိပါတယျ။ https://burmese.voanews.com/a/myanmar-media-cpj-/5418719.html
ကုလသမဂ်ဂ လုံခွုံရေးကောငျစီမှာ ကွာသပတေးနကေ့ရြငျ ဗှီဒီယိုကတဆငျ့ ဆှေးနှေးရာမှာ ရခိုငျပွညျနယျမှာ ဆကျလကျ ဖွဈ ပှားနတေဲ့ လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခတှနေဲ့ COVID-19 ရောဂါဖွဈပှားမှု အခွအေနတှေကေို အဓိက အာရုံစိုကျကွလိမျ့မယျလို့ သံတမနျအသိုငျး အဝနျးက ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ အမရေိကနျပွညျထောငျစု နယူးယောကျမွို့အခွစေိုကျ ကုလသမဂ်ဂဆိုငျရာမွနျမာအမွဲတမျးကိုယျစားလှယျသံအမတျကွီး ဦးဟောကျဒိုဆှမျးကလညျး လတျတလောကွုံနရေတဲ့ကပျရောဂါအပွငျ၊ လုံခွုံရေး ကိစ်စတှေ ပါဝငျနိုငျကွောငျး ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျးကို ပွောပါတယျ။
“ကနြျောတို့ သိသလောကျကတော့ အစညျးအဝေးကတော့ Public မဟုတျဘူးခငျဗြ။ သူတို့အခငျြးခငျြးပဲ တံခါးပိတျပေါ့။ ဒီ အစညျးအဝေးမှာ ကုသသမဂ်ဂရဲ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အထူးကိုယျစားလှယျ Christine Schraner Burgener ကနေ အခွေ အနကေို Briefing လုပျဖို့ပါ အဓိကကတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ COVID-19 နဲ့ ပတျသကျပွီး သူတို့နိုငျငံတှကေသိခငျြလို့ Video Conferencing ချေါပွီး လုံခွုံရေးကောငျစီက လုပျမှာပါ။ လုပျတော့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အထူးကိုယျစားလှယျက Brief လုပျ မယျ၊ သူတို့က မေးခငျြတာတှမေေးမယျပေါ့။ အဓိကကတော့ မွနျမာနိုငျငံတှငျးက COVID-19 ကိစ်စ ဘာတှလေုပျထားလဲ။ နောကျစဈရှောငျစခနျးတှအေကွောငျး အရပျသားတှအေခွအေနေ နောကျ လုံခွုံရေးအခွအေနတှေလေညျး ပါမှာပေါ့ဗြာ။” အခု လို အထူးကိုယျစားလှယျကို ခနျ့ပွီးခြိနျမှာ အထှထှေညေီလာခံရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ ခွောကျလတခါလောကျ အသိပေးဖို့ ဆိုတဲ့ဟာ ရှိတယျ မွနျမာပွညျရဲ့အခွအေနေ တိုးတကျမှုဆိုတာကလညျး အခုလာမယျ့ ဇှနျလလောကျဆို ပွညျ့ပွီဆိုတော့ အဲ့ဒီ့တပိုငျး လညျး ဖွဈသှားတာပေါ့လေ။ အထှထှေညေီလာခံက အခုမလုပျဖွဈသေးတော့ အခု Brief လုပျရတာပေါ့ အခု ကိုဗဈ အခွေ အနကေလညျးဖွဈနတေော့ ပေါငျးပွီးလုပျလိုကျတယျထငျတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျမှာ ဧပွီလနှောငျးပိုငျးတုနျးက COVID-19 ဓါတျခှဲနမူနာတှေ သယျဆောငျလာတဲ့ ကုသသမဂ်ဂ အမှတျတံဆိပျပါကားတဈစီး တိုကျခိုကျခံခဲ့ရလို့ မွနျမာနိုငျငံသား ယာဉျမောငျးသဆေုံးပွီး၊ ကနျြးမာရေးဝနျထမျး တဈဦးလညျး တိုကျခိုကျမှုကို ကုလသမဂ်ဂ အတှငျးရေးမှူးခြုပျ Antonio Guterres က အပွငျးအထနျ ရှုတျခခြဲ့ပွီး ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုရှိရှိ စုံစမျးစဈဆေးဖို့လညျး တောငျးဆိုထားတာပါ။ ဒီကိစ်စဟာလညျး လုံခွုံရေးကောငျစီ အစညျးအဝေးမှာ ပါဝငျနိုငျကွောငျး ဦးဟောကျဒိုဆှမျးက ပွောပါ တယျ။ https://burmese.voanews.com/a/rakhine-conflicts-unsc/5416270.html
ရခိုငျပွညျနယျ ကြောကျတျောမွို့နယျအတှငျးက မှတျဆလငျရှာမြားဖွဈသညျ့ ပိုကျသညျနှငျ့ လကျဆောငျကောကျ ကြေးရှာမြား အတှငျး မေ ၁၁ ရကျနေ့ ညနပေိုငျးက လကျနကျကွီးကညျြ ကမြှနျပေါကျကှဲခဲ့သဖွငျ့ ရှာခံ ၅ ဦး ဒဏျရာရရှိသှားကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
ဒဏျရာရရှိသူမြားမှာ ပိုကျသညျ မှတျဆလငျရှာမှ အမြိုးသမီးငယျ ၂ ဦးနှငျ့ အသကျ ၁၆ နှဈအရှယျ ယောင်ျကြားလေး ၁ ဦး၊ လကျဆောငျကောကျကြေးရှာမှ အမြိုးသား ၂ ဦးတို့ ဖွဈကွောငျး ကြေးရှာသားမြားက ပွောသညျ။ လကျဆောငျကောကျ ကြေးရှာမှ ရာအိမျမှူး ဦးမောငျဖွူက “မနကေ့ ညနပေိုငျး ၅ နာရီလောကျမှာ လကျနကျကွီးကလြို့ ကနြျောတို့ရှာက မျောလဝီ ဆရာကွီး ၁ ဦးနဲ့ ကြောငျးဆရာ ၁ ဦး ဒဏျရာရပါတယျ။ နောကျထပျ ပိုကျသညျရှာက အမြိုးသမီး ၂ ဦးနဲ့ ကလေး ၁ ဦး ဒဏျရာ ရပါတယျ။ ပဈတာကိုတော့ ကနြျော မမွငျဘူး။ ရှာသားတှေ ပွောတာက ကစ်စပနဒီတံတားပျေါကနေ အစိုးရတပျမတျောက လှမျးပဈတာလို့ ပွောပါတယျ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
ကစ်စပနဒီ တံတားအနီးရှိ မွို့ခံမြားက ယမနျနကေ့ ညနပေိုငျးက တပျမတျော ယာဉျ ၁ စီး တံတားပျေါဖွတျသှားစဉျ ပေါကျကှဲ သံကို ကွားရပွီးနောကျ တပျမတျောစဈကွောငျးက ထိုသို့လှမျးပဈခွငျးဖွဈကွောငျးပွောသညျ။ တပျမတျောသတငျးပွနျကွားရေး အဖှဲ့မှ ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ယမနျနကေ့ အဆိုပါ ကစ်စပနဒီတံတား အနီးတှငျ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကာကှယျ တားဆီး ရေးအတှကျ ဆေးပစ်စညျးသှားရောကျ ထောကျပံ့သော တပျမတျော တပျဖှဲ့ဝငျမြားကို AA အဖှဲ့က မိုငျးခှဲတိုကျခိုကျမှု တခြို့ရှိ ကွောငျး ပွောသညျ။
ပွီးခဲ့သော ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ ၂၈ နကေ့လညျး ကြောကျတျောမွို့အဝငျ၌ တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ့ စဈတပျ ( AA ) တို့ ပဈခတျမှု ဖွဈပှားခဲ့ရာ မွို့ခံ ၄ ဦး ထိခိုကျ ဒဏျရာ ရရှိခဲ့သညျ။ ရခိုငျပွညျနယျ၊ မွောကျပိုငျးမွို့နယျမြားတှငျ တပျမတျောနှငျ့ AA တို့သညျ ၂၀၁၈ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလကုနျကတညျးက နှဈဘကျတိုကျပှဲမြား ပွငျးထနျစှာဖွဈပှားနသေညျမှာ ၂ နှဈနီးပါး ကွာမွငျ့ လာပွီဖွဈရာ စဈဘေးရှောငျ အရအေတှကျမှာ သိနျးခြီရှိကာ ဒသေခံပွညျသူမြားမှာလညျး အသကျလု ထှကျပွေးနကွေရသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/05/12/222468.html
၁၇။ မွနျမာနိုငျငံ မွောကျဖြားပိုငျး ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျတှငျ နယျစပျမြား ပိတျထားခွငျး၊ လမျးပနျးဆကျသှယျရေး ခကျခဲခွငျးမြား ကွောငျ့ စားနပျရိက်ခာ ပွတျလပျနေ
မွနျမာနိုငျငံ မွောကျဖြားပိုငျး ကခငျြပွညျနယျ၊ ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျတှငျ နယျစပျမြား ပိတျထားခွငျး၊ လမျးပနျးဆကျသှယျရေး ခကျခဲခွငျးမြားကွောငျး စားနပျရိက်ခာ ပွတျတောကျနကွေောငျး ဒသေခံ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားက The Daily Eleven သတငျးစာသို့ ပွောကွားသညျ။ ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျသညျ ကခငျြပွညျနယျ ပူတာအိုခရိုငျအတှငျးပါဝငျပွီး လမျးပနျးဆကျသှယျ ရေး ခကျခဲမှုကွောငျ့ ပူတာအိုမှ လေးရကျ၊ ငါးရကျခရီးလမျးလြှောကျရပွီး တရုတျနိုငျငံနှငျ့ တဈရကျ၊ နှဈရကျခရီးဝေးကှာသညျ့ မွို့နယျတဈခု ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ ၁ မှ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးရှလေေးက “အဓိက ဖွဈသှားတာက တရုတျ ဘကျက COVID-19 ရောဂါကွောငျ့ နယျစပျ မှတျတိုငျ ၃၀၊၃၁၊၃၅ ဝငျပေါကျတှကေို နညေ့ ပိတျလိုကျတယျ။ ပူတာအိုဘကျကို ခွကေငျြခရီးကလညျး လမျးမှာ လေးငါးရကျလောကျ သယျယူရတော့ ဒသေတှငျး ရိက်ခာပွတျတာပေါ့။ တဈလလောကျ ကွာ သှားပွီ။ ဒီထကျကွာရငျတော့ အခွအေနဆေိုးပွီး အရငျကာလတှကေ ကွုံရသလို တောထှကျပွီး ရှာစားရမှာပေါ့။ အခုဒသေခံ တှကေ အူလိုငျ၊ အထေး၊ ဒိုငျဂလယျပငျတှကေို အရညျစဈ၊ အပုပျခံပွီး စားနကွေတယျ။ အပငျကိုထုခပြွေီး အနှဈကို စားတာ ပေါ့။ ရိက်ခာပွတျတာကွာရငျ ဒသေခံတှေ ဒုက်ခရောကျမှာပေါ့။ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ခုနှဈက ဝါးတှသေီးတော့ ကွှကျတှေ ထပွီး ဒသေတှငျးက ရိက်ခာစိုကျပြိုးရေးကို ထိခိုကျသှားတာလညျးပါတယျ။ ဒါတှေ အားလုံး ပွလေညျဖို့ကတော့ လမျးပနျးဆကျ သှယျရေး ကောငျးအောငျလုပျဖို့ပါပဲ။ အစိုးရက နှဈတိုငျးဖွရှေငျးနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး”ဟု ပွောကွားသညျ။
ယငျးဒသေသို့ ရိက်ခာမြား ပို့ဆောငျမညျဆိုပါက ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျ တောငျခွမျးဒသေအတှကျ မွဈကွီးနား-ခြီဖှေ-ဆော့လျော လမျးပိုငျးနှငျ့ မွဈကွီးနား-ပူတာအို-ရီဒမျး စသညျ့ လမျးပိုငျးကို အသုံးပွုရမှာဖွဈကွောငျး ဒသေခံ လှတျတျောကိုယျစားလှယျက ဆိုပါသညျ။ ခေါငျလနျဖူးမွို့နယျသညျ ကြေးရှာအုပျစု ၂၆ အုပျစု၊ လူဦးရေ ၁၇၀ဝဝ ဝနျးကငျြရှိပွီး ဒသေခံ တိုငျးရငျးသားမြားမှာ လီဆူနှငျ့ ရဝမျတိုငျးရငျးသား နှဈမြိုးသာရှိသညျ။ https://news-eleven.com/article/173544
မှနျပွညျနယျ ကြိုကျမရောမွို့နယျ၌ လူစုလူဝေးဖွငျ့ ဘုရားထီးတျောပငျ့ဆောငျရနျ ဦးဆောငျသူ ကော့ခလိနျကြေးရှာအုပျစု ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီဝငျ ဦးဇျောမငျးကို မလေ ၁၂ ရကျနတှေ့ငျ မွို့နယျတရားရုံးက ထောငျဒဏျ ၉ လ ကခြံစရေနျ အမိနျ့ခမြှတျခဲ့ ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
ကြိုကျမရောမွို့နယျ ရဲတပျဖှဲ့မှူး ရဲမှူး မငျးအောငျက “ထောငျဒဏျ ၉ လ ခလြိုကျပါတယျ သဘာဝဘေးအန်တရာယျ စီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒပေုဒျမ ၃၀(က) နဲ့ပဲ သူ့ကို အကဉျြးထောငျပို့ရတော့မှာပါ သူက ဒီလိုဗြ ရှနေ့တှေပေါ ငှားပွီးတော့ ကှနျပလိနျးတကျတာ အဲဒါကွောငျ့ ကွာသှားတာ သကျသတှေလေညျးမြားတယျ”ဟု ဆိုသညျ။ ကွာအငျးခြောငျးကြေးရှာနေ ဦးဇျောမငျးသညျ ပွီးခဲ့သညျ့ သမ်မတဦးသိနျးစိနျအစိုးရ လကျထကျ၌ ကော့ခလိနျကြေးရှာအုပျစု အုပျခြုပျရေးမှူးဖွဈခဲ့သလို ၎င်းငျး၏ပွိုငျဘကျ လကျရှိ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးသညျလညျး NLD ပါတီဝငျအမာခံဖွဈနပွေီး အုပျစုတဈဖကျနှငျ့တဈဖကျ အတိမျးအစောငျး မခံ ဖွဈနကွေောငျး အမညျမဖျောလိုသူ ရှာသားတဈဦးက ပွောသညျ။ “ဘုရားထီးတငျပှဲအတှကျ ရှာလှညျ့တဲ့ကိစ်စကို အခုအုပျခြုပျ ရေးမှူးခှငျ့မပွုဘူး တားထားတယျ၊ ဒါပမေယျ့ ဦးဇျောမငျးက မွို့နယျနဲ့ အထကျကို သူပွောလို့ပွီးတယျဆိုပွီး လုပျခပြလိုကျတာ ခုလိုအရေးယူခံရတာပေါ့”ဟု ၎င်းငျးရှာသှားက ဆိုသညျ။
COVID 19 ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျသညျ့ကာလအတှငျး ဆောငျးဘောကျဈတငျကားနှဈစီး၊ ကြေးရှာသူ/သား ၁၅၀ ဦးကို မျောတျောယာဉျ ၁၈ စီးဖွငျ့တငျဆောငျ၍ ဘုရားထီးတျောပငျ့ဆောငျရနျ မတျလ ၃၀ ရကျနကေ့ လူစုလူဝေးလှညျ့လညျခဲ့သညျ့ အတှကျ ကြိုကျမရောမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူးက ဧပွီလ ၁ ရကျနတှေ့ငျ သဘာဝဘေးအန်တရာယျ စီမံခနျ့ခှဲမှု ဥပဒေ ၃၀ (က) ဖွငျ့ ဦးဆောငျသူ ဦးဇျောမငျးကို တရားစှဲဆိုခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ Covid 19 နဲ့ ပတျသကျပွီး လူစုလူဝေးနှငျ့ ပှဲလမျးသဘငျမြားကို မေ ၁၅ ရကျနအေ့ထိ မပွုလုပျရနျ မှနျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့က မတျလ ၂၈ ရကျနကေ့ ထုတျပွနျထားပွီး လိုကျနာမှုမရှိပါက ရာဇာသတျကွီးဥပဒေ၊ ကူးစကျရောဂါမြား ကာကှယျနှိမျနငျးရေးဥပဒေ၊ သဘာဝဘေးအန်တရာယျစီမံခနျ့ခှဲမှုဆိုငျရာဥပဒဖွေငျ့ အရေးယူသှားမညျဖွဈသညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/05/14/%e1%80%80%e1%80%bb%e1%80%
ကမ်ဘာတဝှမျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကပျရောဂါကို ခုခံကာကှယျနရေတဲ့အခြိနျမှာ ရခိုငျပွညျနယျနဲ့ ခငျြးပွညျ နယျမှာတော့ စဈပှဲတှေ ပွငျးထနျနပွေီး လူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျခံရတာတှေ ပိုမြားနတေဲ့အတှကျ မွနျမာအစိုးရနဲ့တပျမတျောကို သံတမနျနညျးတှေ သုံးပွီး ဖိအားပေးတိုကျတှနျးပေးပါဆိုပွီး အမရေိကနျပွညျထောငျစုအခွစေိုကျ ဂြူးအဖှဲ့တှေ၊ မွနျမာနိုငျငံသားဟောငျးတှရေဲ့အဖှဲ့ တှကေ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး မိုကျပှနျပေးယိုကို မလေ ၁၃ ရကျနမှေ့ာ စာရေးသားတောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။
တကမ်ဘာလုံး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကပျရောဂါ ရငျဆိုငျနရေတဲ့အတှကျ ပဈခတျတိုကျခိုကျနတောတှေ ရပျဖို့ ကုလသမဂ်ဂအတှငျးရေး မှူးခြုပျရဲ့ တိုကျတှနျးခကျြအတိုငျး မွနျမာအစိုးရကလဲ တနိုငျငံလုံးမှာ အပဈရပျကွောငျးကွညောဖို့နဲ့ တပျမတျောကလဲ သဘော တူဖို့၊ ရခိုငျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျမှာ ဖွတျထားတဲ့ အငျတာနကျလိုငျးတှကေို ခကျြခငျြးပွနျဖှငျ့ပေးဖို့၊ သတငျးမီဒီယာတခြို့ရဲ့ အငျတာ နကျဝကျဘျဆိုဒျ ပိတျလိုကျတာတှေ ပွနျဖှငျ့ပေးပွီး၊ သတငျးထောကျတှကေို တရားစှဲတာရပျဖို့နဲ့ ကနျြးမာရေးစဈဆေးခှငျ့ကို လူတိုငျးတနျးတူရပွီး၊ လူသားခငျြးစာနာမှုအကူအညီတှေ အခြိနျမှီရအောငျ ဆောငျရှကျပေးဖို့ ဆိုတဲ့အခကျြတှဖွေဈပါတယျ။
ဒီလိုတောငျးဆိုရတာနဲ့ ပတျသကျပွီး လှုပျရှားမှုကို ဦးဆောငျတဲ့ American Jewish World Service အဖှဲ့က အစီအစဉျ ရေးရာ မှူး Jeffery Stein က ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကပျရောဂါ ရငျဆိုငျနရေတဲ့အခြိနျမှာ ရခိုငျနဲ့ခငျြးပွညျနယျအပါအဝငျ မွနျမာနိုငျငံသား အားလုံးအတှကျ အထူးရိမျပါတယျ။ စဈရေးပဋိပက်ခတှကေ လှတျလပျစှာ ထုတျဖျောပွောဆိုခှငျ့၊ သတငျးရယူခှငျ့နဲ့ အရပျဖကျဖှဲ့ တှရေဲ့ လှတျလပျတဲ့လုပျပိုငျခှငျ့တှကေို ထိခိုကျစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မွနျမာပွညျသူတှကေို အမရေိကနျအစိုးရအနနေဲ့ တတျနိုငျသမြှ အစှမျးကုနျကူညီပေးဖို့ တိုကျတှနျးတာပါ။ ကိုဗဈ-၁၉ ဟာ လူ့လောကကွီးတခုလုံးကို ခွိမျးခွောကျနတေဲ့အတှကျ ဒီကာလမှာ အပဈအခတျမရပျစဲရငျ၊ သတငျးတှေ လှတျလှတျလပျလပျမရရငျ၊ လှတျလှတျလပျလပျ ထုတျဖျောပွောဆိုခှငျ့မရရငျ၊ အငျတာနကျဆကျသှယျရေးမရရငျ၊ လူသားခငျြး ကူညီမှုအထောကျအပံ့တှမေရရငျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကပျရောဂါက မွနျမာနိုငျငံ သားတှကေို အကွီးအကယျြဒုက်ခရောကျစပေါလိမျ့မယျလို့ ပွောပါတယျ။
တိုကျတှနျးတဲ့အဖှဲ့တှထေဲမှာ Kachin Alliance ဆိုတဲ့ ကခငျြမဟာမိတျအဖှဲ့၊ Karen Organization of America ဆိုတဲ့ အမရေိ ကနျရောကျ ကရငျအဖှဲ့၊ Nationalities Alliance of Burma ဆိုတဲ့ မွနျမာအမြိုးသားမြားမဟာမိတျအဖှဲ့တို့လဲ ပါဝငျပါတယျ။ Kachin Alliance အဖှဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ဂမျဆမျက – တကမ်ဘာလုံးမှာ ကိုဗဈ-၁၉ ဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာ ပွညျတှငျးနိုငျငံရေးက ပွညျသူလူထု ကို ဝနျထုပျဝနျပိုးမဖွဈစခေငျြတာ တကွောငျးပေါ့။ နောကျတခုက ဒီလို ပိတျဆို့မှုဆိုတာ ကနြျောတို့ မွနျမာ့သမိုငျးမှာ အရမျးကွာလာပွီ။ ဒီလိုတိုငျးရငျးသားအခငျြးခငျြး ညီညှတျမှုကို အငျမတနျထိခိုကျနဈနာစတေယျ။ နောကျ စဈရာဇဝတျမှုတှကေို မုနျးတီးမှုကို ပိုပှားစတောပေါ့။ အဲဒါကွောငျ့ တနိုငျငံလုံးအပဈအခတျရပျစဲရေးကို တောငျးဆိုနတောပါလို့ပွောပါတယျ။
ကနြျောတို့အဖှဲ့က ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ဆောငျရှကျနတောပါ။ အရပျဘကျအဖှဲ့တှေ၊ သတငျးမီဒီယာတှအေပါအဝငျ မွနျမာ ပွညျသူတှအေနနေဲ့လဲ ငွိမျးခမျြးရေးမှာ ပါဝငျဆောငျရှကျခှငျ့ရသငျ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပထမဆုံးလုပျရမှာက စားပှဲဝိုငျးဆှေးနှေး ပှဲပါ။ အဲဒီထဲမှာ ရခိုငျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျက လူ့အသိုငျးအဝိုငျးတှေ ပါဝငျသငျ့ပါတယျလို့ အကွံပွုလိုကျပါတယျ။ https://www. rfa.org/burmese/news/national-reconciliation-army-armed-ethnic-group-05132020191938.html
ကယားပွညျနယျ၊ ဖရူဆိုမွို့နယျမှာ ဒီကနေ့ မှနျးတညျ့ ၁၂ နာရီကြျောက လဆေငျနှာမောငျး တိုကျခတျမှုကွောငျ့ မူလတနျး ကြောငျးဆောငျဟောငျးတလုံး အမိုးလနျ ပကျြစီးသှားခဲ့ပါတယျ။
ဖရူဆိုမွို့နယျ ညောငျဇငျရပျကှကျ လှိုငျကျော – ဘောလခဲ ကားလမျးပျေါ ရှပွေညျသာ အ.မ.က ကြောငျးဝငျးအတှငျးက ကြောငျးဆောငျဟောငျးတခု အမိုးလနျပကျြစီးသှားခဲ့တာလို့ ညောငျဇငျရပျကှကျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဒျေါကွူကွူအောငျက ပွောပါ တယျ။“ဒီရှပွေညျသာကြောငျး အနောကျက စာသငျကြောငျးဆောငျ အမိုးလနျသှားတာပဲသိတယျ။ ရှာတှဘေကျမှာတော့ အတိအကတြော့ မသိသေးဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီလောကျတော့ မဖွဈပါဘူးလို့တော့ ပွောတယျ။
လဆေငျနှာမောငျးတိုကျခတျလို့ မွိုကအဝငျပူးပေါငျးစဈဆေးရေးဂိတျမှာ ထားရှိတဲ့ COVID – 19 ကနျြးမာရေးစဈဆေးတဲ့ တဲ အမိုးနဲ့ အကာ ပကျြစီးသှားခဲ့ပွီး လူတှေ ထိခိုကျသဆေုံးမှု မရှိပါဘူး။ http://burmese.dvb.no/archives/388017
ကယားပွညျနယျ၊ လှိုငျကျောမွို့နယျ၊ လောပိတကြေးရှာအုပျစု၊ လောကထုကြေးရှာအနီး မိုးကွိုးပဈမှုကွောငျ့ အသကျ ၄၅ နှဈ အရှယျ အမြိုးသား တဈဦး သဆေုံးသှားပါတယျ။
လောကထုကြေးရှာနေ ဦးပါရယျဟာ ဒီကနမှေ့နျလှဲပိုငျး ၂ နာရီခှဲလောကျက ဝကျစာခူးဖို့ နအေိမျကနေ ထှကျခှာစဉျ ရှာအရှေ့ ဘကျ ၅ ဖာလုံခနျ့အကှာအရောကျမှာ မိုးထဈခြုနျးရှာတဲ့အတှကျ သဈပငျတပငျအောကျမှာ မိုးခိုနစေဉျ မိုးကွိုးလြှပျစီးထိမှနျ သဆေုံးခဲ့တာလို့ မကျြမွငျသကျသတှေကေ ပွောပါတယျ။
သဆေုံးသူဦးပါးရယျမှာ ယာဘကျတငျပါးအောကျ အရပွေားအပူလောငျ စုတျပွဲဒဏျရာတဈခကျြ ခါးမှာညိုမဲဒဏျရာနဲ့ မိုးကွိုး လြှပျစီး စီးဝငျပွီးသဆေုံခဲ့ကွောငျး ရဲတပျဖှဲ့က စဈဆေးတှရေ့တဲ့အတှကျ သမှေုသခေငျးဖှငျ့လှဈစဈဆေးနတေယျလို့ ပွညျနယျ ရဲတပျဖှဲ့က သတငျးထုတျပွနျထားပါတယျ။ မလေ ၁၁ ရကျနမှေ့နျးလှဲပိုငျးကလညျး ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျမှာ မိုးသကျလပွေငျးကြ မိုးကွိုးပဈလို့ အသကျ ၇ နှဈအရှယျ ကလေးငယျတဦးအပါအဝငျ သုံးဦး မိုးကွိုးထိမှနျသ သဆေုံးသှားပါတယျ။ http://burmes e.dvb.no/archives/387821
သြှမျးပွညျ တောငျပိုငျး ညောငျရှမွေို့နယျ အငျးလေးကနျထဲရှိ အငျးခွံကလောကြေးရှာအုပျစုတှငျး ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှု အားနညျးနဆေဲဟု ဒသေခံမြားပွောပွခကျြအရ သိရသညျ။
အငျးလေးကနျထဲရှိ အငျးခွံကလောကြေးရှာအုပျစုတှငျး ရှာ ၆ ရှာပေါငျးမှ မိခငျနှငျ့ ကလေးဌာနခှဲတဈခုတညျးသာရှိပွီး၊ သားဖှား ဆရာမ နှငျ့ အကူတဦးသာရှိကွောငျး ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးတငျဆှဦေး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။ အဆိုပါက သားဖှားဆရာမ နှငျ့ အကူ တဦး ကို အငျးခွံကလော ကြေးရှာအုပျစု အိမျခွေ ၉၀ဝ ခန့၊ အိမျထောငျစုပေါငျး ၁၄၀ဝ ကြျောက အားကိုးနရေပွီး ကြေးရှာဆေးပေးခနျးမရှိသေးကွောငျးလညျး ဦးတငျဆှဦေး က ပွောသညျ။“ကနြျောတို့ ရှာမှာ ကနျြးမာရေးနဲ့ ပတျသကျလာရငျ မိခငျကလေးဌာနခှဲ တဈခုပဲရှိတယျ။ အဲ့ဒီမှာလညျး သားဖှား ဆရာမတဈယောကျ နဲ့ အကူ တဈယောကျပဲ ရှိ တယျ။ ဆရာဝနျ တောငျ မရှိဘူး”ဟု ကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးတငျဆှဦေး ကပွောသညျ။
ထို အငျးခွံကြေးရှာအုပျစုထဲတှငျ အရေးပျေါနမေကောငျးလာပါက ကနျြးမာရေး ဆေးပေးခနျးမရှိ၊ ဆရာဝနျမရှိသဖွငျ့ အရေးပျေါ ဖွဈလာပါက အခကျအခဲမြားစှာရငျဆိုငျနရေကွောငျး၊ ညောငျရှမွေို့နယျရှိ တိုကျနယျဆေးရုံကို သှားရသညျမှာလညျး ခကျခဲ ကွောငျး အငျးဒသေခံမြားပွောပွခကျြအရသိရသညျ။ အငျးခွံကလောကြေးရှာအုပျစုတှငျ ကြေးရှာပေါငျး ၆ ရှာရှိသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16533
ကရငျပွညျနယျ ဖားအံမွို့နယျအတှငျး ငါးမြိုးစိတျမြားစှာကို ကာကှယျထိနျးသိမျးထားသညျ့ မိရငျရှာရှိ ဒျေါလာအငျးတှငျ ယခုနှဈ မကွုံစဖူး ရခေနျးခွောကျမှုမြားနှငျ့ကွုံတှနေ့ရေသညျ့အပွငျ ငါးအမွောကျအမွား သဆေုံးမှုဖွဈပျေါနကွေောငျး ဒျေါလာအငျး ထိနျးသိမျးရေး ကျောမတီထံမှ သိရသညျ။
ယခုလမှစတငျကာ နအေ့ပူခြိနျနှငျ့ ညအပူခြိနျ အလှနျမွငျ့မားလာနမှေုနှငျ့အတူ အငျးရမြေား အဆမတနျခနျး ခွောကျလာမှု မြားကွောငျ့ ၎င်းငျးအငျးအတှငျးထိနျးသိမျးထားသညျ့ ငါးမြား ပိဿာခြိနျထောငျနှငျ့ ခြီသဆေုံးမှုမြား ဖွဈပျေါကွောငျး ဒျေါလာအငျး ထိနျးသိမျးရေးတာဝနျရှိသူမြားက ပွောသညျ။ “ ဒျေါလာအငျးမှာ ဒီလိုရခေနျးခွောကျသှားတာ တဈခါမှမရှိဘူး။ ရခေနျးတော့ အငျးထဲကငါးတှကေ တခြို့သေ သှားတယျ ။ ကနျြတဲ့တခြို့ကလညျး ရကေနညျးပွီး ငါးကမြားတော့ ငါးတဈခြို့ကိုလညျး ဖမျးပွီး အငျးထိနျးသိမျး ရေးရံပုံငှအေဖွဈ ရောငျးလိုကျတယျ။ ငါးဦးစီးဌာနက ရလောတိုငျးကွညျ့တော့ ရအေောကျစီဂငျြက ၁ ပဲရှိတော့ ငါးတှအေသကျမရှငျနိုငျတော့ဘူးပွောတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ငါးတှကေို တဈဝကျရောငျးလိုကျရတယျ” ဟု အငျး ထိနျးသိမျးရေး ကျောမတီ တာဝနျရှိသူတဈဦးဖွဈသညျ့ နျောမွဝငျးက ပွောသညျ။
အငျးရမြေား အဆမတနျခနျးခွောကျလာမှုကွောငျ့ သဆေုံးသှားသညျ့ ငါးအမြိုးအစားမြားထဲမှ ငါးဘတျငါးမြိုး အစားမှာ အမြား ဆုံးဖွဈပွီး ထိုအထဲတှငျ အကွီးဆုံး ၁၀ ပိဿာ အလေးခြိနျရှိသညျ့ ငါးမြားလညျးပါဝငျသညျဟု သိရသညျ။ ဒျေါလာအငျးသညျ ဧကပေါငျး ၆,၅၀ဝ ကြျောအကယျြရှိပွီး မိကရငျ၊ မုက်ကဒိ၊ ခဲတောကျ၊ ကမျးကွီး၊ ကမျးကလေး စသညျ့ ကြေးရှာ ၅ရှာ၏ ဧရိယာထဲတှငျ နယျနိမိတျ ထိစပျနကော ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၃ ခုနှဈတှငျ ပွညျနယျအစိုးရမှ အငျးအား လလေံတငျရနျ ကွိုးပမျးခဲ့မှုမြားရှိသညျ့အတှကျ ဒသေခံမြားမှ မလိုလားဘဲ သဘာဝအတိုငျးသာ ထားရှိစခေငျြသောကွောငျ့ ၂၀၁၆ ခုနှဈတှငျ အငျးထိနျးသိမျးရေးကျောမတီဖှဲ့ပွီး ပွနျလညျ ထိနျးသိမျးလိုကျခွငျးလညျး ဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/2020/05/%e1%80 %b1%e1%80%92%e1%81%9a%e1%80%9c%e1%80%ac%e1%80
အစိုးရတပျနဲ့ ရခိုငျလကျနကျကိုငျ AA အဖှဲ့တို့ တိုကျပှဲတှပွေငျးထနျနတေဲ့ မွပေုံမွို့နယျ ဖကျမှာ ရှိတဲ့ စဈရှောငျ စခနျးတခြို့မှာ ရိက်ခာသယျယူခှငျ့တှေ ပိတျပငျထားတာကွောငျ့ စားနပျရိက်ခာပွတျလပျမှုတှနေဲ့ ကွုံတှနေ့ရေတယျလို့ စခနျးတာဝနျရှိသူတှကေ ပွောဆိုကွပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျမှာတော့ မွပေုံမွို့နယျက ကိုငျးကွီးစဈရှောငျစခနျးမှာတော့ စားနပျရိက်ခာပွတျလပျနသေလို တခွားဒသေတှကေ နေ ရိက်ခာသယျယူခှငျ့ပိတျပငျထားတာ ၃ လလောကျရှိနပွေီလို့ ကိုငျးကွီးစဈရှောငျစခနျးတာဝနျခံ ကိုရှစေိုးက ပွောပါတယျ။ “စားနပျရိက်ခာကတော့ ပွတျလပျမယျ့ အနအေထား ရှိနပွေီခငျဗြာ။ နောကျပွီးတော့ စားနပျရိက်ခာတှေ သယျယူခှငျ့မရဘူးခငျဗြ။ ကိုယျတိုငျသှားယူမယျဆိုရငျလညျး မရဘူး။ လမျးတှမှောကတြော့ မွို့နယျတှေ မကြျောရတာရှိတယျ။တပျမတျောက တားတာ COVID-19 ကွောငျ့တော့ မဟုတျဘူးခငျဗြာ။ တပျမတျောက တားတာကတော့ နောကျအဖှဲ့အစညျးတှနေဲ့ ဆကျနှယျနတေယျ ထငျလို့ တားတာဖွဈမယျ။ ရိက်ခာမသယျရတာတော့ သုံးလလောကျတော့ ရှိနပွေီ။” အဲဒီကိုငျးကွီးစဈရှောငျစခနျးမှာ လူဦးရေ ၃၀ဝ ခနျ့နထေိုငျကွပွီး စားနပျရိက်ခာတှေ အပွငျ မိုးရာသီရောကျတော့မှာ ဖွဈတာကွောငျ့ နထေိုငျဖို့အတှကျ နအေိမျတှေ လို အပျနတေယျလို့လညျး ကိုရှစေိုးက ပွောပါတယျ။
စညငျးစဈရှောငျစခနျးဟာ အစိုးရက တရားဝငျအသိအမှတျပွုထားတဲ့ စခနျးမဟုတျသလို စညငျးစဈရှောငျစခနျးကို လာရောကျ ကူညီကွတဲ့ အဖှဲ့အစညျးအားလုံးကိုလညျး သကျဆိုငျရာအာဏာပိုငျတှကေ တားမွဈထားတယျလို့ ကိုယျတျောသဘာဝနဒီက မိနျ့ပါတယျ။ မွပေုံမွို့နယျမှာ ရိက်ခာသယျယူခှငျ့တှကေို တပျမတျောဘကျကတားမွဈတယျလို့ ဒသေခံတှကေပွောဆိုကွပမေယျ့ တပျမတျောဘကျကတော့ တားမွဈတာမြိုး မဟုတျဘဲ လုံခွုံရေးအရ ဆောငျရှကျရတာလို့ တပျမတျောသတငျးမှနျ ပွနျကွားရေး အဖှဲ့ပွောခှငျ့ရ ဗိုလျခြုပျထှနျးထှနျးညီက ပွောပါတယျ။ အစိုးရအနနေဲ့လညျး တရားဝငျခှငျ့ပွုထားတဲ့ စဈရှောငျစခနျးတှကေို စားနပျရိက်ခာထောကျပံ့တာတှရှေိနပွေီး ကိုယျသဘောနဲ့ ကိုယျဖှငျ့လှဈထားတဲ့ စဈရှောငျစခနျးတှကေိုတော့ စားနပျရိက်ခာ တစုံ တရာထောကျပံ့ပေးတာမြိုး မရှိပါဘူး။
ရခိုငျလကျနကျကိုငျ AA အဖှဲ့ကိုအကွမျးဖကျအဖှဲ့အစညျးအဖွဈ အစိုးရကသတျမှတျကွငွောထားပွီးနောကျမှာ ရခိုငျမွောကျပိုငျး တိုကျပှဲတှလေညျး ပိုမိုပွငျးထနျလာသလို တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ နရေပျစှနျ့ခှာသူတှလေညျး နစေ့ဉျနဲ့အမြှနဲ့ ရှိနတောပါ။ https: //burmese.voanews.com/a/rakhine-conflicts-idp-camp-military/5419455.html
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မူဆယျမွို့ စှမျစျောရပျကှကျတှငျ ယနေ့ ( မေ ၁၂) ည ၁၀နာရီ ဝနျးကငျြ၌ ဗုံးပေါကျကှဲမှုဖွဈပှား ကွောငျး မူဆယျဒသေခံမြားပွောပွခကျြ အရသိရသညျ။
အဆိုပါ ဗုံးပေါကျကှဲမှု နှငျ့ ပတျသကျပွီး အသေးစိတျမသိရှိရသေးသျောလညျး ဗုံးပေါကျကှဲမှုအသံသညျ စှမျစျောရပျကှကျ ပနျးဆေး ပွညျသူ့စဈမြားနထေိုငျသညျ့ နရောဘကျမှ လာကွောငျးလညျး မူဆယျ ဒသေခံမြား ကပွောသညျ။“ဗုံးပေါကျကှဲတဲ့ အသံ ၂ ခကျြ ကွားတယျ။ ၁၀ စက်ကနျ့လောကျပဲခွားတယျ။ သနေတျသံလညျး ကွားတယျ။ သခြောတော့ မသိသေးဘူး” ဟု စိုငျးမောဝျ က ဆိုသညျ။ ဆကျလကျပွီး စှမျစျောဒသေခံ တဦး ပွောပွခကျြအရ“ ပနျးဆေး ပွညျသူ့စဈတှရှေိတဲ့နရောဘကျက အသံပဲ။ ကနြျောတို့လညျး နရောကို လိုကျရှာနတေယျ။ ပနျးဆေး ဘကျကလညျး တခါဖွဈပွီးဘူးတော့ အဲ့ဘကျလညျး လို့ ထငျတယျ” ဟု သြှမျးသံတျောဆငျ့ သို့ပွောသညျ။
ယနေ့ ဗုံးပေါကျကှဲမှုသညျ အလှနျကယျြလောငျသျောလညျး မညျသညျ့နရောတှငျ ပေါကျသညျကို တိကစြှာမသိရှိရပေ။ ထို ဗုံးပေါကျကှဲမှုနှငျ့ ပတျသကျပွီး မူဆယျမွို့ ရဲစခနျးကို သြှမျးသံတျောဆငျ့က ကွိုးစားဆကျသှယျမေးမွနျးသျောလညျး ပွနျလညျ ဖွကွေားခွငျးမရှိပေ။ ယမနျနညေ့ ၈ နာရီခှဲတှငျလညျး မူဆယျမွို့အဝငျ တိုးဂိတျတှငျပွငျးထနျသညျ့ ပေါကျကှဲမှု ဖွဈပှားခဲ့သညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16527
နရေပျစှနျ့ခှာသှားသူမြား ပွနျလညျလကျခံရေးနှငျ့ဒသေတှငျး ဖှံ့ဖွိုးရေးစီမံခကျြမြားပူးပေါငျးဆောငျရှကျရနျ အစိုးရနှငျ့ကုလသမဂ်ဂ ဖှံ့ဖွိုးမှုအစီအစဉျ (UNDP) နှငျ့ ကုလသမဂ်ဂ ဒုက်ခသညျမြားဆိုငျရာ အဂေငျြစီ (UNHCR) တို့အကွား တနှဈသကျတမျးတိုး နားလညျမှုစာခြှနျလှာအား မလေ ၁၁ ရကျနကေ့ နပွေညျတျောတှငျ လကျမှတျရေးထိုးခဲ့သညျ။ နားလညျမှုစာခြှနျလှာအရ ပွနျ လညျလကျခံရေးလုပျငနျးမြား အထောကျအကူပွုရေးနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျးရှိ မောငျတော၊ဘူးသီးတောငျ၊ ရသတေ့ောငျ မွို့နယျမြားတှငျမွပွေငျကှငျးဆငျးလလေ့ာမှုမြားနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးစီမံခကျြမြားကို ၂၀၂၀ ခုနှဈ ဇှနျလ ၆ ရကျနမှေ့ ၂၀၂၁ ခုနှဈ ဇှနျလ ၅ ရကျနအေ့ထိ တနှဈတာ ဆကျလကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားမညျ ဖွဈသညျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈမှ ၂၀၂၀ ခုနှဈအထိ နှဈနှဈတာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခဲ့ရာတှငျလညျး မွပွေငျကှငျးဆငျးလလေ့ာမှု ၇ ကွိမျနှငျ့ လကျငငျးအကြိုးသကျရောကျစမေညျ့ လုပျငနျးစီမံကိနျး ၄၅ ခုအား အစိုးရကခှငျ့ပွုပေးခဲ့ပွီး ပွောငျးလဲလာသညျ့ အခွေ အနမြေားအပျေါမူတညျကာ ပိုမိုအကြိုးရှိမညျ့ လုပျငနျးမြား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး အလုပျသမား၊ လူဝငျမှု ကွီးကွပျရေးနှငျ့ ပွညျသူ့အငျအားဝနျကွီးဌာန ဝနျကွီး ဦးသိနျးဆှေ က အဆိုပါအခမျးအနားတှငျ ပွောကွားထားသညျ။ လကျရှိ တှငျ နရေပျစှနျ့ခှာသူမြား ပွနျလညျလကျခံရေးနှငျ့ပတျသကျ၍ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံတို့အကွား ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာ ၂၇ ရကျနတှေ့ငျ စတငျလကျမှတျရေးထိုးကာ ဆောငျရှကျလြှကျရှိသျောလညျး ယနအေ့ထိ နှဈနိုငျငံ သဘောတူညီ ခကျြဖွငျ့ ပွနျလညျဝငျရောကျသူမရှိသေးကွောငျး မောငျတောခရိုငျ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးမှူး ဦးစိုးအောငျက ပွောသညျ။
UNDP နှငျ့ UNHCR တို့က “ဒုက်ခသညျမြား မိမိဆန်ဒအလြောကျ လုံခွုံစှာနှငျ့ဂုဏျသိက်ခာရှိစှာ နရေပျပွနျခွငျးအတှကျ သခြော သော အခွအေနတေရပျ ဖွဈပျေါစရေနျ ဖနျတီးပေးခွငျးနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံတှငျး နထေိုငျဆဲလူမြား၏ လူ့အခှငျ့အရေးခံစားခှငျ့မြား တိုးတကျလာစရေနျမှာ မွနျမာနိုငျငံတျောအစိုးရ၏ တာဝနျဖွဈပွီး၊ ဤလုပျငနျးအတှကျဆကျလကျ ကူညီပံ့ပိုးပေးသှားမညျ”ဟု ဆိုသညျ။ ၂၀၁၇ ခုနှဈတှငျ အာရကနျ ရိုဟငျဂြာ ကယျတငျရေးတပျမတျော(ARSA) က ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျးရှိ မွနျမာ လုံခွုံရေးစခနျးမြားအား အလုံးအရငျးနှငျ့ ဝငျရောကျတိုကျခိုကျခဲ့ပွီးနောကျ တပျမတျောက နယျမွရှေငျးလငျးမှုမြား ပွနျလညျ ပွုလုပျရာတှငျ ဒုက်ခသညျ ၇ သိနျးကြျော နရေပျစှနျ့ခှာခဲ့ရပွီး ယငျဖွဈစဉျမြားအတှငျး ရာဇဝတျမှုကြူးလှနျခဲ့သညျ့ လုံခွုံးရေး တပျဖှဲ့ဝငျမြားကိုလညျး ဥပဒအေရ အရေးယူနိုငျရနျ အစိုးရက ဆောငျရှကျလြှကျရှိသညျ။ https://burma.irrawaddy.com /news/2020/05/13/222553.html
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး ညောငျရှမွေို့နယျအတှငျးရှိ ခရမျးခဉျြသီး စိုကျတောငျသူမြားသညျ ယခုနှဈ ကိုဗဈ ကာလကွောငျ့ အရှုံး မြားဖွငျ့ ရငျဆိုငျနရေကွောငျး တောငျသူမြား ပွောခကျြအရသိရသညျ။ ခရမျးခဉျြသီးစိုကျတောငျသူ အမြားစုသညျ ယခုနှဈတှငျ ခရမျးခဉျြသီး ဈေးအဆမတနျကသြောကွောငျ့ ခွံသမားမြား အရငျးမရကွကွောငျး သိရသညျ။
“လကျရှိ အခွနေကေ ဒီနှဈဈေးဆိုရငျ တအားပေါလာတယျ။ ခွံသမားတှအေရငျးမရကွဘူး။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက ဈေးကောငျးတယျ။ ဒီနှဈက လူတဈရာမှာဆို ၉၀ လောကျက အရှုံးပွတယျ”ဟု ကလေောကြေးရှာနေ ခရမျးခဉျြသီးခွံပိုငျရှငျ ဦးဝငျးနိုငျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။ ယခုနှဈ ခရမျးခဉျြသီး ဈေးနှုနျးမြားမှာ အစောပိုငျး ကာလတှငျ တတငျး ( ပိဿာ ၃၀ ) လြှငျ ၃၀ဝဝ ကပျြနှငျ့ ၃၅၀ဝ ကပျြ ကွားသာရရှိပွီး၊ရငျးနှီးမွုပျနှံထားသညျ့ အလုပျသမားခသာ ရရှိကွောငျး၊ ဆေးဖိုး၊ ဓာတျမွသွေဇာ ဖိုး မရကွောငျးလညျး ဦးဝငျးနိုငျက ပွောသညျ။ သို့သျော ယခု ရကျပိုငျးအတှငျး ခရမျးခဉျြသီးဈေး ၁ တငျး ကပျြ ၉၅၀ဝ တကျလာသဖွငျ့ အမွတျမရသျောလညျး အရငျး ပွနျရရနျ မြှျောလငျ့နရေကွောငျး ဦးဝငျးနိုငျ ကပွောသညျ။
“အသီး တအားထှကျတဲ့ခြိနျက ဈေးကမရှိဘူး ကနြျောတို့ တပနျးရှုံးတာပေါ့။ ခရမျးခဉျြသီး ထှကျကွိမျမြားလေ အသီးလြှော့ လေ။ ဈေးကောငျးလာရငျလညျး အတငျးသိပျမထှကျတော့ဘူး။ အဲ့မှာပဲ ကနြျောတို့က စရှုံးနပွေီ”ဟု ခွံပိုငျရှငျ တဦးကလညျး ထပျလောငျးပွောသညျ။ အငျးလေးကနျမှထှကျသညျ့ ခရမျးခဉျြသီးသညျ မွနျမာပွညျအနှံ့ကို တငျပို့ရောငျးခသြညျ့ ကုနျစိမျးဖွဈ ပွီး ယခုနှဈ ကိုဗဈ-၁၉ ကပျရောဂါကွောငျ့ လမျးပနျး ဆကျသှယျရေး ခကျခဲမှု၊ ကုနျစညျကားမြား ပွေးဆှဲမှု ရှားပါးလာသဖွငျ့ အရှုံးပျေါမှု ဖွဈပှားခဲ့သညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16537
ကရငျပွညျနယျ မွဝတီမွို့ အမှတျ ၄ ရပျကှကျ ကွခတျတောကုနျးဆငျး ဘုရငျ့နောငျလမျးမကွီးနံဘေးတှငျ စားသောကျဆိုငျ အမညျခံပွီး လိငျဖြျောဖွရေေးလုပျငနျး လုပျဆောငျနသေညျ့နအေိမျအား ယမနျနေ့ (မလေ ၁၃ ရကျနေ့ ည ၁၀ နာရီခနျ့က ပွညျ သူမှ အသှငျယူ သတငျးပေးတိုငျကွားမှုကွောငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားက ဝငျရောကျရှာဖှဖေမျးဆီးမှုမြားပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
Covid-19 အရေးပျေါကာလတှငျ အခွားသော သာမနျစားသောကျဆိုငျမြား ပိတျထားသျောလညျး လူသှား လူလာ မြားသော လမျးမကွီးနံဘေးရှိ အဆိုပါ ပွညျ့တနျဆာရုံ မပိတျဘဲ ဖှငျ့ထားကွောငျးသိရှိရ၍ တာဝနျသိပွညျသူမြား အနဖွေငျ့ ယခုလို အသှငျ ယူပွီး သကျဆိုငျရာသို့ ကိုယျတိုငျသှားရောကျ တိုငျကွားရခွငျးဖွဈသညျဟု မွဝတီမွို့ အမှတျ ၄ ရပျကှကျတှငျ နထေိုငျသူ ကိုထှနျးထှနျးက ပွောသညျ။ “ဒီပွညျ့တနျဆာရုံ ဖှငျ့ထားတဲ့သတငျး ရရှိတဲ့အတှကျ မလေ ၁၃ ရကျနေ့ ည ၈ နာရီခှဲအခြိနျ လောကျမှာ ကိုရဲမငျး (AACအဖှဲ့ဝငျ) အပါအဝငျ ကနြျောတို့ ၅ ယောကျအဖှဲ့ထဲမှ ၂ ယောကျက အဲ့ဒီရုံထဲဝငျသှားပွီး အသှငျယူ ကာ ဆကျရှငျကွေး တဈဦးကို ၁၅,ဝ၀ဝ စီ ပေးခပြွေီး အခွအေနအေား စုံစမျးခဲ့ပါတယျ။ အတှငျးဘကျက ပွညျ့တနျ ဆာဖမျးဆီး ရေး ဥပဒလေုပျထုံးလုပျနညျးနှငျ့အညီ သကျသအေခိုငျအမာယူပွီး ည ၉ နာရီအခြိနျခနျ့မှာ အမှတျ ၄ ရပျကှကျရုံးသို့ သှား ရောကျပွီး အုပျခြုပျရေးမှူးထံ သတငျးပေးတိုငျကွားခဲ့ပါတယျ။”ဟု ကိုထှနျးထှနျးက ပွောသညျ။
မွဝတီမွို့မရဲစခနျးမှ နယျထိနျးအရာရှိ ဒုရဲအုပျ မငျးမငျးထှနျး၊ အပိုငျနယျထိနျး ရဲတပျကွပျထှနျးမငျးလတျအပါအဝငျ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ မြားနှငျ့ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးတာဝနျရှိသူမြားက အဆိုပါ အမှတျ ၄ ရပျကှကျ ဘုရငျနောငျလမျးမကွီးတှငျ ဇာနညျစားသောကျ ဆိုငျ အမညျခံပွီး လိငျဖြျောဖွရေေး လုပျငနျးလုပျဆောငျနသေော နအေိမျအား ဝငျရောကျရှာဖှခေဲ့ရာ ဆိုငျအတှငျး၌ လိငျဖြျော ဖွရေေးလုပျငနျး လုပျကိုငျရနျအလို့ငှာ အခနျးငယျမြားဖှဲ့ပွီး ခေါငျးအုံးနှငျ့ အိပျယာခငျးမြားထားရှိခွငျးတို့ကို တှရှေိ့ရသညျ့အတှကျ အမြိုးသား ၁ ဦးနှငျ့ အမြိုးသမီး ၃ ဦးအား မွဝတီမွို့မရဲစခနျးသို့ ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ ဘုရငျ့နောငျလမျးမကွီးနံဘေး အမှတျ ၄ ရပျကှကျ မွဝတီမွို့တှငျ လိငျဖြျောဖွရေေးလုပျငနျးကို နအေိမျ၌ဖှငျ့၍ လုပျငနျးအား စီမံခနျ့ခှဲလုပျကိုငျသူ အမြိုးသားအား (ပ) ၃၇၉/၂၀၂၀ ပွညျ့တနျဆာအကျ ၅ (၁)ဖွငျ့ လညျးကောငျး၊ လိငျဖြျောဖွေ ရေးလုပျငနျးလုပျကိုငျရနျရောကျရှိနသေော အမြိုးသမီး ၃ ဦးအား (ပ)၃၈၀/ ၂၀၂၀ ပွညျ့တနျဆာအကျ ၇(၁)ဖွငျ့လညျးကောငျး မွဝတီမွို့မရဲစခနျးက အမှုဖှငျ့အရေးယူထားကွောငျး သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/05/%e1%80%85%e1%80 %ac%e1%80%b8%e1%80%b1%e1%80%9e%e1%80